မြန်မာပြည်ပညာရေးကို အမေရိ ကန်နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးစနစ်နဲ့ယှဉ်ကြည့်ရင် အခြေခံပညာရေးစနစ်နဲ့ အဆင့်မြင့်ပညာရေးစနစ် ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့ ထင် ပါတယ်။ နိုင်ငံအတော်များများမှာ အခြေခံပညာကို အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းမှာ အစိုးရက တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ကိုင်တွယ်ထားပါတယ်။ ဒီအရွယ်မှာက စာသင်ကြားရေး အပြင် စာရိတ္တ၊ အားကစား၊ စည်းကမ်းအပြင် အခြားသိသင့်သိထိုက်တဲ့ ပြင်ပ ဗဟုသုတတွေကို အများဆုံးပေးရမယ့်အရွယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပါ။ မြန်မာပြည်မှာက တော့ ကျုရှင်၊ ဘော်ဒါဆောင်၊ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေပေါ်ပေါက်လာတာ ကျွန် တော်ကတော့ ကောင်းတယ်လို့မမြင်ပါ ဘူး။ တက္ကသိုလ်ဆိုတာက လူလားမြောက် တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ လုပ်သင့်တာကို ရွေးချယ်ရမယ့်အချိန်၊ ကိုယ်နဲ့အံဝင်မယ့်ပညာရေးကို ရွေးသင့် တဲ့အချိန်ပါ။ အစိုးရရဲ့ပါဝင်မှု အနည်းဆုံး ဖြစ်ရမှာပါ။ မြန်မာပြည်မှာကတော့ ပုဂ္ဂလိ က တက္ကသိုလ်တွေအရင်မပေါ်ဘဲ ပုဂ္ဂလိ ကအထက်တန်းကျောင်းတွေ အရင်ပေါ် နေပါတယ်။ အခုတော့ နိုင်ငံခြားက တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုနာမည်ခံပြီး မြန်မာပြည်မှာ လုပ်စားလာတာ မကောင်းဘူးလို့ပဲ မြင်မိ ပါတယ်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာက ပညာရေးကို အစိုးရကပဲ လုံးဝတာဝန်ယူထားတာ မှားနေပါတယ်။ ကျွန်တော်ထင်တာတော့ အားလုံးမပြောင်းနိုင်သေးရင်တောင် ပထ မပိုင်းမှာ အစိုးရက နိုင်သလောက်ကို ယခုအတိုင်းပဲ ဆက်လက်ထောက်ပံ့သင့်ပြီး ကျောင်းအုပ်တွေကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ပိုပေးသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။ ဥပမာ ငွေကြေးတတ် နိုင်တဲ့ ကျောင်းသားမိဘတွေဆီက ကျောင်းလခကို သင့်တော်တဲ့ပမာဏနဲ့ကောက်သင့်ပြီး အဆင်မပြေသူတွေကိုတော့ ထောက်ပံ့ကြေးပေးသင့်ပါတယ်။ သီးသန့်အလှူ ငွေတွေလည်းလက်ခံပြီး လက်ရှိဆရာဆ ရာမတွေကို လစာအပြင် အပိုဆုအနေနဲ့ ခွဲဝေပေးသင့်ပါတယ်။ တကယ်ဖြစ်ရမှာက တော့ မြို့ရွာရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုအခွန်ကနေ မိမိ မြို့ရွာရဲ့ပညာရေး ပိုကောင်းမွန်အောင် ကျောင်းအုပ်တွေက ကြံဆောင်ရမှာပါ။ အခုလို မြန်မာပြည်ရဲ့ဘတ်ဂျက် အခက် အခဲတွေ များနေခြင်းကလည်း ပညာရေး တိုးတက်ဖို့ အဟန့်အတားဖြစ်စေပါတယ်။ ကိုယ့်ကျောင်းက ဆရာ၊ ဆရာမလစာကို မြို့ရဲ့စီးပွားရေးအလိုက် ကောက်ခံရရှိတဲ့ ပမာဏအပေါ်မူတည်ပြီး ကျောင်းအုပ်ကြီး က သတ်မှတ်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှ ကျုရှင်စ နစ်ပျောက်ပြီး ကြိုးစားသင်တဲ့ ဆရာ၊ ဆ ရာမတွေကို များစွာအထောက်အကူဖြစ် စေမှာပါ။
အခြေခံပညာမှာတော့ ပညာရေးနဲ့ ဘွဲ့ရထားတဲ့ B.ED သင်တန်းဆင်း သက် သက်သာ သင်ကြားခွင့်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နုနယ်တဲ့ကလေး တွေကိုထိန်းကျောင်းရာမှာ အတွေ့အကြုံလိုသလို စနစ်ကျဖို့လည်းလိုပါတယ်။ သို့ သော်လည်း တချို့ဘာသာရပ်တွေအ တွက် ပြင်ပမှာစာသင်ကောင်းတဲ့ ကျုရှင် ဆရာတွေကို အစိုးရကျောင်းတွေမှာ အ ချိန်ပိုင်းသင်ပေးဖို့ ကျောင်းအုပ်က စီစဉ် ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တက္ကသိုလ်မှာတော့ B.ED ဆင်းတွေထက် ကိုယ်သင်မယ့်ဘာသာရပ်တွေကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သူတွေကိုပဲ စနစ်တကျရွေးချယ်ပြီး သင်ကြားခွင့်ပေးသင့်ပါတယ်။
အထက်ကပြောသလို လက်ရှိတက္ကသိုလ်တွေမှာ အစိုးရကပါဝင်မှုမလုပ်ဘဲ ပုဂ္ဂလိကအုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာသာ ထားသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ ဖက်စပ်အုပ်ချုပ် ရေးအပြင် ပုဂ္ဂလိကသက်သက်ကျောင်းတွေကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဖက် စပ်ကတော့ အစိုးရက ထောက်ပံ့မှုအချို့ပေးပြီး ငွေကြေးချို့တဲ့သူတွေကို စကော် လာလိုမျိုး ထောက်ပံ့ကြေးဆုလိုမျိုးနဲ့လက်ခံသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုကျောင်းမျိုးဆိုရင် တော့ အစိုးရကသတ်မှတ်တဲ့နှုန်းထားနဲ့ပဲ ကျောင်းလခကောက်သင့်ပါတယ်။ အမေ ရိကန်မှာတော့ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေလည်း နှစ်စဉ်ကျောင်းသားအရေအတွက် တချို့ကို စကော်လာပေးပါတယ်။
“ပညာလို အိုသည်မရှိ ”စကားလိုပဲ ပညာရှာသူတွေကို အသက်နဲ့ လုံးဝကန့် သတ်မထားသင့်သလို သင်ကြားမယ့်ဆရာ ဆရာမတွေကိုလည်း အသက်နဲ့ ပင်စင်မ ပေးသင့်ပါဘူး။ နိုင်ငံအတော်များများမှာ ကျောင်းဆရာတွေကို သူတို့ကျန်းမာနေ သ၍ စိတ်ဝင်စားနေသ၍ သင်ကြားခွင့် ပေးပါတယ်။ လစာလည်း အပြည့်ပေးပါ တယ်။ တချို့ဆိုရင် သူတို့အလုပ်တွေက နေပင်စင်ယူပြီးမှ ကျောင်းတွေမှာ စာပြန် သင်နေကြပါတယ်။ အသက် ၉၀ ကျော်တက္ကသိုလ်ဆရာတစ်ယောက်ကိုတောင် ကျွန်တော်တွေ့ဖူးပါတယ်။ လုပ်ငန်းအ တွေ့အကြုံတွေအရ ခေတ်နဲ့အဆက်မ ပြတ်တော့ သူ့အတွေးအမြင်တွေဟာ လတ်ဆတ်နေတုန်းပါ။ မြန်မာပြည်မှာ လည်း ဌာနဆိုင်ရာတွေကနေ ပင်စင်ယူ သွားပေမယ့် သူလုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်အတွေ့ အကြုံ၊ ဘ၀အတွေ့အကြုံတွေကို နောက် မျိုးဆက်တွေဆီ ဝေမျှပေးတာကို လက်ခံ သင့်ပါတယ်။ လက်ရှိအောင်မြင်နေတဲ့ တ ချို့စီးပွားရေးသမားတွေကိုလည်း ကျောင်း တွေကိုအလည်ဖိတ်ပြီး ဝါသနာပါရင် စာ သင်ခွင့်ပေးသင့်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်မှာ တုန်းက စာသင်ခမယူဘဲ အချိန်ပေးပြီး စာသင်တဲ့ သူဌေးဆရာသုံးယောက် တွေ့ဖူးပါတယ်။ သူတို့ရဲ့စိတ်က မြန်မာလို ပြောရင် “ပညာဒါန”အပြင် သူတို့ရဲ့ရာဇ ဝင်ကို ထူးခြားအောင်ရေးနေခြင်းပါ။
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ ပညာရေးကို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်စေခြင်းပါ။ တကယ်ထူးချွန်တဲ့ လူငယ်လူရွယ်တွေကို လုပ်ငန်းအတွေ့အ ကြုံရအောင် လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ကျောင်းမ ပြီးခင် အချိန်ပိုင်းအလုပ် သို့မဟုတ် ငွေ ကြေးထောက်ပံ့ပြီး Group project လို မျိုး သူတို့သိချင်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက် Research လုပ်ခိုင်းသလိုမျိုး ထောက်ပံ့ပေး သင့်ပါတယ်။ ကျောင်းတွေကလည်း ခွင့် ပြုသင့်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Scholarship program တွေနဲ့ ထူးချွန်သူတွေကို မြေ တောင်မြှောက်ပေးသင့်ပါတယ်။
မကြာခင်ကတွေ့လိုက်တဲ့သတင်း ကတော့ မြန်မာပြည်ပညာရေးကို သင် ကြားရေးစနစ်သစ် ပြောင်းတော့မယ်ဆို တာပါပဲ။ ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ လက် ရှိစနစ်ဟာ မှားနေတာသေချာတော့ ပြောင်းလဲမှုကို အပြည့်အဝထောက်ခံပါ တယ်။ စနစ်သစ်က ကျောင်းသားတွေကို စာမေးပွဲတစ်ခုတည်းနဲ့ မဆုံးဖြတ်တော့ဘဲ Grade system နဲ့သွားမယ်ဆိုတာရယ် မတော်တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို နယ်ဝေး တွေပို့မယ်ဆိုတာရယ်ပါ။ ကောင်းတာရော မကောင်းတာရော ဆရာ၊ ဆရာမတွေ ဘက်ကရော ကျောင်းသားတွေဘက်က ရော ရှုထောင့်မျိုးစုံက ဆွေးနွေးကြည့်ရ အောင်။
ပထမဆုံးအပိုင်းကတော့ ဆရာဆ ရာမတွေဘက်က စဉ်းစားကြည့်ပါမယ်။ ယနေ့အထိရှိနေတဲ့ အဆင့်စနစ်ကို ခေါက် ရိုးကျိုးနေတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေဟာ အခု စနစ်သစ်အတွက်မှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ဘက်စုံသင်ကြားရေးကို အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ လား၊ မဖြစ်သေးဘူးလားဆိုတာ စဉ်းစားစ ရာဖြစ်နေပါပြီ။ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ သိန်း နဲ့ချီတဲ့ ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ စိတ်နေ စိတ်ထားကို အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်လှပါဘူး။ ရိုးရိုးသင်တန်းတွေ ပေးမယ်ဆိုရင်လည်း ကုန်ကျစရိတ်ကို ခံနိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ ဒီ တော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ကုန်ကျစရိတ် လည်းသက်သာ အဆင်လည်းပြေနိုင်မယ့် အကြံကတော့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို ဖေ့ဘွတ် closed group ထဲကို သေချာစိစစ် ပြီးထည့်၊ ပြီးရင်ဝန်ကြီးဌာနက သူတို့ဖြစ် စေချင်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထား လုပ်ပေးစေ ချင်တဲ့ သင်ခန်းစာနမူနာလေးတွေ သင်ပြ ပေးစေချင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ဆရာ၊ ဆ ရာမတွေ ဘယ်လောက်မှတ်မိနားလည်သလဲဆိုတာ ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိမေးခွန်းလေးတွေ မေးသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ် ဆိုက်နဲ့လုပ်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါ။ ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်သင့်သလဲဆိုတော့ စနစ်သစ်ရဲ့ အခြေခံသဘောတရားကိုက စာအုပ်ထဲကစာကို သင်တာထက်အပြင် တခြားဗဟုသုတတွေကို သင်ရမှာဖြစ်တာကြောင့် ဆရာ၊ ဆရာမတွေရဲ့ အရည်အ သွေးဟာ ထက်မြက်နေရမှာပါ။ စာသင်ခန်းဟာ လွတ်လပ်တဲ့ ဆွေးနွေးခန်းပုံစံမျိုး ဖြစ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဆရာ၊ ဆရာမ တွေလည်း ကျောင်းသားတွေကို ရမ်းတုတ် တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ သေသေချာချာသိပြီးဖြေတာမျိုးပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ ဆရာ၊ ဆရာ မတွေရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကို အတတ်နိုင် ဆုံး နည်းအောင်လုပ်ပေးသင့်ပါပြီ။ သူတို့ မှာလည်း မိသားစုတွေနဲ့ဆိုတော့ သူတို့ တကယ်နေပျော်တဲ့နေရာမှာပဲ နေစေချင် ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် နယ်ဝေးကျောင်းတွေမှာ ဆရာ၊ ဆရာမ ရှားသွားမှာပေါ့ဆိုပြီး ဆင်ခြေပေးကြမှာပါ။ မြန်မာပြည်မှာမှားနေ တာက ဆရာ၊ ဆရာမကို အစိုးရဝန်ထမ်း အဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်းပါ။ ဒီတော့ အရင်ခေတ်တွေတုန်းကဆိုရင် နိုင်ငံရေး အကျိုးငှာအသုံးချတဲ့ လူတန်းစားတစ် ရပ်လိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဟိုအသင်း ဒီအသင်း ဟိုပါတီဒီပါတီ အတင်းဝင်ခိုင်းပြီး သူတို့လုပ်ချင်တဲ့ပွဲတွေကို မဖြစ်မနေ တက်အောင် အကျပ်ကိုင်ခဲ့တာ မှတ်မိကြ ဦးမှာပါ။ တကယ်ဆိုရင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပညာရေးကိစ္စကိုပဲ အဓိကထားပြီး ပြုပြင်သင့်ပြီး ဝန်ထမ်းရေးရာတွေကို သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်၊ မြို့နယ်တွေကို ခွဲပေးလိုက်သင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ ပိုင် ဆိုင်မှုခွန်လို စနစ်ပေါ်လာရင် ကိုယ့်မြို့ နယ်ကျေးရွာကို ကိုယ့်ဘတ်ဂျက်နဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေရဲ့လစာကို အပြိုင်အဆိုင်ပေး ပြီး စာသင်ကြားမှုညံ့တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ ကို အနားပေးတာမျိုးလုပ်ပေးရင် ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ နယ်ဝေးကကျောင်း တွေအတွက်လည်း ပြည်နယ်၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေက အထူးထောက်ပံ့ ကြေးတွေ ခံစားခွင့်တွေနဲ့ဆွဲဆောင်ရင် ရနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ့်ပြည်နယ်မှာ ကိုယ့်လူမျိုး ဆရာ၊ ဆရာမ အခွင့်အရေး တွေပိုရအောင် ကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင် ကချင်စကားတတ်သူကို ဦးစားပေးမယ်ဆို တာမျိုးနဲ့ ဆွဲဆောင်သင့်ပါတယ်။ လက်ရှိ ဆရာ၊ ဆရာမတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေ ဥပမာ ပင်စင်လိုအရာမျိုးကိုလည်း ပြည်နယ်အ စိုးရအောက်ပို့ပြီး ဆက်ထားလို့ရပါတယ်။ အတိုဆုံးပြောရရင်တော့ ဆရာ၊ ဆရာမ တွေဟာ အစိုးရဝန်ထမ်းမဖြစ်သင့်ပါ။ မြို့၊ ရွာဝန်ထမ်းပဲဖြစ်သင့်ပါတယ်။
ကျောင်းသားမိဘတွေဟာ ကောင်း မွန်တဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုရောက်ရှိဖို့ အဓိက ထောက်ပံ့ပေးရတဲ့ လူတန်းစားဖြစ်လို့ သူ တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကို အခုကတည်းက ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါပြီ။ ပထမအနေနဲ့ ပြောရရင်တော့ မြန်မာပြည်ကကလေးမိဘ တွေမှာရှိတဲ့ 'ငါ့ကလေးကအတော်ဆုံး' ဆိုတဲ့စိတ်ကို ဖျောက်ရပါမယ်။ စာကြိုးစား ဖို့တော့ အားပေးရမှာဖြစ်ပြီး အဆင့်တွေ ကို ခေါင်းထဲကထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ ဘာသာရပ် တစ်ခုမှာ ၉၀ ရပေမယ့်လည်း ၈၀ ရတဲ့သူ နဲ့ Grade တူမှာကို လက်ခံပေးရမှာဖြစ်ပါ တယ်။ အမေရိကန်ပညာရေးမှာတော့ Grade A ဆိုရင် 4.0, B ဆိုရင် 3.0, C ဆိုရင် 2.0, D ဆိုရင် 1.0 ဆိုပြီး သတ်မှတ် ထားပါတယ်။ စုစုပေါင်း ပျမ်းမျှ Grade ကို ယူနစ်နဲ့မြှောက်ပြီး ပြန်စားပါတယ်။ မြန်မာပြည်ပညာရေးစနစ်သစ်ကတော့ အင်္ဂလန်အမှတ်ပေးစနစ်ကို အခြေခံထား ပြီး အောင်မှတ်ကို ၄၀ ကစပြီး ဂုဏ်ထူးကို ၈၀ (သို့မဟုတ်) A လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ကတော့ ၆၅ က အောင်မှတ် ဖြစ်ပြီး ၉၀ ကျော်မှ A ရပါတယ်။ ဘယ်စ နစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါကတော့အဓိကမကျလှပါ။
ဒုတိယအရေးကြီးတဲ့အချက်က တော့ ဒီစနစ်ကိုအမှန်အကန်ကျင့်သုံးရင် ကလေးတွေကို ကျူရှင်ပို့ဖို့ထက် သူ့ရဲ့ အိမ်စာတွေအတွက် အချိန်ပေးဖို့၊ တခြား သောဝါသနာပါရာအလုပ်တွေ ဥပမာ ပန်းချီဆွဲခြင်း၊ အားကစားလုပ်ခြင်း၊ ပုစ္ဆာ တွေကို အုပ်စုဖွဲ့လုပ်စေခြင်း စတာတွေအ တွက် လိုအပ်တဲ့နေရာထိုင်ခင်းတွေ ပြင် ဆင်ပေးဖို့လိုအပ်လာပါမယ်။ ကျောင်း တွေကလည်း အိမ်စာတို့ တခြားလှုပ်ရှားမှု တွေမှာ အမှတ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျု ရှင်ကိုပို့ပေးခြင်းဟာ ကလေးတွေကိုယ် တိုင် စဉ်းစားအဖြေရှာချင်တဲ့စိတ်ကို လျော့ကျစေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဉာဏ်ရည် ပြည့်မီတဲ့ကလေးတွေကို ပြင်ပကျူရှင်အ တင်းပို့တာမျိုးမလုပ်မိဖို့ အရေးကြီးပါ တယ်။
နောက်တစ်မျိုး အရေးကြီးတာက တော့ ငွေရေးကြေးရေးပါ။ အခုလို Grade ပညာရေးစနစ်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် ကလေး တွေ ကျောင်းမှာရော ကျောင်းပြင်ပမှာပါ အထွေထွေ activities တွေအတွက် လက် တွေ့စာသင်ခန်းတွေ၊ ကွန်ပျူတာခန်းတွေ၊ ကလေးငယ်တွေအတွက် ဆော့ကစားပြီး လုပ်ရမယ့်အခန်းတွေ အဆိုပါအခန်းတွေ အတွက် ကုန်ကျမယ့် ပစ္စည်းကိရိယာတွေ ကို မိဘပြည်သူတွေက ထောက်ပံ့ရမှာဖြစ် ပါတယ်။ ကျူရှင်မှာကုန်ကျရမယ့်ငွေတွေ ကို ကျောင်းမှာလိုအပ်ရင် ထောက်ပံ့ရပါ မယ်။
အမှန်မှာ 'ကျာင်းသားတစ်ယောက် ရဲ့အရည်အချင်းဟာ ကျောင်းသားက ဆ ရာကိုမေးတဲ့မေးခွန်းရဲ့ အဆင့်အတန်းအ ပေါ်မှာ ဆုံးဖြတ်ရမှာ' ဖြစ်ပါတယ်။ ဉာဏ် ရည်နိမ့်ကလေးတွေ ဗဟုသုတနည်းတဲ့ ကလေးတွေရဲ့မေးခွန်းဟာ ရိုးရှင်းပြီး ပညာသားမပါပါဘူး။ ကျောင်းသားတွေ စာသင်ခန်းတွေမှာပျော်ဖို့ရာ '' ပျော်ရွှင်မှု၊ ချီးမွမ်းမှု၊ အောင်မြင်မှု၊ အသိအမှတ်ပြုမှု တွေအပေါ် မူတည်ပါတယ်" ဒါ့ကြောင့် ဆရာရယ် မိဘရယ်က ဒီအချက်တွေကို ထောက်ပံ့ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေကို အဓိကအားဖြင့် နှစ်မျိုး ခွဲခြားထိန်းချုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ opposite sex ကို ဆွဲဆောင် မှုမရှိသေးတဲ့အရွယ်နဲ့ အရှက်ရှိတဲ့အရွယ်ပါ။ အရှက်အကြောက်ကို နားမလည်သေးတဲ့အရွယ်ကလေးတွေကို ဆွဲဆောင်ရာမှာ စိတ်ဝင်စားစရာက ကစားနည်းမျိုးစံဖြစ်ပြီး အရှက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာ သူတို့ရဲ့အရှက်တရားကို ဆရာဆရာမတွေက ပညာသားပါပါအသုံးချပြီး ထိန်းချုပ်ရမှာပါ။ ဥပမာ အိမ်စာမလုပ်ခဲ့ရင် ''နင့်လောက်တောင်မှ ဉာဏ်မကောင်းမပြည့်စုံသူ ကောင်မလေးတစ်ယောက်တောင်လုပ်လာတယ်။ နင်က ဘာဖြစ်လို့မလုပ်နိုင်တာလဲ"ဆိုပြီးပြောလိုက်ရင် ရှက်ပြီးတော့ နောင်ကို မရရ အောင်လုပ်ပါတယ်။ စာမလုပ်တဲ့ကလေး ကို အပြစ်ပြောနေမယ့်အစား သွယ်ဝိုက် ပြောခြင်းကပိုအကျိုးရှိပါတယ်။ ဥပမာ ''ငါတို့ အပန်းဖြေခရီးတစ်ခုသွားကြမယ်။ နေရာ အခက်အခဲကြောင့် အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ လူ ၅၀ ထဲက အမှတ်အများဆုံး ၄၀ ပဲ ပါဝင်လို့ရမယ်''စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ကလေးတွေရဲ့စိတ်က နုနယ်တယ်။ ဒါကြောင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ကလေးတွေကို ထိန်းသိမ်းရမယ့်စနစ်တွေကို ကလေးတွေ စိတ်ဒဏ်ရာမရအောင် '' ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်''လေးတွေနဲ့ အလင်းပြသင့်ပါတယ်။
ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ မြန်မာ ပြည်ပညာရေးစနစ်မှာ Major ဘာသာရပ် တွေ ဥပမာ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒစတာတွေ မှာ ကျောင်းသားအရေအတွက်ကိုလျှော့ပြီး တကယ်ဝါသနာပါသူတွေပဲ တက်စေချင် ပါတယ်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဘာ သာရပ်တွေကို လူများစွာလက်ခံသင့်ပါ တယ်။ ဥပမာ Accounting, Nursing, Business Administration စတဲ့ ဘာသာရပ်တွေဟာ အတော်များများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်မှာ အသုံးကျပါတယ်။ အ ကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကျောင်းက ယာယီထွက်ရမယ့်သူတွေကို လွယ်လွယ် ကူကူ ပြန်ဝင်ခွင့်ပေးသင့်ပါတယ်။ အမေ ရိကန်နိုင်ငံမှာတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်က တက်လက်စတန်းလန်းကိုလည်း ပြန်တက် လို့ရပါတယ်။ အခုဖြစ်နေတာက မေဂျာက ကျောင်းပြီးသူတွေပဲများပြီး အလုပ်ရှာတော့ သူတို့မေဂျာက ဓာတုဗေဒဖော်မြူလာ လည်းမမေးဘူးဆိုတော့ သူတို့မှာ ဘွဲ့ရ ပေမယ့် ဘာအရည်အချင်းမှမရှိသလို ဖြစ် နေပါတယ်။
မြန်မာပြည်ရဲ့ပညာရေးစနစ်သစ်ကို ကျွန်တော့်အနေနဲ့အနှစ်ချုပ်ရရင် ဆရာ၊ ဆရာမတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေးကို ဖြေရှင်းပေးရပါမယ်။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေရဲ့အရည် အချင်းကို အပြိုင်အဆိုင်သဘောမျိုးဖြစ် အောင် လုပ်ပေးဖို့လိုပါမယ်။ နောက်ပြီး ဆရာ၊ ဆရာမတွေရဲ့သင်ကြားမှု၊ ကျောင်းသားတွေအပေါ်ဂရုစိုက်မှု စတာတွေကို ကျောင်းသားတွေက လျှို့ဝှက်အမှတ်ပေးတဲ့စနစ် ကျင့်သုံးသင့်ပါတယ်။ ကျောင်းတွေကို ကျောင်းအုပ်အပြင် board အဖွဲ့လို ဘက်မလိုက်နိုင်တဲ့ မြို့မိမြို့ဖတွေနဲ့ အုပ်ချုပ်သင့်ပါတယ်။ ဆရာဆရာမတွေ ဟာ အစိုးရဝန်ထမ်းမဖြစ်သင့်ဘဲ ပညာ ရေးဝန်ထမ်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် အ သွင်ပြောင်းပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် နုတ် ထွက်ခွင့်၊ ခန့်အပ်ခွင့်ရှိရပါမယ်။ အပြင် က .gသနာအရပဲဖြစ်ဖြစ် အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်ပိုင်းသင် ကြားလိုသူတွေကိုလည်း မြို့နယ်ကချပေး တဲ့ ကျောင်းရန်ပုံငွေကနေ ထုတ်သုံးခွင့်ရှိ ရင် ခန့်အပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ မိမိ ကျောင်းသားတွေလိုအပ်နေတဲ့ ဘာသာ ရပ်တွေ အားကောင်းလာမယ်၊ ဆရာ၊ ဆ ရာမတွေဘက်ကလည်း ဘက်စုံသင်ကြား နိုင်ဖို့ အရည်အချင်းတွေနဲ့ ပြည့်ဝလာပါ မယ်။ အရင်လို စာအုပ်တစ်ခုထဲကစာကို သင်တာမဟုတ်တော့တာဆိုတော့ အရာ ရာကို စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာနေရပါ မယ်။ ကျောင်းသားမိဘတွေကတော့ အဓိက စိတ်ဓာတ်ပြင်ရမယ်။ ကိုယ့်သား သမီးဟာ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယရတာ ကို ဂုဏ်မယူသင့်တော့ပါဘူး။ ကိုယ့်မြို့ ကိုယ့်ရွာရဲ့ ပညာရေးရန်ပုံငွေကို ပျော်ပျော် ပါးပါးစုထည့်ချင်တဲ့စိတ်မျိုး မွေးရပါမယ်။ ကျောင်းသားတွေဘ၀ကတော့ အရင်စ နစ်ထက်သက်သာလာပြီး ပိုလွတ်လပ်လာ မယ်ထင်ပါတယ်။ မိမိဝါသနာပါရာတွေကို လုပ်ခွင့်ရလာမှာဆိုတော့ ပျော်စရာအခြေ အနေမှာ အလေမလိုက်ဘဲ ကျောင်းမှာ ပျော်ရွှင်အောင်နေပြီး ကျောင်းမှန်သင့်ပါ တယ်။ ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်ရေးရမယ်ဆိုတာ ကိုသိထားရပါမယ်။ ဒီလို အားလုံးပါဝင် ကြိုးစားမှသာ မြန်မာပြည်ပညာရေးဟာ အမှန်တကယ် ပြောင်းလဲတိုးတက်လာ မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ။
မွနျမာပွညျပညာရေးကို အမရေိ ကနျနိုငျငံရဲ့ ပညာရေးစနဈနဲ့ယှဉျကွညျ့ရငျ အခွခေံပညာရေးစနဈနဲ့ အဆငျ့မွငျ့ပညာရေးစနဈ ပွောငျးပွနျဖွဈနတေယျလို့ ထငျ ပါတယျ။ နိုငျငံအတျောမြားမြားမှာ အခွခေံပညာကို အုပျခြုပျရေးအပိုငျးမှာ အစိုးရက တငျးတငျးကပျြကပျြ ကိုငျတှယျထားပါတယျ။ ဒီအရှယျမှာက စာသငျကွားရေး အပွငျ စာရိတ်တ၊ အားကစား၊ စညျးကမျးအပွငျ အခွားသိသငျ့သိထိုကျတဲ့ ပွငျပ ဗဟုသုတတှကေို အမြားဆုံးပေးရမယျ့အရှယျဖွဈတဲ့အတှကျပါ။ မွနျမာပွညျမှာက တော့ ကြုရှငျ၊ ဘျောဒါဆောငျ၊ ပုဂ်ဂလိကကြောငျးတှပေျေါပေါကျလာတာ ကြှနျ တျောကတော့ ကောငျးတယျလို့မမွငျပါ ဘူး။ တက်ကသိုလျဆိုတာက လူလားမွောကျ တဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျပိုငျဆုံးဖွတျခကျြနဲ့ လုပျသငျ့တာကို ရှေးခယျြရမယျ့အခြိနျ၊ ကိုယျနဲ့အံဝငျမယျ့ပညာရေးကို ရှေးသငျ့ တဲ့အခြိနျပါ။ အစိုးရရဲ့ပါဝငျမှု အနညျးဆုံး ဖွဈရမှာပါ။ မွနျမာပွညျမှာကတော့ ပုဂ်ဂလိ က တက်ကသိုလျတှအေရငျမပျေါဘဲ ပုဂ်ဂလိ ကအထကျတနျးကြောငျးတှေ အရငျပျေါ နပေါတယျ။ အခုတော့ နိုငျငံခွားက တက်ကသိုလျတဈခုခုနာမညျခံပွီး မွနျမာပွညျမှာ လုပျစားလာတာ မကောငျးဘူးလို့ပဲ မွငျမိ ပါတယျ။
လကျရှိ မွနျမာနိုငျငံမှာက ပညာရေးကို အစိုးရကပဲ လုံးဝတာဝနျယူထားတာ မှားနပေါတယျ။ ကြှနျတျောထငျတာတော့ အားလုံးမပွောငျးနိုငျသေးရငျတောငျ ပထ မပိုငျးမှာ အစိုးရက နိုငျသလောကျကို ယခုအတိုငျးပဲ ဆကျလကျထောကျပံ့သငျ့ပွီး ကြောငျးအုပျတှကေို လုပျပိုငျခှငျ့ပိုပေးသငျ့တယျထငျပါတယျ။ ဥပမာ ငှကွေေးတတျ နိုငျတဲ့ ကြောငျးသားမိဘတှဆေီက ကြောငျးလခကို သငျ့တျောတဲ့ပမာဏနဲ့ကောကျသငျ့ပွီး အဆငျမပွသေူတှကေိုတော့ ထောကျပံ့ကွေးပေးသငျ့ပါတယျ။ သီးသနျ့အလှူ ငှတှေလေညျးလကျခံပွီး လကျရှိဆရာဆ ရာမတှကေို လစာအပွငျ အပိုဆုအနနေဲ့ ခှဲဝပေေးသငျ့ပါတယျ။ တကယျဖွဈရမှာက တော့ မွို့ရှာရဲ့ ပိုငျဆိုငျမှုအခှနျကနေ မိမိ မွို့ရှာရဲ့ပညာရေး ပိုကောငျးမှနျအောငျ ကြောငျးအုပျတှကေ ကွံဆောငျရမှာပါ။ အခုလို မွနျမာပွညျရဲ့ဘတျဂကျြ အခကျ အခဲတှေ မြားနခွေငျးကလညျး ပညာရေး တိုးတကျဖို့ အဟနျ့အတားဖွဈစပေါတယျ။ ကိုယျ့ကြောငျးက ဆရာ၊ ဆရာမလစာကို မွို့ရဲ့စီးပှားရေးအလိုကျ ကောကျခံရရှိတဲ့ ပမာဏအပျေါမူတညျပွီး ကြောငျးအုပျကွီး က သတျမှတျသငျ့ပါတယျ။ ဒါမှ ကြုရှငျစ နဈပြောကျပွီး ကွိုးစားသငျတဲ့ ဆရာ၊ ဆ ရာမတှကေို မြားစှာအထောကျအကူဖွဈ စမှောပါ။
အခွခေံပညာမှာတော့ ပညာရေးနဲ့ ဘှဲ့ရထားတဲ့ B.ED သငျတနျးဆငျး သကျ သကျသာ သငျကွားခှငျ့ပေးသငျ့ပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ နုနယျတဲ့ကလေး တှကေိုထိနျးကြောငျးရာမှာ အတှအေ့ကွုံလိုသလို စနဈကဖြို့လညျးလိုပါတယျ။ သို့ သျောလညျး တခြို့ဘာသာရပျတှအေ တှကျ ပွငျပမှာစာသငျကောငျးတဲ့ ကြုရှငျ ဆရာတှကေို အစိုးရကြောငျးတှမှော အ ခြိနျပိုငျးသငျပေးဖို့ ကြောငျးအုပျက စီစဉျ ပေးသငျ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တက်ကသိုလျမှာတော့ B.ED ဆငျးတှထေကျ ကိုယျသငျမယျ့ဘာသာရပျတှကေို ကြှမျးကငျြပိုငျနိုငျသူတှကေိုပဲ စနဈတကရြှေးခယျြပွီး သငျကွားခှငျ့ပေးသငျ့ပါတယျ။
အထကျကပွောသလို လကျရှိတက်ကသိုလျတှမှော အစိုးရကပါဝငျမှုမလုပျဘဲ ပုဂ်ဂလိကအုပျခြုပျရေးအောကျမှာသာ ထားသငျ့ပါတယျ။ ဥပမာ ဖကျစပျအုပျခြုပျ ရေးအပွငျ ပုဂ်ဂလိကသကျသကျကြောငျးတှကေို လုပျပိုငျခှငျ့ပေးသငျ့ပါတယျ။ ဖကျ စပျကတော့ အစိုးရက ထောကျပံ့မှုအခြို့ပေးပွီး ငှကွေေးခြို့တဲ့သူတှကေို စကျော လာလိုမြိုး ထောကျပံ့ကွေးဆုလိုမြိုးနဲ့လကျခံသငျ့ပါတယျ။ ဒီလိုကြောငျးမြိုးဆိုရငျ တော့ အစိုးရကသတျမှတျတဲ့နှုနျးထားနဲ့ပဲ ကြောငျးလခကောကျသငျ့ပါတယျ။ အမေ ရိကနျမှာတော့ ပုဂ်ဂလိကကြောငျးတှလေညျး နှဈစဉျကြောငျးသားအရအေတှကျ တခြို့ကို စကျောလာပေးပါတယျ။
“ပညာလို အိုသညျမရှိ ”စကားလိုပဲ ပညာရှာသူတှကေို အသကျနဲ့ လုံးဝကနျ့ သတျမထားသငျ့သလို သငျကွားမယျ့ဆရာ ဆရာမတှကေိုလညျး အသကျနဲ့ ပငျစငျမ ပေးသငျ့ပါဘူး။ နိုငျငံအတျောမြားမြားမှာ ကြောငျးဆရာတှကေို သူတို့ကနျြးမာနေ သ၍ စိတျဝငျစားနသေ၍ သငျကွားခှငျ့ ပေးပါတယျ။ လစာလညျး အပွညျ့ပေးပါ တယျ။ တခြို့ဆိုရငျ သူတို့အလုပျတှကေ နပေငျစငျယူပွီးမှ ကြောငျးတှမှော စာပွနျ သငျနကွေပါတယျ။ အသကျ ၉၀ ကြျောတက်ကသိုလျဆရာတဈယောကျကိုတောငျ ကြှနျတျောတှဖေူ့းပါတယျ။ လုပျငနျးအ တှအေ့ကွုံတှအေရ ခတျေနဲ့အဆကျမ ပွတျတော့ သူ့အတှေးအမွငျတှဟော လတျဆတျနတေုနျးပါ။ မွနျမာပွညျမှာ လညျး ဌာနဆိုငျရာတှကေနေ ပငျစငျယူ သှားပမေယျ့ သူလုပျခဲ့တဲ့ အလုပျအတှေ့ အကွုံ၊ ဘဝအတှအေ့ကွုံတှကေို နောကျ မြိုးဆကျတှဆေီ ဝမြှေပေးတာကို လကျခံ သငျ့ပါတယျ။ လကျရှိအောငျမွငျနတေဲ့ တ ခြို့စီးပှားရေးသမားတှကေိုလညျး ကြောငျး တှကေိုအလညျဖိတျပွီး ဝါသနာပါရငျ စာ သငျခှငျ့ပေးသငျ့ပါတယျ။ တက်ကသိုလျမှာ တုနျးက စာသငျခမယူဘဲ အခြိနျပေးပွီး စာသငျတဲ့ သူဌေးဆရာသုံးယောကျ တှဖေူ့းပါတယျ။ သူတို့ရဲ့စိတျက မွနျမာလို ပွောရငျ “ပညာဒါန”အပွငျ သူတို့ရဲ့ရာဇ ဝငျကို ထူးခွားအောငျရေးနခွေငျးပါ။
နောကျဆုံးတဈခုကတော့ စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျတှေ ပညာရေးကို ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျစခွေငျးပါ။ တကယျထူးခြှနျတဲ့ လူငယျလူရှယျတှကေို လုပျငနျးအတှအေ့ ကွုံရအောငျ လုပျငနျးခှငျထဲမှာ ကြောငျးမ ပွီးခငျ အခြိနျပိုငျးအလုပျ သို့မဟုတျ ငှေ ကွေးထောကျပံ့ပွီး Group project လို မြိုး သူတို့သိခငျြတဲ့ကိစ်စတှအေတှကျ Research လုပျခိုငျးသလိုမြိုး ထောကျပံ့ပေး သငျ့ပါတယျ။ ကြောငျးတှကေလညျး ခှငျ့ ပွုသငျ့ပါတယျ။ နောကျပွီး Scholarship program တှနေဲ့ ထူးခြှနျသူတှကေို မွေ တောငျမွှောကျပေးသငျ့ပါတယျ။
မကွာခငျကတှလေို့ကျတဲ့သတငျး ကတော့ မွနျမာပွညျပညာရေးကို သငျ ကွားရေးစနဈသဈ ပွောငျးတော့မယျဆို တာပါပဲ။ ကြှနျတေျာ့အမွငျကတော့ လကျ ရှိစနဈဟာ မှားနတောသခြောတော့ ပွောငျးလဲမှုကို အပွညျ့အဝထောကျခံပါ တယျ။ စနဈသဈက ကြောငျးသားတှကေို စာမေးပှဲတဈခုတညျးနဲ့ မဆုံးဖွတျတော့ဘဲ Grade system နဲ့သှားမယျဆိုတာရယျ မတျောတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတှကေို နယျဝေး တှပေို့မယျဆိုတာရယျပါ။ ကောငျးတာရော မကောငျးတာရော ဆရာ၊ ဆရာမတှေ ဘကျကရော ကြောငျးသားတှဘေကျက ရော ရှုထောငျ့မြိုးစုံက ဆှေးနှေးကွညျ့ရ အောငျ။
ပထမဆုံးအပိုငျးကတော့ ဆရာဆ ရာမတှဘေကျက စဉျးစားကွညျ့ပါမယျ။ ယနအေ့ထိရှိနတေဲ့ အဆငျ့စနဈကို ခေါကျ ရိုးကြိုးနတေဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတှဟော အခု စနဈသဈအတှကျမှာ မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ ဘကျစုံသငျကွားရေးကို အဆငျသငျ့ဖွဈပွီ လား၊ မဖွဈသေးဘူးလားဆိုတာ စဉျးစားစ ရာဖွဈနပေါပွီ။ တဈနိုငျငံလုံးမှာရှိတဲ့ သိနျး နဲ့ခြီတဲ့ ပညာရေးဝနျထမျးတှရေဲ့ စိတျနေ စိတျထားကို အခြိနျအနညျးငယျအတှငျး ပွောငျးလဲနိုငျဖို့ဆိုတာ မလှယျလှပါဘူး။ ရိုးရိုးသငျတနျးတှေ ပေးမယျဆိုရငျလညျး ကုနျကစြရိတျကို ခံနိုငျဖို့မလှယျပါဘူး။ ဒီ တော့ ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ ကုနျကစြရိတျ လညျးသကျသာ အဆငျလညျးပွနေိုငျမယျ့ အကွံကတော့ ဆရာ၊ ဆရာမတှကေို ဖဘှေ့တျ closed group ထဲကို သခြောစိစဈ ပွီးထညျ့၊ ပွီးရငျဝနျကွီးဌာနက သူတို့ဖွဈ စခေငျြတဲ့စိတျနစေိတျထား လုပျပေးစေ ခငျြတဲ့ သငျခနျးစာနမူနာလေးတှေ သငျပွ ပေးစခေငျြပါတယျ။ နောကျဆုံး ဆရာ၊ ဆ ရာမတှေ ဘယျလောကျမှတျမိနားလညျသလဲဆိုတာ ဉာဏျစမျးပဟဠေိမေးခှနျးလေးတှေ မေးသငျ့ပါတယျ။ ကိုယျပိုငျဝကျဘျ ဆိုကျနဲ့လုပျနိုငျရငျတော့ အကောငျးဆုံးပါ။ ဘာဖွဈလို့ဒီလိုလုပျသငျ့သလဲဆိုတော့ စနဈသဈရဲ့ အခွခေံသဘောတရားကိုက စာအုပျထဲကစာကို သငျတာထကျအပွငျ တခွားဗဟုသုတတှကေို သငျရမှာဖွဈတာကွောငျ့ ဆရာ၊ ဆရာမတှရေဲ့ အရညျအ သှေးဟာ ထကျမွကျနရေမှာပါ။ စာသငျခနျးဟာ လှတျလပျတဲ့ ဆှေးနှေးခနျးပုံစံမြိုး ဖွဈလာမှာဖွဈတဲ့အတှကျ ဆရာ၊ ဆရာမ တှလေညျး ကြောငျးသားတှကေို ရမျးတုတျ တာမြိုးမဟုတျဘဲ သသေခြောခြာသိပွီးဖွတောမြိုးပဲ ဖွဈသငျ့ပါတယျ။
နောကျတဈခုကတော့ ဆရာ၊ ဆရာ မတှရေဲ့အပွောငျးအရှကေို့ အတတျနိုငျ ဆုံး နညျးအောငျလုပျပေးသငျ့ပါပွီ။ သူတို့ မှာလညျး မိသားစုတှနေဲ့ဆိုတော့ သူတို့ တကယျနပြေျောတဲ့နရောမှာပဲ နစေခေငျြ ပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ နယျဝေးကြောငျးတှမှော ဆရာ၊ ဆရာမ ရှားသှားမှာပေါ့ဆိုပွီး ဆငျခွပေေးကွမှာပါ။ မွနျမာပွညျမှာမှားနေ တာက ဆရာ၊ ဆရာမကို အစိုးရဝနျထမျး အဖွဈ သတျမှတျထားခွငျးပါ။ ဒီတော့ အရငျခတျေတှတေုနျးကဆိုရငျ နိုငျငံရေး အကြိုးငှာအသုံးခတြဲ့ လူတနျးစားတဈ ရပျလိုဖွဈနပေါတယျ။ ဟိုအသငျး ဒီအသငျး ဟိုပါတီဒီပါတီ အတငျးဝငျခိုငျးပွီး သူတို့လုပျခငျြတဲ့ပှဲတှကေို မဖွဈမနေ တကျအောငျ အကပျြကိုငျခဲ့တာ မှတျမိကွ ဦးမှာပါ။ တကယျဆိုရငျ ပညာရေးဝနျကွီးဌာနက ပညာရေးကိစ်စကိုပဲ အဓိကထားပွီး ပွုပွငျသငျ့ပွီး ဝနျထမျးရေးရာတှကေို သကျဆိုငျရာ ပွညျနယျ၊ မွို့နယျတှကေို ခှဲပေးလိုကျသငျ့ပါတယျ။ အကယျ၍ ပိုငျ ဆိုငျမှုခှနျလို စနဈပျေါလာရငျ ကိုယျ့မွို့ နယျကြေးရှာကို ကိုယျ့ဘတျဂကျြနဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတှရေဲ့လစာကို အပွိုငျအဆိုငျပေး ပွီး စာသငျကွားမှုညံ့တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတှေ ကို အနားပေးတာမြိုးလုပျပေးရငျ ကောငျးမယျလို့ထငျပါတယျ။ နယျဝေးကကြောငျး တှအေတှကျလညျး ပွညျနယျ၊ မွို့နယျအုပျခြုပျရေးအဖှဲ့တှကေ အထူးထောကျပံ့ ကွေးတှေ ခံစားခှငျ့တှနေဲ့ဆှဲဆောငျရငျ ရနိုငျပါတယျ။ နောကျပွီး ကိုယျ့ပွညျနယျမှာ ကိုယျ့လူမြိုး ဆရာ၊ ဆရာမ အခှငျ့အရေး တှပေိုရအောငျ ကခငျြပွညျနယျမှာဆိုရငျ ကခငျြစကားတတျသူကို ဦးစားပေးမယျဆို တာမြိုးနဲ့ ဆှဲဆောငျသငျ့ပါတယျ။ လကျရှိ ဆရာ၊ ဆရာမတှရေဲ့ရပိုငျခှငျ့တှေ ဥပမာ ပငျစငျလိုအရာမြိုးကိုလညျး ပွညျနယျအ စိုးရအောကျပို့ပွီး ဆကျထားလို့ရပါတယျ။ အတိုဆုံးပွောရရငျတော့ ဆရာ၊ ဆရာမ တှဟော အစိုးရဝနျထမျးမဖွဈသငျ့ပါ။ မွို့၊ ရှာဝနျထမျးပဲဖွဈသငျ့ပါတယျ။
ကြောငျးသားမိဘတှဟော ကောငျး မှနျတဲ့ပညာရေးစနဈကိုရောကျရှိဖို့ အဓိက ထောကျပံ့ပေးရတဲ့ လူတနျးစားဖွဈလို့ သူ တို့ရဲ့စိတျနစေိတျထားကို အခုကတညျးက ပွငျဆငျထားဖို့လိုအပျပါပွီ။ ပထမအနနေဲ့ ပွောရရငျတော့ မွနျမာပွညျကကလေးမိဘ တှမှောရှိတဲ့ 'ငါ့ကလေးကအတျောဆုံး' ဆိုတဲ့စိတျကို ဖြောကျရပါမယျ။ စာကွိုးစား ဖို့တော့ အားပေးရမှာဖွဈပွီး အဆငျ့တှေ ကို ခေါငျးထဲကထုတျရမှာဖွဈပါတယျ။ ဥပမာ ကလေးတဈယောကျဟာ ဘာသာရပျ တဈခုမှာ ၉၀ ရပမေယျ့လညျး ၈၀ ရတဲ့သူ နဲ့ Grade တူမှာကို လကျခံပေးရမှာဖွဈပါ တယျ။ အမရေိကနျပညာရေးမှာတော့ Grade A ဆိုရငျ 4.0, B ဆိုရငျ 3.0, C ဆိုရငျ 2.0, D ဆိုရငျ 1.0 ဆိုပွီး သတျမှတျ ထားပါတယျ။ စုစုပေါငျး ပမျြးမြှ Grade ကို ယူနဈနဲ့မွှောကျပွီး ပွနျစားပါတယျ။ မွနျမာပွညျပညာရေးစနဈသဈကတော့ အင်ျဂလနျအမှတျပေးစနဈကို အခွခေံထား ပွီး အောငျမှတျကို ၄၀ ကစပွီး ဂုဏျထူးကို ၈၀ (သို့မဟုတျ) A လို့ သတျမှတျပါတယျ။ အမရေိကနျကတော့ ၆၅ က အောငျမှတျ ဖွဈပွီး ၉၀ ကြျောမှ A ရပါတယျ။ ဘယျစ နဈပဲဖွဈဖွဈ ဒါကတော့အဓိကမကလြှပါ။
ဒုတိယအရေးကွီးတဲ့အခကျြက တော့ ဒီစနဈကိုအမှနျအကနျကငျြ့သုံးရငျ ကလေးတှကေို ကြူရှငျပို့ဖို့ထကျ သူ့ရဲ့ အိမျစာတှအေတှကျ အခြိနျပေးဖို့၊ တခွား သောဝါသနာပါရာအလုပျတှေ ဥပမာ ပနျးခြီဆှဲခွငျး၊ အားကစားလုပျခွငျး၊ ပုစ်ဆာ တှကေို အုပျစုဖှဲ့လုပျစခွေငျး စတာတှအေ တှကျ လိုအပျတဲ့နရောထိုငျခငျးတှေ ပွငျ ဆငျပေးဖို့လိုအပျလာပါမယျ။ ကြောငျး တှကေလညျး အိမျစာတို့ တခွားလှုပျရှားမှု တှမှော အမှတျပေးမှာဖွဈတဲ့အတှကျ ကြု ရှငျကိုပို့ပေးခွငျးဟာ ကလေးတှကေိုယျ တိုငျ စဉျးစားအဖွရှောခငျြတဲ့စိတျကို လြော့ကစြမှောဖွဈတဲ့အတှကျ ဉာဏျရညျ ပွညျ့မီတဲ့ကလေးတှကေို ပွငျပကြူရှငျအ တငျးပို့တာမြိုးမလုပျမိဖို့ အရေးကွီးပါ တယျ။
နောကျတဈမြိုး အရေးကွီးတာက တော့ ငှရေေးကွေးရေးပါ။ အခုလို Grade ပညာရေးစနဈကိုသုံးမယျဆိုရငျ ကလေး တှေ ကြောငျးမှာရော ကြောငျးပွငျပမှာပါ အထှထှေေ activities တှအေတှကျ လကျ တှစေ့ာသငျခနျးတှေ၊ ကှနျပြူတာခနျးတှေ၊ ကလေးငယျတှအေတှကျ ဆော့ကစားပွီး လုပျရမယျ့အခနျးတှေ အဆိုပါအခနျးတှေ အတှကျ ကုနျကမြယျ့ ပစ်စညျးကိရိယာတှေ ကို မိဘပွညျသူတှကေ ထောကျပံ့ရမှာဖွဈ ပါတယျ။ ကြူရှငျမှာကုနျကရြမယျ့ငှတှေေ ကို ကြောငျးမှာလိုအပျရငျ ထောကျပံ့ရပါ မယျ။
အမှနျမှာ 'ကြာငျးသားတဈယောကျ ရဲ့အရညျအခငျြးဟာ ကြောငျးသားက ဆ ရာကိုမေးတဲ့မေးခှနျးရဲ့ အဆငျ့အတနျးအ ပျေါမှာ ဆုံးဖွတျရမှာ' ဖွဈပါတယျ။ ဉာဏျ ရညျနိမျ့ကလေးတှေ ဗဟုသုတနညျးတဲ့ ကလေးတှရေဲ့မေးခှနျးဟာ ရိုးရှငျးပွီး ပညာသားမပါပါဘူး။ ကြောငျးသားတှေ စာသငျခနျးတှမှောပြျောဖို့ရာ '' ပြျောရှငျမှု၊ ခြီးမှမျးမှု၊ အောငျမွငျမှု၊ အသိအမှတျပွုမှု တှအေပျေါ မူတညျပါတယျ" ဒါ့ကွောငျ့ ဆရာရယျ မိဘရယျက ဒီအခကျြတှကေို ထောကျပံ့ပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။
ကြောငျးသူ၊ ကြောငျးသားတှကေို အဓိကအားဖွငျ့ နှဈမြိုး ခှဲခွားထိနျးခြုပျရမှာ ဖွဈပါတယျ။ opposite sex ကို ဆှဲဆောငျ မှုမရှိသေးတဲ့အရှယျနဲ့ အရှကျရှိတဲ့အရှယျပါ။ အရှကျအကွောကျကို နားမလညျသေးတဲ့အရှယျကလေးတှကေို ဆှဲဆောငျရာမှာ စိတျဝငျစားစရာက ကစားနညျးမြိုးစံဖွဈပွီး အရှကျရှိလာတဲ့အခြိနျမှာ သူတို့ရဲ့အရှကျတရားကို ဆရာဆရာမတှကေ ပညာသားပါပါအသုံးခပြွီး ထိနျးခြုပျရမှာပါ။ ဥပမာ အိမျစာမလုပျခဲ့ရငျ ''နငျ့လောကျတောငျမှ ဉာဏျမကောငျးမပွညျ့စုံသူ ကောငျမလေးတဈယောကျတောငျလုပျလာတယျ။ နငျက ဘာဖွဈလို့မလုပျနိုငျတာလဲ"ဆိုပွီးပွောလိုကျရငျ ရှကျပွီးတော့ နောငျကို မရရ အောငျလုပျပါတယျ။ စာမလုပျတဲ့ကလေး ကို အပွဈပွောနမေယျ့အစား သှယျဝိုကျ ပွောခွငျးကပိုအကြိုးရှိပါတယျ။ ဥပမာ ''ငါတို့ အပနျးဖွခေရီးတဈခုသှားကွမယျ။ နရော အခကျအခဲကွောငျ့ အခနျးထဲမှာရှိတဲ့ လူ ၅၀ ထဲက အမှတျအမြားဆုံး ၄၀ ပဲ ပါဝငျလို့ရမယျ''စသညျဖွငျ့ပေါ့။ ကလေးတှရေဲ့စိတျက နုနယျတယျ။ ဒါကွောငျ့ ပညာရေးဝနျကွီးဌာနက ကလေးတှကေို ထိနျးသိမျးရမယျ့စနဈတှကေို ကလေးတှေ စိတျဒဏျရာမရအောငျ '' ဆောငျရနျ ရှောငျရနျ''လေးတှနေဲ့ အလငျးပွသငျ့ပါတယျ။
ပွောငျးလဲဖို့ကွိုးစားနတေဲ့ မွနျမာ ပွညျပညာရေးစနဈမှာ Major ဘာသာရပျ တှေ ဥပမာ ဓာတုဗဒေ၊ ရူပဗဒေစတာတှေ မှာ ကြောငျးသားအရအေတှကျကိုလြှော့ပွီး တကယျဝါသနာပါသူတှပေဲ တကျစခေငျြ ပါတယျ။ အသကျမှေးဝမျးကြောငျး ဘာ သာရပျတှကေို လူမြားစှာလကျခံသငျ့ပါ တယျ။ ဥပမာ Accounting, Nursing, Business Administration စတဲ့ ဘာသာရပျတှဟော အတျောမြားမြားအတှကျ လုပျငနျးခှငျမှာ အသုံးကပြါတယျ။ အ ကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ကြောငျးက ယာယီထှကျရမယျ့သူတှကေို လှယျလှယျ ကူကူ ပွနျဝငျခှငျ့ပေးသငျ့ပါတယျ။ အမေ ရိကနျနိုငျငံမှာတော့ လှနျခဲ့တဲ့ဆယျနှဈက တကျလကျစတနျးလနျးကိုလညျး ပွနျတကျ လို့ရပါတယျ။ အခုဖွဈနတောက မဂြောက ကြောငျးပွီးသူတှပေဲမြားပွီး အလုပျရှာတော့ သူတို့မဂြောက ဓာတုဗဒေဖျောမွူလာ လညျးမမေးဘူးဆိုတော့ သူတို့မှာ ဘှဲ့ရ ပမေယျ့ ဘာအရညျအခငျြးမှမရှိသလို ဖွဈ နပေါတယျ။
မွနျမာပွညျရဲ့ပညာရေးစနဈသဈကို ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့အနှဈခြုပျရရငျ ဆရာ၊ ဆရာမတှရေဲ့ စားဝတျနရေေးကို ဖွရှေငျးပေးရပါမယျ။ ဆရာ၊ ဆရာမတှရေဲ့အရညျ အခငျြးကို အပွိုငျအဆိုငျသဘောမြိုးဖွဈ အောငျ လုပျပေးဖို့လိုပါမယျ။ နောကျပွီး ဆရာ၊ ဆရာမတှရေဲ့သငျကွားမှု၊ ကြောငျးသားတှအေပျေါဂရုစိုကျမှု စတာတှကေို ကြောငျးသားတှကေ လြှို့ဝှကျအမှတျပေးတဲ့စနဈ ကငျြ့သုံးသငျ့ပါတယျ။ ကြောငျးတှကေို ကြောငျးအုပျအပွငျ board အဖှဲ့လို ဘကျမလိုကျနိုငျတဲ့ မွို့မိမွို့ဖတှနေဲ့ အုပျခြုပျသငျ့ပါတယျ။ ဆရာဆရာမတှေ ဟာ အစိုးရဝနျထမျးမဖွဈသငျ့ဘဲ ပညာ ရေးဝနျထမျး၊ ပွညျသူ့ဝနျထမျးအဖွဈ အ သှငျပွောငျးပွီး လှတျလှတျလပျလပျ နုတျ ထှကျခှငျ့၊ ခနျ့အပျခှငျ့ရှိရပါမယျ။ အပွငျ က .gသနာအရပဲဖွဈဖွဈ အသကျမှေးဝမျး ကြောငျးအဖွဈပဲဖွဈဖွဈ အခြိနျပိုငျးသငျ ကွားလိုသူတှကေိုလညျး မွို့နယျကခပြေး တဲ့ ကြောငျးရနျပုံငှကေနေ ထုတျသုံးခှငျ့ရှိ ရငျ ခနျ့အပျပေးသငျ့ပါတယျ။ ဒါမှသာ မိမိ ကြောငျးသားတှလေိုအပျနတေဲ့ ဘာသာ ရပျတှေ အားကောငျးလာမယျ၊ ဆရာ၊ ဆ ရာမတှဘေကျကလညျး ဘကျစုံသငျကွား နိုငျဖို့ အရညျအခငျြးတှနေဲ့ ပွညျ့ဝလာပါ မယျ။ အရငျလို စာအုပျတဈခုထဲကစာကို သငျတာမဟုတျတော့တာဆိုတော့ အရာ ရာကို စဉျဆကျမပွတျလလေ့ာနရေပါ မယျ။ ကြောငျးသားမိဘတှကေတော့ အဓိက စိတျဓာတျပွငျရမယျ။ ကိုယျ့သား သမီးဟာ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယရတာ ကို ဂုဏျမယူသငျ့တော့ပါဘူး။ ကိုယျ့မွို့ ကိုယျ့ရှာရဲ့ ပညာရေးရနျပုံငှကေို ပြျောပြျော ပါးပါးစုထညျ့ခငျြတဲ့စိတျမြိုး မှေးရပါမယျ။ ကြောငျးသားတှဘေဝကတော့ အရငျစ နဈထကျသကျသာလာပွီး ပိုလှတျလပျလာ မယျထငျပါတယျ။ မိမိဝါသနာပါရာတှကေို လုပျခှငျ့ရလာမှာဆိုတော့ ပြျောစရာအခွေ အနမှော အလမေလိုကျဘဲ ကြောငျးမှာ ပြျောရှငျအောငျနပွေီး ကြောငျးမှနျသငျ့ပါ တယျ။ ကိုယျ့သမိုငျးကိုယျရေးရမယျဆိုတာ ကိုသိထားရပါမယျ။ ဒီလို အားလုံးပါဝငျ ကွိုးစားမှသာ မွနျမာပွညျပညာရေးဟာ အမှနျတကယျ ပွောငျးလဲတိုးတကျလာ မယျလို့ ထငျပါတယျ။
အမေရိကန်ပညာရေးဟာ မြန်မာအ မြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ တော်တော်လေးကို လွယ်မယောင်နဲ့ရယ်စရာပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ သူတို့တွေကလေးဘ၀ကနေ ပြီး နောက်ဆုံးတက္ကသိုလ်တွေအထိ Multiple choice နဲ့ ကိုယ်ရေးချင်ရာ ကိုယ်နားလည်သလိုရေးလို့ရတဲ့ essay စနစ်ကြောင့်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီစနစ်ဟာ ပြင်ပလော ကနဲ့ အလွန်နီးစပ်တာကို တွေ့ရမှာပါ။ တကယ့်လောကဆိုတာ ရွေးချယ်စရာ တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပြီး မိမိလုပ်ချင်ရာ မိမိ ပြောချင်ရာတွေကိုပဲလုပ်ကြတာပါ။ အ လွတ်ကျက်ပညာရေးဆိုရင်တော့ အပေါ် လူကပြောတာအာဂုံဆောင်ပြီး ပြောသမျှ ကို အောက်ကလူတွေကို ပြန်ပြန်ရွတ်ပြနေ ရတာ ပိုအားသန်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကြိုက်ရာရွေး Multiple choice မေးခွန်းတွေရဲ့ ပညာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုကတော့ ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ခေါင်းစဉ် အားလုံးကို မဖြစ်မနေလေ့လာမှသာ ဖြေ နိုင်မှာပါ။ အလွတ်ကျက်ပညာရေးလို အားသန်ရာကိုပဲ ရွေးချယ်ကျက်မှတ်လို့ မရသလို နားမလည်ဘဲ အလွတ်ကျက်လို့ လည်းမရတော့ပါဘူး။ စာအုပ်ထဲက ဝါကျ အတိုင်းလည်း တိုက်ရိုက်မမေးသလို အ ဖြေတွေဟာလည်း ဆင်တူရိုးမှားတွေချည်း ပါပဲ။ အဖြေက ငါးမျိုးလောက်အထိ ရှိပါ တယ်။ ဒီစနစ်ကို လူ့အသက်နဲ့ရင်းပြီးလုပ် ရတဲ့ ဆရာဝန်စာမေးပွဲတွေအထိ သုံးပါ တယ်။ ဒီစနစ်ရဲ့ နောက်တစ်ခုအားသာ ချက်က ကျောင်းသားတွေရဲ့အရည်အချင်း များစွာကို သိအောင်မေးလို့ရတယ်။ ဥပမာ ရေးဖြေဆိုရင် အချိန်အကန့်အသတ် ကြောင့် စာပုဒ်ရေများများ မေးလို့မရပါ ဘူး။ ဒီတော့ ကျက်ထားတာနဲ့တိုးရင် ကွက်တိဖြေနိုင်ပေမယ့် မကျက်ထားတာ နဲ့တွေ့ရင် ငုတ်တုတ်ဖြစ်သွားတဲ့ကျောင်း သားမှာ တခြားဗဟုသုတတွေ များစွာရှိ နေတာကို စာမေးပွဲပုံစံအရ အဖြေမပေး နိုင်တော့ပါဘူး။
နောက်တစ်ခုက အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ကလေးတွေကို ငယ်ငယ်ကတည်းက စာ ရေးခိုင်းတာပါပဲ။ ရေးချင်ရာကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးခွင့်ပေးထားပါတယ်။ သူများတွေရဲ့အကြံယူရင်သာ မကြိုက်တာ၊ လက်မခံတာပါ။ ကျောင်းသားရေးတဲ့ ဘယ်အယူအဆကိုမဆို လက်ခံပြီး ဆွေး နွေးပေးတဲ့အလေ့အကျင့် လုပ်ပေးပါ တယ်။ ဒီတော့ လူတွေက ကိုယ်မှားရင်လည်း အပြုသဘောနဲ့ ထောက်ပြမှာပဲဆို တာ သိနေတဲ့အတွက် စိတ်ထဲမှာရှိတာကို ပြောဖို့ ဝန်မလေးတော့ပါဘူး။ မာစတာ တန်းလိုမျိုးမှာလည်း မိမိရဲ့ထူးခြားတဲ့အတွေးကိုပဲသဘောကျပြီး အများနည်းတူ တွေးတာကို သဘောမကျပါဘူး။ မှတ်မှတ်ရရ ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးအတန်းမှာ Capstone ဆိုတဲ့အတန်းတစ်တန်းကို မယူမနေရယူရပါတယ်။ ကျွန်တော်က အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်းတွေအကြောင်းလေ့လာပြီး နောင်သုံးနှစ် သို့မဟုတ် ငါးနှစ်ဆိုရင် ဘယ်ကုမ္ပဏီက ပိုကောင်းလာမယ်ဆိုတာကို အချက်နဲ့ လက်နဲ့ ၄၅ မိနစ်လောက် ''အကြွေးအများဆုံး လေယာဉ်ပျံအများဆုံး လေကြောင်းလိုင်းသည် လောင်စာဆီဈေးကျ ပြီး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်ရင် အမြတ် အများဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်''လို့ presentation လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြော လိုက်တာကို ဆရာကသဘောကျပြီး သူ့ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လာလုပ်ဖို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီဆရာက ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ လောက် တန်တဲ့ နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးအကြံပေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားသလို လစာ တစ်ဒေါ်လာပဲယူပြီး သူစာသင်ရခြင်းအ ကြောင်းက ''လူငယ်တွေရဲ့ အတွေးအခေါ်ကို အလကားရတာရယ်၊ စာအုပ်ရောင်း သူတွေက ပရော်ဖက်ဆာဆိုရင် သူတို့စာ အုပ်ကို ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်အဖြစ်သုံးအောင် နမူနာစာအုပ်တွေ အလကားပို့ပေးလို့ပါ''ဆိုပြီး ပြောပြပါတယ်။
အမေရိကန်ရဲ့ အမှတ်ပေးစနစ်က ပထမလပတ် ဒုတိယလပတ် နောက်ဆုံး စာမေးပွဲ စတာတွေကို အချိုးကျအမှတ် ပေးသလို စာသင်ခန်းထဲမှာ ဆွေးနွေးမှု၊ အိမ်စာမှန်မှန်လုပ်မှု၊ ကျောင်းခေါ်ချိန်မှန် မှု၊ အပိုလုပ်ရမယ့်အိမ်စာတွေလုပ်မှု၊ စ တာတွေအပေါ်မှာ ၂၀-၃၀ ရာခိုင်နှုန်း လောက်သတ်မှတ်ပေးပါတယ်။ အောင် မှတ်ကတော့ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းပါ။ အရေး အကြီးဆုံးနောက်တစ်ချက်က အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ကျောင်းနားရမယ်ဆိုရင် ကြိုက်သလိုနားခွင့်ရှိပါတယ်။ ပညာရေး ဆိုတာကို ဘယ်တော့မှ ဆုံးခန်းတိုင်မ သွားအောင် လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ဘာ သာရပ်တွေဆိုလည်း ကိုယ်တက်ချင်တဲ့ အတန်း ကိုယ်အားတဲ့အချိန် ကိုယ်ကြိုက် တဲ့ ဆရာရှိတဲ့အတန်းကို တက်လို့ရတယ်။ ဒီတစ်ဘာသာကျတာနဲ့ အတန်းမကျပါ ဘူး။ ကျတဲ့ဘာသာပဲ ပြန်တက်ရပါတယ်။ ကိုယ့်မေဂျာကို မကြိုက်တော့လို့ရှိရင် လည်း တခြားမေဂျာပြောင်း ခွင့်ရှိသလို ၂ မေဂျာ ၃ မေဂျာနဲ့လည်း ကျောင်းပြီးလို့ရပါ တယ်။ တချို့ဆို ကိုယ့်မေဂျာကိုယ် သတ် မှတ်ခွင့်တောင်ရှိပါတယ်။ ပညာရေးမှာ ဒီမိုကရေစီအပြည့်ပေးထားတာလို့ ထင်ပါ တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အမေရိကန်က ကျောင်းတွေမှာ အသက်ကြီးကြီးတွေရော လူငယ်တွေရော အမြဲရောနေတာ တွေ့ နေရလေ့ရှိပါတယ်။ တချို့ဆို ပင်စင်ယူပြီး မှ ကျောင်းလာတက်တာတောင်ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ အမေရိကမှာ အထက်တန်းတွေ မတက်ခဲ့ရတော့ အ ထက်တန်းပညာရေးကို ဂဃနဏ မသိပါ ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကောလိပ်တို့တက္ကသိုလ်တို့နဲ့ အလားသဏ္ဍာန်တူမှာပါ။ ထူးတာတစ်ခုက တော့ အထက်တန်းထိ အစိုးရက လုံးဝနီး ပါးတာဝန်ယူပြီး ကောလိပ်တို့တက္ကသိုလ် တို့ကတော့ အရင်းရှင်စီးပွားရေးဆန်ဆန် ငွေကြေးပေးရပါတယ်။ အစိုးရပိုင်တက္ကသိုလ် ဆိုတာမရှိပါဘူး။ တစ်ကျောင်းနဲ့ တစ် ကျောင်းလည်း ကျောင်းလခမတူသလို သင်ကြားမှုဂရုစိုက်မှုလည်းမတူပါ။ ပြည် နယ်အစိုးရတွေက ပြည်နယ်ကျောင်းတွေ ကို ငွေကြေးအရထောက်ပံ့ပေးပြီး မိမိ ပြည်နယ်သူ ပြည်နယ်သားတွေအတွက် ကျောင်းလခဈေးလျှော့ပေးပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိ ကပိုင်ကျောင်းတွေကတော့ ဈေးမလျှော့ပါ ဘူး။ အလုပ်တွေကိုလည်း ပြည်နယ်မှာ ပေါ်ပေါက်အောင် လုပ်ပေးပါတယ်။ အခု ပြောချင်တာက ဆရာတွေနဲ့ ကျောင်းသား ဘ၀ပါ။
အမေရိကန်နိုင်ငံကကျောင်းတွေမှာ စာသင်နေတဲ့ဆရာအများစုက ဒီကျောင်း ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေမဟုတ်ကြဘဲ အချိန်ပိုင်း သင်ကြတာများပါတယ်။ သူတို့ရဲ့စာသင်ရ ချိန်၊ ဘာသာရပ်ပေါ်မူတည်ပြီး နှုန်းအမျိုး မျိုးနဲ့ လစာပေးပေမယ့် တခြားကျောင်းဝန် ထမ်းတွေလို ရပိုင်ခွင့်တွေတော့ မပေးပါ ဘူး။ ဆရာတွေကလည်း အချိန်ပိုင်းသင် တာကို ကျောင်းသုံးကျောင်းလောက်ထိ လှည့်ပြီးသင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆုံဖူးတဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ဆိုရင် သူ့ရဲ့စာသင် တန်းနောက်ဆုံးနေ့မှာလုပ်တဲ့ စာမေးပွဲ ခန်းထဲကို ဘောင်းဘီတိုနဲ့ ခရီးသွားအိတ်နဲ့ လာလို့ မေးကြည့်တော့ သူက ဒီစာမေးပွဲ ပြီးတာနဲ့ လေဆိပ်ဆင်းပြီး ကျောင်းနားတဲ့ တစ်လအတွင်း တရုတ်ပြည်ရှန်ဟိုင်းက တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာ စာသင်ဖို့အတွက် သွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဖြေလွှာကို လေယာဉ်ပျံပေါ်မှာစစ်ပြီး တရုတ်ပြည်ရောက်တာနဲ့ အင်တာနက် ပေါ်ကနေ အောင်စာရင်းထုတ်ပေးလိုက်ပါ တယ်။ သူက Ph. D ၃ ခုရထားပြီး ၄ ခု မြောက်ကို ကျောင်းသားအဖြစ်တက်နေ တုန်းပါ။ ကျောင်းသုံးကျောင်းမှာလည်း ဆရာအဖြစ် စာသင်ပါတယ်။ ဆိုလိုချင် တာက အမေရိကန်ကဆရာတွေဟာ စာ သင်ရတာကို ဝါသနာအရမ်းထုံပြီး သူတို့ ရဲ့အချိန်တွေကိုလည်း အလွန်တန်ဖိုးရှိ အောင်သုံးတာကို ဆိုလိုတာပါ။
အမေရိကန်နိုင်ငံက စာသင်ခန်းတွေ ဟာ ပျော်ဖို့ကောင်းသလို အင်မတန် စိတ် ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင်လည်း ဆရာတွေ က သင်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော့်လို မြန်မာ ပြည်မှာ ဘယ်တုန်းကမှကျောင်းမမှန်ခဲ့သူ တောင် ကျောင်းတစ်ရက်ပျက်ရမှာ အရမ်း ဝန်လေးပါတယ်။ ကျောင်းလခဈေးကြီး တာလည်းပါမှာပေါ့။ သူတို့ရဲ့ဖော်မြူလာ အရ စာတစ်နာရီသင်ရင် ပြန်လေ့လာဖို့ အိမ်စာလုပ်ဖို့ ပရောဂျက်လုပ်ဖို့အတွက် ပျမ်းမျှ ၂ နာရီခွဲလိုပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ကျောင်းသားတွေကို စာသင်ချိန်နည်း နည်းမှာ စိတ်ဝင်စားအောင်သင်ပြီး မိမိ ကိုယ်တိုင်လေ့လာဖို့ တွန်းအားပေးတယ်။ တချို့ဆရာတွေဆိုရင် နောက်နေ့ အတန်း ပြန်မတက်ခင် စာကြိုဖတ်ခဲ့ဖို့မှာပါတယ်။ ဆရာနဲ့ကျောင်းသားဆက်ဆံရေးက ပုံမှန် မှာ အရမ်းကိုရင်းနှီးကြပါတယ်။ ဆရာ တော်တော်များများက ဒုတိယစာသင်ချိန် ဆို ကျောင်းသားအားလုံးနီးပါးရဲ့ နာမည် ကိုမှတ်မိသွားပြီး စာမေးပွဲပြီးတာနဲ့ ကျောင်း သားတော်တော်များများကို နာမည်ရောလူ ရောမေ့သွားတတ်ကြပါတယ်။ အာစရိယ ပူဇော်ပွဲလုပ်လို့ကတော့ မလွယ်ပါဘူး။ ဘယ်သူ့ကို ဘယ်သူကမှ မမှတ်မိတော့လို့ ပါ။ နောက်ပြီး ဆရာနဲ့ကျောင်းသူ ငြိလို့ ကတော့ အလုပ်အပြုတ်ပဲ။ အထက်တန်း မှာဆို ထောင်ပါကျတာပါ။ ဆရာနဲ့ကျောင်း သားတွေဟာ အလုပ်ခွင်ထဲကမိတ်ဆွေ တွေလို ရင်းရင်းနှီးနှီးနေကြပါတယ်။ ပေါက်ကရလေးဆယ်ဟာသတွေလည်း ပြောပြီး ရယ်ရယ်မောမော စာသင်ကြလေ့ ရှိပါတယ်။ ကျောင်းဆရာတွေက ကြိမ်လုံး မကိုင်ပေမယ့် အကြောင်းပြချက် ခိုင်ခိုင် မာမာမရှိဘဲ အိမ်စာမှန်မှန်မလုပ်ရင်တော့ စာသင်ခန်းထဲမှာတင် ငိုသွားအောင် ယဉ် ယဉ်ကျေးကျေးလေး ပြောတတ်ကြပါ တယ်။ နောက်ပြီး စာမေးပွဲတွေနဲ့ ပတ် သက်ရင် တရားမျှတအောင်လုပ်ပေးသလို အလျှော့အတင်းလည်းလုပ်ပေးတယ်။ ဥပမာ ကျောင်းသား ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း လောက်က ပရောဂျက်တစ်ခုကို သက် မှတ်ရက်အတွင်း မပြီးနိုင်ရင် ရက်ထပ်တိုး ပေးပါတယ်။ အဓိကကတော့ ကျောင်း သားတွေ စာသင်ခန်းထဲမှာ ပျော်အောင်နဲ့ သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သင်ခန်းစာတွေ ကို ပြီးအောင်ပါပဲ။
ဆရာတွေက ကျောင်းသားတွေရဲ့အ ရည်အချင်းကိုစစ်ဆေးသလို ကျောင်း သားတွေကလည်း ဆရာတွေရဲ့သင်ကြားမှု ပုံစံကို စာမေးပွဲကြီးနီးရင် အမှတ်ပေးစနစ် နဲ့ဖြည့်ပြီး အတန်းထဲကတစ်ယောက်က စာအိတ်ပိတ်ပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာ မှာ သွားထည့်ရပါတယ်။ ပုံစံဖောင်ဖြည့်စဉ် မှာ ဆရာက အခန်းအပြင်ကို ထွက်ပေးရ ပါတယ်။ ဆရာရဲ့အမှတ်ကို ကျောင်းရဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ တင်ထားလေ့ရှိ ပါတယ်။ မေးတဲ့မေးခွန်းတွေက တစ် ကျောင်းနဲ့တစ်ကျောင်း မတူပေမယ့် အဓိ ကအချက်တွေကတော့ ဆရာရဲ့ စာသင် ခန်းမလာခင်ပြင်ဆင်ခဲ့မှု၊ အတန်းကိုထိန်း သိမ်းမှု၊ မေးခွန်းတွေကို ပြန်ဖြေမှု၊ သင် ကြားတင်ပြမှု စတာတွေကို ကျောင်းသား တွေက အမှတ်ပေးရပါတယ်။
အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်တော့ တော်တဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေရဲ့အချိန်ကို ကျောင်း တစ်ကျောင်းမှာပဲ သူနဲ့မဆိုင်တဲ့အလုပ် တွေလုပ်ခိုင်းပြီး အချိန်မကုန်စေခြင်း၊ ကျောင်းသားတွေကို စာသင်ချိန်နည်းပြီး ဆွေးနွေးချိန်များခြင်း၊ ကျောင်းသားတွေ ကို မိမိပါသာလေ့လာစေပြီး မရှင်းတာကို ပဲ ဆရာတွေနဲ့ ဆွေးနွေးစေခြင်း၊ ဆရာနဲ့ ကျောင်းသား တစ်ဦးကိုတစ်ဦး မိတ်ဆွေ အရင်းအချာပမာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆွေးနွေးကြခြင်း၊ ဆရာကလည်း အတန်း စည်းကမ်းအတိုင်း ကျောင်းသားတိုင်းအ ပေါ် မျှမျှတတဆက်ဆံခြင်း၊ ကျောင်းသား တွေကလည်း ဆရာတွေအပေါ် ပြန်လည် ပြီး အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း စတဲ့ မြန်မာပြည်က တက္ကသိုလ်ကောလိပ် တွေနဲ့ မတူတဲ့အချက်ကလေးတွေ တွေ့ရ မှာပါ။ စနစ်တိုင်းဟာ ကောင်းတာလည်းရှိ သလို မကောင်းတာလည်းရှိစမြဲပါ။ ကောင်းတာ သင့်တော်တာယူပြီး မလိုအပ် တာတော့ ဖယ်ထားဖို့လိုပါတယ်။
စာသင်ကြားခြင်းဆိုတာဟာလည်း တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တာနဲ့ခပ်ဆင်ဆင်ပါ။ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူတွေမှာ ပြည်သူတွေ ထက်သာလွန်တဲ့ နည်းပညာတွေရှိရသလို တော်တဲ့ထက်တဲ့ အမြင်ကြီးတဲ့အုပ်ချုပ် သူတွေရှိရမှာပါ။ တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံက စာ သင်ခန်းတွေမှာလည်း ဆရာတွေမှာ ကျောင်း သားတွေ တွေးနိုင်တာထက်ပိုတွေးပြီး ပိုကောင်းသော စည်းစနစ်တွေရှိလို့ စာ ခိုးချဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါ။ နောက်ပြီး စာမေးပွဲတစ်ခုထဲက ကိုယ့်ရဲ့ စုစုပေါင်းအမှတ်ကို ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ် တော့ ခိုးချလည်း အကျိုးမရှိပါဘူး။ ကျွန် တော်အခု သူတို့သုံးလေ့ရှိတဲ့ စာသူခိုး တွေကိုဖမ်းတဲ့စနစ် သို့မဟုတ် ကာကွယ် တဲ့စနစ်လေးတွေ ဝေမျှပါ့မယ်။ မြန်မာ ပြည်မှာသုံးလို့ရတာ ရှိချင်ရှိမှာပါ။
ကျွန်တော်အရင်ကပြောခဲ့သလို စာ မေးပွဲတွေက ကြိုက်ရာရွေး (multiple choice)တွေများပါတယ်။ ဒီတော့ မေးတဲ့ မေးခွန်းအတူတူကို ရောသမမွှေ၊ မေးခွန်း ပုံစံလေးမျိုးလောက်ခွဲပြီး ကပ်လျက်ထိုင်နေ သူတွေကို မတူတဲ့မေးခွန်းပုံစံတွေ မေးပါ တယ်။ မေးခွန်းတွေကတော့ တရားမျှတ အောင် အတူတူပဲမေးပါတယ်။ ဒီတော့ ရှေ့နောက် ခိုးကြည့်လို့မရတော့ပါဘူး။ နောက်ပြီး ဒီလိုကြိုက်ရာရွေးစာမေးပွဲတွေ ရဲ့သော့ချက်က ဘယ်သူမှအဖြေမှန်မမှန် မသေချာဘူးလေ။ ဒီတော့ ကိုယ်သိချင်တဲ့ အပုဒ် တခြားသူဆီမှာ လှမ်းတွေ့ရရင် တောင် သူ့ကိုမယုံရဲတဲ့အတွက် ခိုးချလို့ မရပါဘူး။ ပရောဂျက်တွေဆိုရင်လည်း အုပ်စုလိုက်လုပ်ရတာနဲ့ တစ်ယောက်ချင်း လုပ်ရတာဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ နှစ်မျိုး လုံးက ကိုယ်အုပ်စုအတွက် ကိုယ့်အတွက် သီးသန့်ကိုယ်ပိုင်ခေါင်းစဉ်တွေရှိတော့ တခြားအုပ်စု တခြားသူကလည်း ကိုယ့်ကို မကူညီနိုင်ပါဘူး။ ပရောဂျက်ရေးရတာကလည်း ဘောင်မရှိပါဘူး။ ဥပမာ အနည်းဆုံး စာမျက်နှာ ၅ မျက်နှာ၊ ၁၅ မျက်နှာ သတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်လို အင်တာနက်ကြီးရှိတာ ခိုးချဖို့လွယ်ပါတယ်လို့ ထင်ချင်ထင်ပါမယ်။ တကယ်တော့ ပိုဆိုးသွားတာပါ။ ကိုယ်ရေးတဲ့စာ ဟာ တခြားသူဆီက မှီငြမ်းမယ်ဆိုရင် "quotation" လို့ခေါ်တဲ့ သူများစာပိုဒ်ကို မျက်တောင်အဖွင့်အပိတ်ထဲ ထည့်ထားရ ပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုးက သူများရေး ထားတာရဲ့ အယူအဆကိုယူမယ်ဆိုရင် အဲဒီစာမျက်နှာရဲ့အောက်မှာ အင်တာနက် လိပ်စာကို အတိအကျဖော်ပြပေးရပါတယ်။ ဥပမာ Credit- Aung Myo Win ဆိုပြီး ရေးတာနဲ့ မလုံလောက်တော့ပါဘူး။ ဘယ် ကရသလဲဆိုတာ အတိအကျမပြောရင် ခိုး တာနဲ့အတူတူလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
ပရောဂျက်တွေဆိုရင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရက်၊ အချိန်၊ အတိအကျကိုOnline blackboard မှာ upload လုပ် တင်ရပါတယ်။ ဒီတော့ ဘယ်အချိန်တင် သလဲ အငြင်းပွားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ နောက်အရေးကြီးတဲ့အချက်က တင် လိုက်တဲ့ပရောဂျက်ဟာ အဲဒီ blackboard website ကနေ ကိုယ့်စာထဲမှာ ပါတဲ့စာနဲ့ အင်တာနက်အားလုံးမှာ သူ များရေးပြီးတာတွေကို စက္ကန့် ၃၀ အတွင်း တိုက်စစ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ် ရေးထားတဲ့စာမှာ တခြားသူတွေဆီက ဘယ်လောက်ခိုးကူးထားသလဲဆိုတာ ချက်ချင်းပေါ်ပါတယ်။ ဒီအဖြေကို မိမိဘာ သာ မိမိသိသလို ဆရာကလည်းသိသွားပါ တယ်။ တူတာ ၅ ရာခိုင်နှုန်းအောက်က စစေနမ ဟာ လုံးဝသန့်ရှင်းတယ်လို့ ပြောပါ တယ်။ ၅-၃၀ ရာခိုင်နှုန်းထိကို အများ အားဖြင့်လက်ခံပြီး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရင်တော့ အသစ်ပြန်ရေးရပါတယ်။ သင် ခန်းစာတော်တော်များများမှာ presentation တွေရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ပရောဂျက်အ ကြောင်း၊ ကိုယ်လေ့လာရတဲ့ စာပေ အနု ပညာ စတာတွေကို အတန်းရှေ့ထွက် ပြောရပါတယ်။ အကယ်၍ ကိုယ်လေ့လာ ထားတာ ကိုယ်တကယ်မသိဘူးဆိုရင် ကိုယ်စကားပြောနေချိန်သာ ဟန်ဆောင် ပြီး သိသလိုလိုနဲ့ပြောလို့ရပေမယ့် ဆရာ ရော တခြားကျောင်းသားတွေပါ ဝိုင်းမေး ကြတဲ့အခါ တကယ်မသိလို့ကတော့ ဘယ်လိုမှ ဖြေလို့မရနိုင်ပါဘူး။ တစ်ခါက အတန်းတစ်ခုမှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် က သူစကားပြောပြီးရင် ကတ်သီးကတ် သတ်မေးခွန်းတွေမမေးဖို့ ကော်ဖီတစ်ခွက် နဲ့ လာဖားဖူးတယ်။ ပထမတော့ ကတိအ တိုင်း မမေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မေးစရာတစ်ခု ခေါင်းထဲရောက်လာလို့မေးလိုက်တာ သူ လည်းမဖြေနိုင်ဘဲ နောက်ဆုံး ဆရာပါဝိုင်း စဉ်းစားပြီးဖြေပေးပါတယ်။ အဲဒီနိုင်ငံက ချစ်စရာဓလေ့တစ်ခုက မသိတာကို မသိ ဘူးလို့ ရိုးရိုးဝန်ခံရင်အပြစ်မရှိဘူး။ သိသ လိုလိုလုပ်ရင်တော့ အမှတ်လျော့ပြီး ခွင့်မ လွှတ်ကြပါဘူး။
ကျွန်တော့်စိတ်အထင်ပြောရရင် တော့ မြန်မာပြည်မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် ဆရာတွေ အင်အားစိုက်တာနည်း သွားတယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ပညာရေး ပြန်လည်ဦးမော့လာစေဖို့အတွက်ဆိုရင် ဆရာဆရာမတွေ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွလာ အောင်၊ ခေတ်မီပညာရပ်တွေကို ဆည်းပူး လာအောင် ကျောင်းသားတွေအပေါ် ပိုအ ချိန်ပေးနိုင်အောင် အစိုးရအပြင် ဘက်စုံ ထောင့်စုံက ဝိုင်းဝန်းကြံဆောင်ပေးရမယ် ထင်ပါတယ်။ Motivation ပျောက်နေတဲ့ ဆရာဆရာမတွေများနေတယ်လို့ ခံစားမိ ပါတယ်။ တကယ်ကြိုးစားသင်နေတဲ့ ဆ ရာဆရာမတွေကတော့ ဝါသနာ၊ စေတနာ ကိုအရင်းခံပြီး အနစ်နာခံ သင်ကြားပေး နေတယ်လို့မြင်ပါတယ်။
အမရေိကနျပညာရေးဟာ မွနျမာအ မွငျနဲ့ကွညျ့ရငျတော့ တျောတျောလေးကို လှယျမယောငျနဲ့ရယျစရာပါပဲ။ ဘာဖွဈလို့ လဲဆိုတော့ သူတို့တှကေလေးဘဝကနေ ပွီး နောကျဆုံးတက်ကသိုလျတှအေထိ Multiple choice နဲ့ ကိုယျရေးခငျြရာ ကိုယျနားလညျသလိုရေးလို့ရတဲ့ essay စနဈကွောငျ့ပဲ။ ဒါပမေဲ့ ဒီစနဈဟာ ပွငျပလော ကနဲ့ အလှနျနီးစပျတာကို တှရေ့မှာပါ။ တကယျ့လောကဆိုတာ ရှေးခယျြစရာ တှနေဲ့ပွညျ့နှကျနပွေီး မိမိလုပျခငျြရာ မိမိ ပွောခငျြရာတှကေိုပဲလုပျကွတာပါ။ အ လှတျကကျြပညာရေးဆိုရငျတော့ အပျေါ လူကပွောတာအာဂုံဆောငျပွီး ပွောသမြှ ကို အောကျကလူတှကေို ပွနျပွနျရှတျပွနေ ရတာ ပိုအားသနျလိမျ့မယျထငျပါတယျ။ ကွိုကျရာရှေး Multiple choice မေးခှနျးတှရေဲ့ ပညာရေးအပျေါသကျရောကျမှုကတော့ ကြောငျးသားတှအေနနေဲ့ ခေါငျးစဉျ အားလုံးကို မဖွဈမနလေလေ့ာမှသာ ဖွေ နိုငျမှာပါ။ အလှတျကကျြပညာရေးလို အားသနျရာကိုပဲ ရှေးခယျြကကျြမှတျလို့ မရသလို နားမလညျဘဲ အလှတျကကျြလို့ လညျးမရတော့ပါဘူး။ စာအုပျထဲက ဝါကြ အတိုငျးလညျး တိုကျရိုကျမမေးသလို အ ဖွတှေဟောလညျး ဆငျတူရိုးမှားတှခေညျြး ပါပဲ။ အဖွကေ ငါးမြိုးလောကျအထိ ရှိပါ တယျ။ ဒီစနဈကို လူ့အသကျနဲ့ရငျးပွီးလုပျ ရတဲ့ ဆရာဝနျစာမေးပှဲတှအေထိ သုံးပါ တယျ။ ဒီစနဈရဲ့ နောကျတဈခုအားသာ ခကျြက ကြောငျးသားတှရေဲ့အရညျအခငျြး မြားစှာကို သိအောငျမေးလို့ရတယျ။ ဥပမာ ရေးဖွဆေိုရငျ အခြိနျအကနျ့အသတျ ကွောငျ့ စာပုဒျရမြေားမြား မေးလို့မရပါ ဘူး။ ဒီတော့ ကကျြထားတာနဲ့တိုးရငျ ကှကျတိဖွနေိုငျပမေယျ့ မကကျြထားတာ နဲ့တှရေ့ငျ ငုတျတုတျဖွဈသှားတဲ့ကြောငျး သားမှာ တခွားဗဟုသုတတှေ မြားစှာရှိ နတောကို စာမေးပှဲပုံစံအရ အဖွမေပေး နိုငျတော့ပါဘူး။
နောကျတဈခုက အမရေိကနျနိုငျငံမှာ ကလေးတှကေို ငယျငယျကတညျးက စာ ရေးခိုငျးတာပါပဲ။ ရေးခငျြရာကို လှတျလှတျလပျလပျရေးခှငျ့ပေးထားပါတယျ။ သူမြားတှရေဲ့အကွံယူရငျသာ မကွိုကျတာ၊ လကျမခံတာပါ။ ကြောငျးသားရေးတဲ့ ဘယျအယူအဆကိုမဆို လကျခံပွီး ဆှေး နှေးပေးတဲ့အလအေ့ကငျြ့ လုပျပေးပါ တယျ။ ဒီတော့ လူတှကေ ကိုယျမှားရငျလညျး အပွုသဘောနဲ့ ထောကျပွမှာပဲဆို တာ သိနတေဲ့အတှကျ စိတျထဲမှာရှိတာကို ပွောဖို့ ဝနျမလေးတော့ပါဘူး။ မာစတာ တနျးလိုမြိုးမှာလညျး မိမိရဲ့ထူးခွားတဲ့အတှေးကိုပဲသဘောကပြွီး အမြားနညျးတူ တှေးတာကို သဘောမကပြါဘူး။ မှတျမှတျရရ ကြှနျတျောတက်ကသိုလျနောကျဆုံးအတနျးမှာ Capstone ဆိုတဲ့အတနျးတဈတနျးကို မယူမနရေယူရပါတယျ။ ကြှနျတျောက အမရေိကနျလကွေောငျးလိုငျးတှအေကွောငျးလလေ့ာပွီး နောငျသုံးနှဈ သို့မဟုတျ ငါးနှဈဆိုရငျ ဘယျကုမ်ပဏီက ပိုကောငျးလာမယျဆိုတာကို အခကျြနဲ့ လကျနဲ့ ၄၅ မိနဈလောကျ ''အကွှေးအမြားဆုံး လယောဉျပြံအမြားဆုံး လကွေောငျးလိုငျးသညျ လောငျစာဆီဈေးကြ ပွီး ကမ်ဘာ့နိုငျငံရေးတညျငွိမျရငျ အမွတျ အမြားဆုံးဖွဈလိမျ့မယျ''လို့ presentation လုပျခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျတျောပွော လိုကျတာကို ဆရာကသဘောကပြွီး သူ့ ကုမ်ပဏီမှာ အလုပျလာလုပျဖို့ချေါပါတယျ။ အဲဒီဆရာက ဒျေါလာ သနျး ၂၀၀ လောကျ တနျတဲ့ နိုငျငံတကာ စီးပှားရေးအကွံပေး ကုမ်ပဏီတဈခုပိုငျဆိုငျထားသလို လစာ တဈဒျေါလာပဲယူပွီး သူစာသငျရခွငျးအ ကွောငျးက ''လူငယျတှရေဲ့ အတှေးအချေါကို အလကားရတာရယျ၊ စာအုပျရောငျး သူတှကေ ပရျောဖကျဆာဆိုရငျ သူတို့စာ အုပျကို ပွဋ်ဌာနျးစာအုပျအဖွဈသုံးအောငျ နမူနာစာအုပျတှေ အလကားပို့ပေးလို့ပါ''ဆိုပွီး ပွောပွပါတယျ။
အမရေိကနျရဲ့ အမှတျပေးစနဈက ပထမလပတျ ဒုတိယလပတျ နောကျဆုံး စာမေးပှဲ စတာတှကေို အခြိုးကအြမှတျ ပေးသလို စာသငျခနျးထဲမှာ ဆှေးနှေးမှု၊ အိမျစာမှနျမှနျလုပျမှု၊ ကြောငျးချေါခြိနျမှနျ မှု၊ အပိုလုပျရမယျ့အိမျစာတှလေုပျမှု၊ စ တာတှအေပျေါမှာ ၂၀-၃၀ ရာခိုငျနှုနျး လောကျသတျမှတျပေးပါတယျ။ အောငျ မှတျကတော့ ၇၀ ရာခိုငျနှုနျးပါ။ အရေး အကွီးဆုံးနောကျတဈခကျြက အကွောငျး အမြိုးမြိုးကွောငျ့ ကြောငျးနားရမယျဆိုရငျ ကွိုကျသလိုနားခှငျ့ရှိပါတယျ။ ပညာရေး ဆိုတာကို ဘယျတော့မှ ဆုံးခနျးတိုငျမ သှားအောငျ လုပျပေးထားပါတယျ။ ဘာ သာရပျတှဆေိုလညျး ကိုယျတကျခငျြတဲ့ အတနျး ကိုယျအားတဲ့အခြိနျ ကိုယျကွိုကျ တဲ့ ဆရာရှိတဲ့အတနျးကို တကျလို့ရတယျ။ ဒီတဈဘာသာကတြာနဲ့ အတနျးမကပြါ ဘူး။ ကတြဲ့ဘာသာပဲ ပွနျတကျရပါတယျ။ ကိုယျ့မဂြောကို မကွိုကျတော့လို့ရှိရငျ လညျး တခွားမဂြောပွောငျး ခှငျ့ရှိသလို ၂ မဂြော ၃ မဂြောနဲ့လညျး ကြောငျးပွီးလို့ရပါ တယျ။ တခြို့ဆို ကိုယျ့မဂြောကိုယျ သတျ မှတျခှငျ့တောငျရှိပါတယျ။ ပညာရေးမှာ ဒီမိုကရစေီအပွညျ့ပေးထားတာလို့ ထငျပါ တယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး အမရေိကနျက ကြောငျးတှမှော အသကျကွီးကွီးတှရေော လူငယျတှရေော အမွဲရောနတော တှေ့ နရေလရှေိ့ပါတယျ။ တခြို့ဆို ပငျစငျယူပွီး မှ ကြောငျးလာတကျတာတောငျရှိပါတယျ။
ကြှနျတျောကတော့ အမရေိကမှာ အထကျတနျးတှေ မတကျခဲ့ရတော့ အ ထကျတနျးပညာရေးကို ဂဃနဏ မသိပါ ဘူး။ ဒါပမေဲ့ ကောလိပျတို့တက်ကသိုလျတို့နဲ့ အလားသဏ်ဍာနျတူမှာပါ။ ထူးတာတဈခုက တော့ အထကျတနျးထိ အစိုးရက လုံးဝနီး ပါးတာဝနျယူပွီး ကောလိပျတို့တက်ကသိုလျ တို့ကတော့ အရငျးရှငျစီးပှားရေးဆနျဆနျ ငှကွေေးပေးရပါတယျ။ အစိုးရပိုငျတက်ကသိုလျ ဆိုတာမရှိပါဘူး။ တဈကြောငျးနဲ့ တဈ ကြောငျးလညျး ကြောငျးလခမတူသလို သငျကွားမှုဂရုစိုကျမှုလညျးမတူပါ။ ပွညျ နယျအစိုးရတှကေ ပွညျနယျကြောငျးတှေ ကို ငှကွေေးအရထောကျပံ့ပေးပွီး မိမိ ပွညျနယျသူ ပွညျနယျသားတှအေတှကျ ကြောငျးလခဈေးလြှော့ပေးပါတယျ။ ပုဂ်ဂလိ ကပိုငျကြောငျးတှကေတော့ ဈေးမလြှော့ပါ ဘူး။ အလုပျတှကေိုလညျး ပွညျနယျမှာ ပျေါပေါကျအောငျ လုပျပေးပါတယျ။ အခု ပွောခငျြတာက ဆရာတှနေဲ့ ကြောငျးသား ဘဝပါ။
အမရေိကနျနိုငျငံကကြောငျးတှမှော စာသငျနတေဲ့ဆရာအမြားစုက ဒီကြောငျး ရဲ့ဝနျထမျးတှမေဟုတျကွဘဲ အခြိနျပိုငျး သငျကွတာမြားပါတယျ။ သူတို့ရဲ့စာသငျရ ခြိနျ၊ ဘာသာရပျပျေါမူတညျပွီး နှုနျးအမြိုး မြိုးနဲ့ လစာပေးပမေယျ့ တခွားကြောငျးဝနျ ထမျးတှလေို ရပိုငျခှငျ့တှတေော့ မပေးပါ ဘူး။ ဆရာတှကေလညျး အခြိနျပိုငျးသငျ တာကို ကြောငျးသုံးကြောငျးလောကျထိ လှညျ့ပွီးသငျပါတယျ။ ကြှနျတျောဆုံဖူးတဲ့ ဆရာတဈယောကျဆိုရငျ သူ့ရဲ့စာသငျ တနျးနောကျဆုံးနမှေ့ာလုပျတဲ့ စာမေးပှဲ ခနျးထဲကို ဘောငျးဘီတိုနဲ့ ခရီးသှားအိတျနဲ့ လာလို့ မေးကွညျ့တော့ သူက ဒီစာမေးပှဲ ပွီးတာနဲ့ လဆေိပျဆငျးပွီး ကြောငျးနားတဲ့ တဈလအတှငျး တရုတျပွညျရှနျဟိုငျးက တက်ကသိုလျတဈခုမှာ စာသငျဖို့အတှကျ သှားမယျလို့ ပွောပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အဖွလှောကို လယောဉျပြံပျေါမှာစဈပွီး တရုတျပွညျရောကျတာနဲ့ အငျတာနကျ ပျေါကနေ အောငျစာရငျးထုတျပေးလိုကျပါ တယျ။ သူက Ph. D ၃ ခုရထားပွီး ၄ ခု မွောကျကို ကြောငျးသားအဖွဈတကျနေ တုနျးပါ။ ကြောငျးသုံးကြောငျးမှာလညျး ဆရာအဖွဈ စာသငျပါတယျ။ ဆိုလိုခငျြ တာက အမရေိကနျကဆရာတှဟော စာ သငျရတာကို ဝါသနာအရမျးထုံပွီး သူတို့ ရဲ့အခြိနျတှကေိုလညျး အလှနျတနျဖိုးရှိ အောငျသုံးတာကို ဆိုလိုတာပါ။
အမရေိကနျနိုငျငံက စာသငျခနျးတှေ ဟာ ပြျောဖို့ကောငျးသလို အငျမတနျ စိတျ ဝငျစားဖို့ကောငျးအောငျလညျး ဆရာတှေ က သငျကွပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့လို မွနျမာ ပွညျမှာ ဘယျတုနျးကမှကြောငျးမမှနျခဲ့သူ တောငျ ကြောငျးတဈရကျပကျြရမှာ အရမျး ဝနျလေးပါတယျ။ ကြောငျးလခဈေးကွီး တာလညျးပါမှာပေါ့။ သူတို့ရဲ့ဖျောမွူလာ အရ စာတဈနာရီသငျရငျ ပွနျလလေ့ာဖို့ အိမျစာလုပျဖို့ ပရောဂကျြလုပျဖို့အတှကျ ပမျြးမြှ ၂ နာရီခှဲလိုပါတယျ။ ဆိုလိုတာက ကြောငျးသားတှကေို စာသငျခြိနျနညျး နညျးမှာ စိတျဝငျစားအောငျသငျပွီး မိမိ ကိုယျတိုငျလလေ့ာဖို့ တှနျးအားပေးတယျ။ တခြို့ဆရာတှဆေိုရငျ နောကျနေ့ အတနျး ပွနျမတကျခငျ စာကွိုဖတျခဲ့ဖို့မှာပါတယျ။ ဆရာနဲ့ကြောငျးသားဆကျဆံရေးက ပုံမှနျ မှာ အရမျးကိုရငျးနှီးကွပါတယျ။ ဆရာ တျောတျောမြားမြားက ဒုတိယစာသငျခြိနျ ဆို ကြောငျးသားအားလုံးနီးပါးရဲ့ နာမညျ ကိုမှတျမိသှားပွီး စာမေးပှဲပွီးတာနဲ့ ကြောငျး သားတျောတျောမြားမြားကို နာမညျရောလူ ရောမသှေ့ားတတျကွပါတယျ။ အာစရိယ ပူဇျောပှဲလုပျလို့ကတော့ မလှယျပါဘူး။ ဘယျသူ့ကို ဘယျသူကမှ မမှတျမိတော့လို့ ပါ။ နောကျပွီး ဆရာနဲ့ကြောငျးသူ ငွိလို့ ကတော့ အလုပျအပွုတျပဲ။ အထကျတနျး မှာဆို ထောငျပါကတြာပါ။ ဆရာနဲ့ကြောငျး သားတှဟော အလုပျခှငျထဲကမိတျဆှေ တှလေို ရငျးရငျးနှီးနှီးနကွေပါတယျ။ ပေါကျကရလေးဆယျဟာသတှလေညျး ပွောပွီး ရယျရယျမောမော စာသငျကွလေ့ ရှိပါတယျ။ ကြောငျးဆရာတှကေ ကွိမျလုံး မကိုငျပမေယျ့ အကွောငျးပွခကျြ ခိုငျခိုငျ မာမာမရှိဘဲ အိမျစာမှနျမှနျမလုပျရငျတော့ စာသငျခနျးထဲမှာတငျ ငိုသှားအောငျ ယဉျ ယဉျကြေးကြေးလေး ပွောတတျကွပါ တယျ။ နောကျပွီး စာမေးပှဲတှနေဲ့ ပတျ သကျရငျ တရားမြှတအောငျလုပျပေးသလို အလြှော့အတငျးလညျးလုပျပေးတယျ။ ဥပမာ ကြောငျးသား ၇၅ ရာခိုငျနှုနျး လောကျက ပရောဂကျြတဈခုကို သကျ မှတျရကျအတှငျး မပွီးနိုငျရငျ ရကျထပျတိုး ပေးပါတယျ။ အဓိကကတော့ ကြောငျး သားတှေ စာသငျခနျးထဲမှာ ပြျောအောငျနဲ့ သူတို့သတျမှတျထားတဲ့သငျခနျးစာတှေ ကို ပွီးအောငျပါပဲ။
ဆရာတှကေ ကြောငျးသားတှရေဲ့အ ရညျအခငျြးကိုစဈဆေးသလို ကြောငျး သားတှကေလညျး ဆရာတှရေဲ့သငျကွားမှု ပုံစံကို စာမေးပှဲကွီးနီးရငျ အမှတျပေးစနဈ နဲ့ဖွညျ့ပွီး အတနျးထဲကတဈယောကျက စာအိတျပိတျပွီး သတျမှတျထားတဲ့နရော မှာ သှားထညျ့ရပါတယျ။ ပုံစံဖောငျဖွညျ့စဉျ မှာ ဆရာက အခနျးအပွငျကို ထှကျပေးရ ပါတယျ။ ဆရာရဲ့အမှတျကို ကြောငျးရဲ့ အငျတာနကျစာမကျြနှာမှာ တငျထားလရှေိ့ ပါတယျ။ မေးတဲ့မေးခှနျးတှကေ တဈ ကြောငျးနဲ့တဈကြောငျး မတူပမေယျ့ အဓိ ကအခကျြတှကေတော့ ဆရာရဲ့ စာသငျ ခနျးမလာခငျပွငျဆငျခဲ့မှု၊ အတနျးကိုထိနျး သိမျးမှု၊ မေးခှနျးတှကေို ပွနျဖွမှေု၊ သငျ ကွားတငျပွမှု စတာတှကေို ကြောငျးသား တှကေ အမှတျပေးရပါတယျ။
အနှဈခြုပျပွောရရငျတော့ တျောတဲ့ ဆရာ ဆရာမတှရေဲ့အခြိနျကို ကြောငျး တဈကြောငျးမှာပဲ သူနဲ့မဆိုငျတဲ့အလုပျ တှလေုပျခိုငျးပွီး အခြိနျမကုနျစခွေငျး၊ ကြောငျးသားတှကေို စာသငျခြိနျနညျးပွီး ဆှေးနှေးခြိနျမြားခွငျး၊ ကြောငျးသားတှေ ကို မိမိပါသာလလေ့ာစပွေီး မရှငျးတာကို ပဲ ဆရာတှနေဲ့ ဆှေးနှေးစခွေငျး၊ ဆရာနဲ့ ကြောငျးသား တဈဦးကိုတဈဦး မိတျဆှေ အရငျးအခြာပမာ လှတျလှတျလပျလပျ ဆှေးနှေးကွခွငျး၊ ဆရာကလညျး အတနျး စညျးကမျးအတိုငျး ကြောငျးသားတိုငျးအ ပျေါ မြှမြှတတဆကျဆံခွငျး၊ ကြောငျးသား တှကေလညျး ဆရာတှအေပျေါ ပွနျလညျ ပွီး အမှတျပေးစနဈဖွငျ့ ထိနျးခြုပျနိုငျခွငျး စတဲ့ မွနျမာပွညျက တက်ကသိုလျကောလိပျ တှနေဲ့ မတူတဲ့အခကျြကလေးတှေ တှရေ့ မှာပါ။ စနဈတိုငျးဟာ ကောငျးတာလညျးရှိ သလို မကောငျးတာလညျးရှိစမွဲပါ။ ကောငျးတာ သငျ့တျောတာယူပွီး မလိုအပျ တာတော့ ဖယျထားဖို့လိုပါတယျ။
စာသငျကွားခွငျးဆိုတာဟာလညျး တိုငျးပွညျအုပျခြုပျတာနဲ့ခပျဆငျဆငျပါ။ တိုငျးပွညျအုပျခြုပျသူတှမှော ပွညျသူတှေ ထကျသာလှနျတဲ့ နညျးပညာတှရှေိရသလို တျောတဲ့ထကျတဲ့ အမွငျကွီးတဲ့အုပျခြုပျ သူတှရှေိရမှာပါ။ တိုးတကျတဲ့နိုငျငံက စာ သငျခနျးတှမှောလညျး ဆရာတှမှော ကြောငျး သားတှေ တှေးနိုငျတာထကျပိုတှေးပွီး ပိုကောငျးသော စညျးစနဈတှရှေိလို့ စာ ခိုးခဖြို့ဆိုတာ မဖွဈနိုငျသလောကျပါ။ နောကျပွီး စာမေးပှဲတဈခုထဲက ကိုယျ့ရဲ့ စုစုပေါငျးအမှတျကို ဆုံးဖွတျတာမဟုတျ တော့ ခိုးခလြညျး အကြိုးမရှိပါဘူး။ ကြှနျ တျောအခု သူတို့သုံးလရှေိ့တဲ့ စာသူခိုး တှကေိုဖမျးတဲ့စနဈ သို့မဟုတျ ကာကှယျ တဲ့စနဈလေးတှေ ဝမြှေပါ့မယျ။ မွနျမာ ပွညျမှာသုံးလို့ရတာ ရှိခငျြရှိမှာပါ။
ကြှနျတျောအရငျကပွောခဲ့သလို စာ မေးပှဲတှကေ ကွိုကျရာရှေး (multiple choice)တှမြေားပါတယျ။ ဒီတော့ မေးတဲ့ မေးခှနျးအတူတူကို ရောသမမှေ၊ မေးခှနျး ပုံစံလေးမြိုးလောကျခှဲပွီး ကပျလကျြထိုငျနေ သူတှကေို မတူတဲ့မေးခှနျးပုံစံတှေ မေးပါ တယျ။ မေးခှနျးတှကေတော့ တရားမြှတ အောငျ အတူတူပဲမေးပါတယျ။ ဒီတော့ ရှနေ့ောကျ ခိုးကွညျ့လို့မရတော့ပါဘူး။ နောကျပွီး ဒီလိုကွိုကျရာရှေးစာမေးပှဲတှေ ရဲ့သော့ခကျြက ဘယျသူမှအဖွမှေနျမမှနျ မသခြောဘူးလေ။ ဒီတော့ ကိုယျသိခငျြတဲ့ အပုဒျ တခွားသူဆီမှာ လှမျးတှရေ့ရငျ တောငျ သူ့ကိုမယုံရဲတဲ့အတှကျ ခိုးခလြို့ မရပါဘူး။ ပရောဂကျြတှဆေိုရငျလညျး အုပျစုလိုကျလုပျရတာနဲ့ တဈယောကျခငျြး လုပျရတာဆိုပွီး နှဈမြိုးရှိပါတယျ။ နှဈမြိုး လုံးက ကိုယျအုပျစုအတှကျ ကိုယျ့အတှကျ သီးသနျ့ကိုယျပိုငျခေါငျးစဉျတှရှေိတော့ တခွားအုပျစု တခွားသူကလညျး ကိုယျ့ကို မကူညီနိုငျပါဘူး။ ပရောဂကျြရေးရတာကလညျး ဘောငျမရှိပါဘူး။ ဥပမာ အနညျးဆုံး စာမကျြနှာ ၅ မကျြနှာ၊ ၁၅ မကျြနှာ သတျမှတျခကျြရှိပါတယျ။ ဒီနခေ့တျေလို အငျတာနကျကွီးရှိတာ ခိုးခဖြို့လှယျပါတယျလို့ ထငျခငျြထငျပါမယျ။ တကယျတော့ ပိုဆိုးသှားတာပါ။ ကိုယျရေးတဲ့စာ ဟာ တခွားသူဆီက မှီငွမျးမယျဆိုရငျ "quotation" လို့ချေါတဲ့ သူမြားစာပိုဒျကို မကျြတောငျအဖှငျ့အပိတျထဲ ထညျ့ထားရ ပါတယျ။ နောကျတဈမြိုးက သူမြားရေး ထားတာရဲ့ အယူအဆကိုယူမယျဆိုရငျ အဲဒီစာမကျြနှာရဲ့အောကျမှာ အငျတာနကျ လိပျစာကို အတိအကဖြျောပွပေးရပါတယျ။ ဥပမာ Credit- Aung Myo Win ဆိုပွီး ရေးတာနဲ့ မလုံလောကျတော့ပါဘူး။ ဘယျ ကရသလဲဆိုတာ အတိအကမြပွောရငျ ခိုး တာနဲ့အတူတူလို့ သတျမှတျပါတယျ။
ပရောဂကျြတှဆေိုရငျ သတျမှတျထားတဲ့ ရကျ၊ အခြိနျ၊ အတိအကကြိုOnline blackboard မှာ upload လုပျ တငျရပါတယျ။ ဒီတော့ ဘယျအခြိနျတငျ သလဲ အငွငျးပှားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ နောကျအရေးကွီးတဲ့အခကျြက တငျ လိုကျတဲ့ပရောဂကျြဟာ အဲဒီ blackboard website ကနေ ကိုယျ့စာထဲမှာ ပါတဲ့စာနဲ့ အငျတာနကျအားလုံးမှာ သူ မြားရေးပွီးတာတှကေို စက်ကနျ့ ၃၀ အတှငျး တိုကျစဈလိုကျပါတယျ။ ဒီတော့ ကိုယျ ရေးထားတဲ့စာမှာ တခွားသူတှဆေီက ဘယျလောကျခိုးကူးထားသလဲဆိုတာ ခကျြခငျြးပျေါပါတယျ။ ဒီအဖွကေို မိမိဘာ သာ မိမိသိသလို ဆရာကလညျးသိသှားပါ တယျ။ တူတာ ၅ ရာခိုငျနှုနျးအောကျက စစနေမ ဟာ လုံးဝသနျ့ရှငျးတယျလို့ ပွောပါ တယျ။ ၅-၃၀ ရာခိုငျနှုနျးထိကို အမြား အားဖွငျ့လကျခံပွီး ၃၀ ရာခိုငျနှုနျးကြျော ရငျတော့ အသဈပွနျရေးရပါတယျ။ သငျ ခနျးစာတျောတျောမြားမြားမှာ presentation တှရှေိပါတယျ။ ကိုယျ့ပရောဂကျြအ ကွောငျး၊ ကိုယျလလေ့ာရတဲ့ စာပေ အနု ပညာ စတာတှကေို အတနျးရှထှေ့ကျ ပွောရပါတယျ။ အကယျ၍ ကိုယျလလေ့ာ ထားတာ ကိုယျတကယျမသိဘူးဆိုရငျ ကိုယျစကားပွောနခြေိနျသာ ဟနျဆောငျ ပွီး သိသလိုလိုနဲ့ပွောလို့ရပမေယျ့ ဆရာ ရော တခွားကြောငျးသားတှပေါ ဝိုငျးမေး ကွတဲ့အခါ တကယျမသိလို့ကတော့ ဘယျလိုမှ ဖွလေို့မရနိုငျပါဘူး။ တဈခါက အတနျးတဈခုမှာ သူငယျခငျြးတဈယောကျ က သူစကားပွောပွီးရငျ ကတျသီးကတျ သတျမေးခှနျးတှမေမေးဖို့ ကျောဖီတဈခှကျ နဲ့ လာဖားဖူးတယျ။ ပထမတော့ ကတိအ တိုငျး မမေးပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ မေးစရာတဈခု ခေါငျးထဲရောကျလာလို့မေးလိုကျတာ သူ လညျးမဖွနေိုငျဘဲ နောကျဆုံး ဆရာပါဝိုငျး စဉျးစားပွီးဖွပေေးပါတယျ။ အဲဒီနိုငျငံက ခဈြစရာဓလတေ့ဈခုက မသိတာကို မသိ ဘူးလို့ ရိုးရိုးဝနျခံရငျအပွဈမရှိဘူး။ သိသ လိုလိုလုပျရငျတော့ အမှတျလြော့ပွီး ခှငျ့မ လှတျကွပါဘူး။
ကြှနျတေျာ့စိတျအထငျပွောရရငျ တော့ မွနျမာပွညျမှာ အကွောငျးအမြိုးမြိုး ကွောငျ့ ဆရာတှေ အငျအားစိုကျတာနညျး သှားတယျထငျပါတယျ။ ဒီတော့ ပညာရေး ပွနျလညျဦးမော့လာစဖေို့အတှကျဆိုရငျ ဆရာဆရာမတှေ စိတျဓာတျတကျကွှလာ အောငျ၊ ခတျေမီပညာရပျတှကေို ဆညျးပူး လာအောငျ ကြောငျးသားတှအေပျေါ ပိုအ ခြိနျပေးနိုငျအောငျ အစိုးရအပွငျ ဘကျစုံ ထောငျ့စုံက ဝိုငျးဝနျးကွံဆောငျပေးရမယျ ထငျပါတယျ။ Motivation ပြောကျနတေဲ့ ဆရာဆရာမတှမြေားနတေယျလို့ ခံစားမိ ပါတယျ။ တကယျကွိုးစားသငျနတေဲ့ ဆ ရာဆရာမတှကေတော့ ဝါသနာ၊ စတေနာ ကိုအရငျးခံပွီး အနဈနာခံ သငျကွားပေး နတေယျလို့မွငျပါတယျ။
(ယခင်အပတ်မှ အဆက် ...)
အမေရိကန်မှာ အထက်တန်းပညာ ရေးအထိ ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ မြို့နယ်အစိုး ရအဖွဲ့အစည်းတွေက ဗဟိုအစိုးရဆီက ရတဲ့ထောက်ပံ့ငွေရယ်၊ မြို့နယ်ကရတဲ့ပိုင် ဆိုင်မှုအခွန်ရယ်ပေါင်းပြီး ကိုယ့်မြို့နယ်က ကျောင်းဆရာကအစ ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေး အဆုံး ပါဝင်ပတ်သက်ပါတယ်။ ကျောင်း သားတွေဟာ ၁၀ တန်းနဲ့တူတဲ့ အထက် တန်းအောင်လက်မှတ် (၁၂ တန်းထိရှိ) ရဖို့အတွက် ကျောင်းစစ်စာမေးပွဲအပြင် ပြည်နယ်အစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့ Regent စာမေးပွဲအောင်ရပါတယ်။ ဒါမှ GED ဆိုတဲ့ အထက်တန်းပြီးဆုံးပါတယ်။ ဒီ Regent စာမေးပွဲကျရင်လည်း မအောင်မချင်း ပြန်ဖြေလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁၀ တန်းအောင်လက်မှတ်ပြရုံနဲ့ တက္ကသိုလ် သွားလို့မရသေးပါဘူး။ တက္ကသိုလ်သွားဖို့ အတွက် ကျောင်းသားတွေဟာ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတစ်ခုကအုပ်ချုပ်တဲ့ SAT စာမေးပွဲကိုဖြေရပါတယ်။ ဒီစာမေးပွဲဟာ သူတို့ နိုင်ငံသားတွေအပြင် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က အမေရိကားမှာ ကျောင်းလာတက်ချင်သူ တိုင်းဖြေရပါတယ်။ စာမေးပွဲကတော့ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့သင်္ချာကိုပဲစစ်ပါတယ်။ ဒီ SAT စာမေးပွဲက ကိုယ်ရတဲ့အမှတ်ကို မကြိုက်ရင်ပြန်ဖြေလို့ရပါတယ်။ အချိန် သတ်မှတ်ချက်တချို့တော့ ရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံး ကိုယ့်အမှတ်ကို ကိုယ်ကြိုက် ပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ်တက်ချင်တဲ့ကျောင်း တွေကို လျှောက်ရပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကိုယ့် SATအမှတ်ရယ် GED စာရွက်ရယ်အပြင် မိမိဘာကြောင့် ဒီကျောင်းကိုတက်ချင်တာလဲဆိုတာကို စာစီစာကုံးရေးရပါတယ်။ နောက်ပြီး ဆရာဆရာမတွေအပြင် မိတ်ဆွေတွေရဲ့ ထောက်ခံချက်၊ မိမိအထက်တန်းမပြီးခင် မိမိဝါသနာပါတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ လုပ် အားပေးလုပ်ခဲ့တာတွေပါ သက်သေအ ထောက်အထားတွေနဲ့ တင်ပြရပါတယ်။ နောက်ဆုံး မိမိလျှောက်တာက ၁၀ ကျောင်း၊ မိမိကိုလက်ခံတာက ကျောင်းငါးကျောင်း ဆိုရင် လက်ခံတဲ့ကျောင်းငါးကျောင်းကို သွားလေ့လာကြပြီး မိမိနဲ့အဆင်ပြေမယ့် ကျောင်းကိုရွေးချယ်ကြပါတယ်။ ဒီနေရာ မှာပြောချင်တာက အထက်တန်းအထိကိုပဲ အစိုးရကပါဝင်ပတ်သက်ပြီး တက္ကသိုလ် အားလုံးဟာ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ကိုယ်ပိုင်အုပ် ချုပ်မှုနဲ့ လည်ပတ်ကြတာပါ။ ပြည်နယ် အစိုးရတွေက သူတို့ဘတ်ဂျက်နဲ့ထောက် ပံ့ထားတဲ့ကျောင်းတွေကို ဏကဘူငခ sခ့သသူ လို့ခေါ်ပြီး ပြည်နယ်သူ/ပြည်နယ်သား တွေကို ကျောင်းလခလျှော့ပေးပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကကျောင်း Public school တွေ ကတော့ ဈေးလျှော့ပေးလေ့မရှိဘဲ ပညာသင်ဆု (scholarship) ပဲ ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာလွဲနေတာအချို့က အထက်တန်းပညာရေးကိုတော့ ပုဂ္ဂလိက တွေကို လုပ်ပိုင်ခွင့်များစွာပေးပြီး တကယ် ပုဂ္ဂလိကဖြစ်သင့်တဲ့ တက္ကသိုလ်ပညာရေး ကိုတော့ အစိုးရက တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ကိုင်တွယ်ထားပါတယ်။ နောက်ပြီး တက္က သိုလ်တွေကမွေးထုတ်နေတာက ကျောင်း ပြီးရင် အပြင်လောကနဲ့ ဆက်စပ်မှုမရှိတဲ့ မေဂျာဘွဲ့တွေပဲ အများဆုံးဖြစ်နေတာ ဟာ အနာဂတ်လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးဖို့ အထောက်အကူမဖြစ်ပါဘူး။ နောက်ပြီး ဆယ်တန်းအမှတ်အပေါ်လိုက် ပြီး လူငယ်တွေရဲ့အရည်အချင်းကိုသတ် မှတ်နေတာ မှားနေတယ်ထင်တာပါပဲ။ အမေရိကားမှာ အထက်တန်းကို ပုဂ္ဂလိက ပိုင်တဲ့ Catholic school လို charter school တွေရှိပေမယ့် အထက်တန်းလွှာ တွေအတွက် သပ်သပ်ရှိပါတယ်။
အမေရိကန်ကကျောင်းတွေမှာ စာ သင်တဲ့ပုံစံ စာမေးပွဲမေးတဲ့ပုံစံဟာ မြန်မာ တွေအတွက် အထူးအဆန်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့စာသင်ပုံက ကျောင်းသားတွေကို ဘာကိုမှအလွတ်မကျက်ခိုင်းပါဘူး။ အဓိ ကကွာတာကတော့ Formula တွေသင် တဲ့အခါပါပဲ။ ကျွန်တော်မှတ်မိပါသေးတယ် YIT ပထမနှစ်တုန်းကဆို သင်္ချာတစ်ဘာ သာတည်းမှာတင် Formula ၁၀၀ နီးပါး မှတ်ခဲ့ရပါတယ်။ အမေရိကန် အယူအဆ ကတော့ အဲဒီ Formula တွေဟာ ကျောင်း ပြီးရင် ခေါင်းထဲမှာမကျန်ဘူးဆိုတာပါဘဲ။ ဒီတော့ သူတို့စာသင်ပုံက concept ကိုပဲ အဓိကသင်တာပါ။ စာမေးပွဲခန်းတွေမှာဆို ရင် calculator အပြင် Formula စာရွက်တွေ တစ်ယောက်တစ်ရွက်စီပေးထား ပါတယ်။ ဒီတော့ ကျောင်းသားတွေဟာ Formula တွေကိုမှတ်ဖို့မလိုပါဘူး။ တွက် ရမယ့်ပုစ္ဆာဆိုရင် ပေးထားတဲ့ Formula ထဲက ကိုယ်ထင်တဲ့ဟာကိုထည့်ပြီးတွက် တော့ အချိန်မြန်တယ်။ ဒီတော့ ပုစ္ဆာများ များကိုမေးလို့ရပါတယ်။
တကယ်သိရမှာက ဘယ်မေးခွန်းကို ဘယ် Formula သုံးပြီး တွက်ရမယ်ဆို တာပါပဲ။ တကယ့် လက်တွေ့ဘ၀မှာလည်း Formula ဘယ်လောက်ပဲသိသိ calculator တွေ computer program တွေနဲ့ပဲ တွက်နေတာပါ။ သူတို့ရဲ့အဓိကဆောင် ပုဒ်က "Don't reinvent the wheel" တဲ့။ ဟုတ်တယ်လေ ဘီးကိုထွင်ခဲ့ကြလို့ ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူတွေလိုရာသွားပြီး လကမ္ဘာတောင် ခရီးရောက်နေမှာတော့ ဘာ ဖြစ်လို့ဘီးကို အချိန်ကုန်ခံပြီး တီထွင်ဖို့လိုမှာလဲ။ ဒီလိုဘီးတပ်ရင် ရွေ့ရလွယ် မယ်ဆိုတဲ့အိုင်ဒီယာ သိရင်ရပြီဆိုတာကို အဓိကထားပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က အဟောင်းတွေ ကိုမှတ်ရတာများရင် အသစ်တီထွင်ရာမှာ အားနည်းသွားတတ်တာကိုလည်း သူတို့ ကသတိထားပါတယ်။ ဥပမာတစ်ခုပေးရ ရင် ကွန်ပျူတာရဲ့ CPU ကိုလုပ်တာ လက် ရှိ အမြန်ဆုံးကွန်ပျူတာ CPU ပါ။ ဒါပေ မယ့် ဒီထက်မြန်တဲ့ CPU ကိုထွင်ဖို့ဆိုရင် အသစ်ထုတ်လိုက်တဲ့ ပိုမြန်တဲ့ CPU ကို သုံးရမှာပါ။ အဟောင်း CPU ကို သုံးလို့ မရပါဘူး။ ဒီတော့ အမေရိကန်ကျောင်းသားတွေကို သင်ကြားတာက လက်ရှိလက်ခံပြီးသား သီအိုရီတွေသုံးပြီး ဒီထက် ကောင်းတဲ့သီအိုရီကို တီထွင်ခိုင်းတာပါ။
တစ်ခါတရံ အဟောင်းကိုသုံးရင်းနဲ့ အဟောင်းရဲ့အားနည်းချက်တွေ မှားယွင်း မှုတွေကို ပိုပြီးသိမြင်လာတော့ အဟောင်း ကိုပယ်ဖျက်ပြီး အသစ်တီထွင်လေ့ရှိပါ တယ်။ အများအားဖြင့် Finance (ငွေရေး ကြေးရေး)ဘာသာရပ်တွေမှာဆိုရင် သီအိုရီတွေက တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး ပြောင်းနေတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်ပညာရေးရဲ့အားနည်းချက်က အဟောင်းကိုပဲ အသေမှတ်ခိုင်းထားတော့ အသစ်တီထွင်ဖို့ အချိန်မရတော့တဲ့အပြင် မှားယွင်းနေတဲ့ အဟောင်းအပေါ်မှာ အရိုးစွဲသွားတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါက စာရေးဆရာကြီးအောင် သင်းပြောခဲ့သလို ''အဖေထက် သားက တစ်လ အမြဲကြီးနေရမယ်။ အဲဒီလိုမကြီးရင် နောက်မျိုးဆက်ဟာ ပိုပြီးပညာနည်း သွားမယ်''တဲ့။ သူပြောတာက အဖေက ဆယ်တန်းပဲအောင်ရင် သားကဘွဲ့ရသင့်တာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့ပညာ ရေးကိုလည်း နောက်မျိုးဆက်ကို အသိဉာဏ်တွေ ပိုပြီးဖွင့်ပေးနိုင်အောင် လွတ် လပ်စွာတွေးခွင့်လုပ်ခွင့်ပေးပြီး ပိုကျယ်ပြန့်တဲ့ပညာတွေကို လေ့လာနိုင်အောင် လုပ်ပေးသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒီလို လုပ်ရာမှာ အရေးအကြီးဆုံးအချက်က ဆရာတွေပါ။
ကျွန်တော် အနန္တဂိုဏ်းဝင် ဘယ်ဆရာကိုမှ စော်ကားခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်က ဆရာ၊ ဆရာမအချို့ဟာ တချို့ကျောင်းသားတွေရဲ့ ကတ်သီးကတ် သတ်မေးခွန်းတွေကို အချိန်ပေးပြီးမဖြေချင်ကြပါဘူး။ ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းကတော့ အဲဒီဆရာကိုယ်တိုင် အဖြေမသိလို့ သော်လည်းကောင်း၊ သိသော်လည်း ဖြေရမှာစိတ်မရှည်လို့သော်လည်းကောင်း ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာတော့ ဖြေလွန်းလို့ တစ်ခါတလေ စာသင်ချိန်တစ်ဝက်လောက် ကုန်သွားတတ်ပါတယ်။ သူတို့လိုချင်တာက ဆန်းသစ်တဲ့တွေးခေါ်မှုပါ။ သမာရိုးကျအတွေးအခေါ်ကို စိတ်မဝင်စားပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း တီထွင်မှု တော်တော်များများကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အကျဉ်းချုံး ပြောရရင်တော့ မြန်မာပြည်ပညာရေးမှာ ဆရာဆရာမတွေကိုယ်တိုင် ခေတ်မီ အောင် စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာနေရပါမယ်။ ကျောင်းသားတွေကို မေးခွင့်များစွာ ပေးရမယ်။ သင်ခန်းစာတွေကို အာငုံ ဆောင်နိုင်ဖို့ထက် သိနားလည်အောင် ပိုကြိုးစားပြီး လေ့လာရမယ့်ဧရိယာကို အ ကျယ်ကြီးဖွင့်ပေးရမယ်။ ဥပမာ ကျောင်း သားတွေအတွက် ဒီစာအုပ်ထဲကပဲ မေး ခွန်းတွေမေးမယ်ဆိုရင် တခြားကောင်းနိုး ရာရာတွေကိုရှာဖတ်ဖို့ စိတ်မဝင်စားတော့ ဘူးလေ။ ဒီတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စာ အုပ်ထဲမှာမပါတဲ့မေးခွန်းတွေကို ၁၀-၂၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် အမှတ်ပိုအဖြစ်မေးရင် ကျောင်းသားတွေ စာကြည့်တိုက်ကို အ ချိန်မှန်သွားကြမှာပါ။
နောက်တစ်ခုက မေဂျာခွဲခြင်းပါ။ မြန်မာပြည်မှာက တကယ့်အလုပ်ခွင်နဲ့ မ ပတ်သက်တဲ့မေဂျာတွေ မတရားများနေ ပါတယ်။ ဥပမာ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ ဆယ်တန်းမှာအမှတ်မကောင်းလို့ အ သက်မွေးဝမ်းကြောင်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုခု ကို မဝင်နိုင်ခဲ့ရင် သူရဲ့ဘ၀က Physics, Chemistry, Zoology တို့လိုဘာသာတွဲ တစ်ခုခုကို သင်ချင်ချင် မသင်ချင်ချင် ယူ ရပါတော့တယ်။ အဲဒါတွေနဲ့ သုံးလေးနှစ် လောက်အချိန်ကုန်ပြီးရင်လည်း လက် တွေ့အလုပ်ခွင်တွေနဲ့ ဘာမှမအပ်စပ်တဲ့ ဘွဲ့တွေပေးလိုက်တော့ အလုပ်ခွင်အ တွက်လည်း အကျိုးမပြု၊ ကျောင်းတက်ပြီး ငွေကုန်ရကျိုးလည်းမနပ်ဘဲ ဘွဲ့ရ၊ အဲဒီ လိုနဲ့ လယ်ရာပြန်စားရေးတွေများသွား တော့ ယနေ့လို ပွင့်လင်းလာတဲ့အချိန်မှာ Skilled worker တွေရှားသွားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီမေဂျာ တွေဆိုတာ တကယ်စိတ်ဝင်စားသူတွေပဲ ပေးတက်သင်ပြီး ထူးချွန်ထက်မြက်ပေ မယ့်လည်း တခြားအသက်မွေးဝမ်း ကျောင်း အမှတ်မမီသူတွေအတွက် သူတို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အသက်မွေးပညာရပ်တွေကို လေ့လာခွင့်ပေးသင့်ပါတယ်။
အမေရိကန်မှာတော့ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းဘာသာရပ်တွေ လေ့လာသူ တွေက ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းထက် မနည်းပဲရှိပြီး မေဂျာတွေကို တကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူ က ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းတောင်မရှိပါဘူး။ မိမိ စိတ်ကြိုက်မေဂျာကို ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကြိုက်သလိုပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
အမေရိကန်ပညာရေးမှာ ကျောင်း သားတွေကို လိုချင်တဲ့မေဂျာကအစ သင် ယူရမယ့်ဘာသာတွဲတွေအဆုံး ဒီမိုကရေ စီဆန်ဆန် လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ပထမ ဆုံးပြောချင်တာက သူတို့ရဲ့ ယူနစ်သတ် မှတ်ချက်အကြောင်းပါ။ ဒီ Unit ကို credit လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ သင်္ချာဘာသာတစ်ခုကို ၃ ယူနစ်သတ်မှတ်တယ်ဆို ရင် ဒီအတန်းအတွက် တစ်ပတ်ကို စာ သင်ချိန် ၃ နာရီပါ။ ၁ နာရီခွဲ နှစ်ချိန်ပေါ့။ အများအားဖြင့် တစ်ရက်ကျော် တစ်ခါ တွေ့ပါ။ တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူး သို့မဟုတ် အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေးပါ။ တချို့အတန်း တွေဆိုရင် စနေတစ်ရက်ထဲမှာပဲ တစ် နာရီခွဲပြီးရင် ခဏနားပြီး ၃ နာရီတောက် လျှောက်သင်ပါတယ်။ တချို့ဘာသာရပ် တွေက သင်ရမှာများတော့ တစ်ပတ် ၄ နာရီသင်ရင် ၄4credits ပဲ။ တချို့သောဘာ သာရပ်တွေ ဥပမာ အနုပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘာ သာတွေဆို2credits လောက် သတ် မှတ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အများအားဖြင့် တော့ တစ်တန်းကို3credits သတ်မှတ် ပါတယ်။ ဒီတော့ တက္ကသိုလ်ပြီးဖို့ဆိုရင် အနည်းဆုံး အတန်း ၄၀ တက်ရပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ credit အ ကြောင်းရှင်းပြပြီးတော့ သူတို့တွေ ဘွဲ့ရဖို့ ဘယ်လိုသတ်မှတ်သလဲဆိုတာ ရှင်းပြပါရ စေ။ ကောလိပ်ဆိုရင် ၆၀-၆၅ credits၊ တက္ကသိုလ်ပြီးဖို့ဆိုရင် ၁၂၀-၁၃၀ credits သတ်မှတ်ပါတယ်။ Master ပြီးဖို့ ဆိုရင်တော့ နောက်ထပ် ၃၃-၄၀ credits ထပ်တက်ရပါတယ်။ မာစတာရဲ့အတန်း တွေကတော့ ပိုပြီး စာလုပ်ချိန်များပါတယ်။ ဒါတွေက ကျောင်းရဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေ ပါ။ ကျွန်တော်အရင်ကပြောခဲ့သလို ကျောင်းသားတွေက ကိုယ်စာဖတ်နိုင်သ လောက် ၊ ငွေကြေးတတ်နိုင်သလောက်၊ အချိန်ပေးနိုင်သလောက်ပေါ်မူတည်ပြီ3းcredits အတန်းတစ်တန်းကနေ 16 credits (၆ တန်း)လောက်ထိယူကြပါတယ်။ 12 credits ယူတဲ့ကျောင်းသားကို Full time (အချိန်ပြည့်ကျောင်းသား) လို့ ခေါ်ပြီး အဲဒီထက်နည်းရင်တော့ Part time (အချိန်ပိုင်း)လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ (မာစတာတန်းကတော့9credits ကို အချိန်ပြည့်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်)။ ဒီသတ်မှတ်ချက်တွေကလည်း ပညာသင်ဆုတို့ ထောက်ပံ့ကြေးရဖို့အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တချို့ဆုတွေက အချိန်ပြည့်ကျောင်းသားဖြစ်ရမယ် ဆိုပြီးတော့ ချုပ်ထားတတ်ကြလို့ပါ။
အမေရိကန်နိုင်ငံက ပညာရေးစနစ်မှာ အထက်ကပြောခဲ့သလို credit အရေ အတွက် ပြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပေမယ့် သူ တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဘာသာရပ်အမျိုးအ စားတွေထဲက မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဘာ သာတွေကိုလည်း ယူရပါတယ်။ မယူရင် ဘွဲ့မရပါဘူး။ ဥပမာ Finance Business major ကျောင်းသားတစ်ယောက် ဘွဲ့ရဖို့ လိုအပ်ချက်တွေဆိုရင် Science, Libe-ral arts credit တွေကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ အရေအတွက် ယူကိုယူရပါတယ်။ မေဂျာ အတန်းတွေပဲ ပြီးနေလို့မရပါဘူး။ ဥပမာ Maths, Physics, Chemistry, Biology လေးတန်းထဲက ကြိုက်တဲ့သုံးတန်းကို ယူ ရမယ်ဆိုရင် အဲဒါမပြီးမချင်း ကျောင်းမပြီး ပါဘူး။ Liberal Arts အတန်းတွေဆိုရင် လည်းဒီအတိုင်းပဲ။ Sociology, Psy-chology, Philosophy စတဲ့ အတန်း တွေကနေ သူတို့သတ်မှတ်ထားသလောက် ယူရပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Core Courses တွေပဲ။ Business Student တွေအားလုံးအတွက် မယူမနေရအတန်း တွေရှိပါတယ်။ ဥပမာ Business Law, Literature, Economic, accounting, Marketing, Finance စတဲ့အတန်းတွေ က ရွေးချယ်စရာမရှိဘဲ ယူကိုယူရပါတယ်။ ကိုယ့်မေဂျာမှာရှိတဲ့ အဓိကအတန်းတွေ ကို စာမေးပွဲနှစ်ကြိမ်ထက် ကျလို့မရပါဘူး။ ကျရင် တခြားမေဂျာပြောင်းရပါတယ်။ ဥပမာ Accounting ကျောင်းသားဟာ Accounting Major ထဲက အတန်းကို ကျရင် accounting ဆက်တက်ခွင့်မရှိ တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Marketing မေဂျာပြောင်းတက်ရင် အရင်တက်ထားတဲ့ ဘုံအတန်းတူတွေကို ပြန်တက်စရာမလိုပဲ Marketing အတန်းတွေပဲပြန်ယူရတာပါ။ Accounting Major အတန်းတွေတော့ ဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့။
အမေရိကန်ပညာရေးရဲ့ အဓိကထူး ခြားချက်က ပညာရေးကို အစိုးရက တိုက် ရိုက်မကိုင်တွယ်ပါဘူး။ ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာနက ကျောင်းတွေရဲ့သင်ကြားပုံ၊ သုံးတဲ့ Textbook စတဲ့ စည်းကမ်းပိုင်းတွေပဲထိန်းပြီး ထောက်ပံ့ကြေးဆိုရင်လည်း ကျောင်းတွေကို အချိုးကျခွဲဝေပေးပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေကိုလည်း ဝင်ငွေအပေါ်မူတည်ပြီး ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးတဲ့အပြင် အတိုးနှုန်းနည်းနည်းနဲ့ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်ပြီး ငွေချေးခွင့်ပြုပါတယ်။ဘဏ် တွေကလည်း ကျောင်းသားတွေကို ချေးရတာ အလုပ်ရရင်ပြန်ပေးမှာသေချာတော့ အတိုးနှုန်းသက်သက်သာသာနဲ့ ချေးပါတယ်။ ကျောင်းပြီးလို့ ခြောက်လအကြာက နေစပြီး ဆယ်နှစ်အရစ်ကျနဲ့ ပြန်ဆပ်ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်ပညာရေးဟာ အစိုးရရဲ့ တိုက်ရိုက်ပါဝင်မှု အရမ်းများနေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်တွေကို အပြိုင်အဆိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးလိုက်ရင် ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ကျောင်းတွေ များစွာပေါ် ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ အစိုးရက သွယ် ဝိုက်သောနည်းနဲ့ပဲ ထိန်းချုပ်စေချင်ပါ တယ်။
(ယခငျအပတျမှ အဆကျ ...)
အမရေိကနျမှာ အထကျတနျးပညာ ရေးအထိ ပွညျနယျအစိုးရနဲ့ မွို့နယျအစိုး ရအဖှဲ့အစညျးတှကေ ဗဟိုအစိုးရဆီက ရတဲ့ထောကျပံ့ငှရေယျ၊ မွို့နယျကရတဲ့ပိုငျ ဆိုငျမှုအခှနျရယျပေါငျးပွီး ကိုယျ့မွို့နယျက ကြောငျးဆရာကအစ ကြောငျးအုပျခြုပျရေး အဆုံး ပါဝငျပတျသကျပါတယျ။ ကြောငျး သားတှဟော ၁၀ တနျးနဲ့တူတဲ့ အထကျ တနျးအောငျလကျမှတျ (၁၂ တနျးထိရှိ) ရဖို့အတှကျ ကြောငျးစဈစာမေးပှဲအပွငျ ပွညျနယျအစိုးရကသတျမှတျထားတဲ့ Regent စာမေးပှဲအောငျရပါတယျ။ ဒါမှ GED ဆိုတဲ့ အထကျတနျးပွီးဆုံးပါတယျ။ ဒီ Regent စာမေးပှဲကရြငျလညျး မအောငျမခငျြး ပွနျဖွလေို့ရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ၁၀ တနျးအောငျလကျမှတျပွရုံနဲ့ တက်ကသိုလျ သှားလို့မရသေးပါဘူး။ တက်ကသိုလျသှားဖို့ အတှကျ ကြောငျးသားတှဟော ပုဂ်ဂလိက ကုမ်ပဏီတဈခုကအုပျခြုပျတဲ့ SAT စာမေးပှဲကိုဖွရေပါတယျ။ ဒီစာမေးပှဲဟာ သူတို့ နိုငျငံသားတှအေပွငျ ကမ်ဘာအရပျရပျက အမရေိကားမှာ ကြောငျးလာတကျခငျြသူ တိုငျးဖွရေပါတယျ။ စာမေးပှဲကတော့ အင်ျဂလိပျစာနဲ့သင်ျခြာကိုပဲစဈပါတယျ။ ဒီ SAT စာမေးပှဲက ကိုယျရတဲ့အမှတျကို မကွိုကျရငျပွနျဖွလေို့ရပါတယျ။ အခြိနျ သတျမှတျခကျြတခြို့တော့ ရှိပါတယျ။ နောကျဆုံး ကိုယျ့အမှတျကို ကိုယျကွိုကျ ပွီဆိုရငျတော့ ကိုယျတကျခငျြတဲ့ကြောငျး တှကေို လြှောကျရပါတယျ။
ဒီနရောမှာ ကိုယျ့ SATအမှတျရယျ GED စာရှကျရယျအပွငျ မိမိဘာကွောငျ့ ဒီကြောငျးကိုတကျခငျြတာလဲဆိုတာကို စာစီစာကုံးရေးရပါတယျ။ နောကျပွီး ဆရာဆရာမတှအေပွငျ မိတျဆှတှေရေဲ့ ထောကျခံခကျြ၊ မိမိအထကျတနျးမပွီးခငျ မိမိဝါသနာပါတဲ့လုပျငနျးခှငျတှမှော လုပျ အားပေးလုပျခဲ့တာတှပေါ သကျသအေ ထောကျအထားတှနေဲ့ တငျပွရပါတယျ။ နောကျဆုံး မိမိလြှောကျတာက ၁၀ ကြောငျး၊ မိမိကိုလကျခံတာက ကြောငျးငါးကြောငျး ဆိုရငျ လကျခံတဲ့ကြောငျးငါးကြောငျးကို သှားလလေ့ာကွပွီး မိမိနဲ့အဆငျပွမေယျ့ ကြောငျးကိုရှေးခယျြကွပါတယျ။ ဒီနရော မှာပွောခငျြတာက အထကျတနျးအထိကိုပဲ အစိုးရကပါဝငျပတျသကျပွီး တက်ကသိုလျ အားလုံးဟာ ပုဂ်ဂလိကပိုငျ ကိုယျပိုငျအုပျ ခြုပျမှုနဲ့ လညျပတျကွတာပါ။ ပွညျနယျ အစိုးရတှကေ သူတို့ဘတျဂကျြနဲ့ထောကျ ပံ့ထားတဲ့ကြောငျးတှကေို ဏကဘူငခ sခ့သသူ လို့ချေါပွီး ပွညျနယျသူ/ပွညျနယျသား တှကေို ကြောငျးလခလြှော့ပေးပါတယျ။ ပုဂ်ဂလိကကြောငျး Public school တှေ ကတော့ ဈေးလြှော့ပေးလမေ့ရှိဘဲ ပညာသငျဆု (scholarship) ပဲ ပေးလရှေိ့ပါတယျ။
မွနျမာပွညျမှာလှဲနတောအခြို့က အထကျတနျးပညာရေးကိုတော့ ပုဂ်ဂလိက တှကေို လုပျပိုငျခှငျ့မြားစှာပေးပွီး တကယျ ပုဂ်ဂလိကဖွဈသငျ့တဲ့ တက်ကသိုလျပညာရေး ကိုတော့ အစိုးရက တငျးတငျးကပျြကပျြ ကိုငျတှယျထားပါတယျ။ နောကျပွီး တက်က သိုလျတှကေမှေးထုတျနတောက ကြောငျး ပွီးရငျ အပွငျလောကနဲ့ ဆကျစပျမှုမရှိတဲ့ မဂြောဘှဲ့တှပေဲ အမြားဆုံးဖွဈနတော ဟာ အနာဂတျလူသားအရငျးအမွဈ ဖှံ့ဖွိုးဖို့ အထောကျအကူမဖွဈပါဘူး။ နောကျပွီး ဆယျတနျးအမှတျအပျေါလိုကျ ပွီး လူငယျတှရေဲ့အရညျအခငျြးကိုသတျ မှတျနတော မှားနတေယျထငျတာပါပဲ။ အမရေိကားမှာ အထကျတနျးကို ပုဂ်ဂလိက ပိုငျတဲ့ Catholic school လို charter school တှရှေိပမေယျ့ အထကျတနျးလှာ တှအေတှကျ သပျသပျရှိပါတယျ။
အမရေိကနျကကြောငျးတှမှော စာ သငျတဲ့ပုံစံ စာမေးပှဲမေးတဲ့ပုံစံဟာ မွနျမာ တှအေတှကျ အထူးအဆနျးဖွဈနိုငျပါတယျ။ သူတို့ရဲ့စာသငျပုံက ကြောငျးသားတှကေို ဘာကိုမှအလှတျမကကျြခိုငျးပါဘူး။ အဓိ ကကှာတာကတော့ Formula တှသေငျ တဲ့အခါပါပဲ။ ကြှနျတျောမှတျမိပါသေးတယျ YIT ပထမနှဈတုနျးကဆို သင်ျခြာတဈဘာ သာတညျးမှာတငျ Formula ၁၀၀ နီးပါး မှတျခဲ့ရပါတယျ။ အမရေိကနျ အယူအဆ ကတော့ အဲဒီ Formula တှဟော ကြောငျး ပွီးရငျ ခေါငျးထဲမှာမကနျြဘူးဆိုတာပါဘဲ။ ဒီတော့ သူတို့စာသငျပုံက concept ကိုပဲ အဓိကသငျတာပါ။ စာမေးပှဲခနျးတှမှောဆို ရငျ calculator အပွငျ Formula စာရှကျတှေ တဈယောကျတဈရှကျစီပေးထား ပါတယျ။ ဒီတော့ ကြောငျးသားတှဟော Formula တှကေိုမှတျဖို့မလိုပါဘူး။ တှကျ ရမယျ့ပုစ်ဆာဆိုရငျ ပေးထားတဲ့ Formula ထဲက ကိုယျထငျတဲ့ဟာကိုထညျ့ပွီးတှကျ တော့ အခြိနျမွနျတယျ။ ဒီတော့ ပုစ်ဆာမြား မြားကိုမေးလို့ရပါတယျ။
တကယျသိရမှာက ဘယျမေးခှနျးကို ဘယျ Formula သုံးပွီး တှကျရမယျဆို တာပါပဲ။ တကယျ့ လကျတှဘေ့ဝမှာလညျး Formula ဘယျလောကျပဲသိသိ calculator တှေ computer program တှနေဲ့ပဲ တှကျနတောပါ။ သူတို့ရဲ့အဓိကဆောငျ ပုဒျက "Don't reinvent the wheel" တဲ့။ ဟုတျတယျလေ ဘီးကိုထှငျခဲ့ကွလို့ ဒီနခေ့တျေမှာ လူတှလေိုရာသှားပွီး လကမ်ဘာတောငျ ခရီးရောကျနမှောတော့ ဘာ ဖွဈလို့ဘီးကို အခြိနျကုနျခံပွီး တီထှငျဖို့လိုမှာလဲ။ ဒီလိုဘီးတပျရငျ ရှရေ့လှယျ မယျဆိုတဲ့အိုငျဒီယာ သိရငျရပွီဆိုတာကို အဓိကထားပါတယျ။
နောကျတဈခကျြက အဟောငျးတှေ ကိုမှတျရတာမြားရငျ အသဈတီထှငျရာမှာ အားနညျးသှားတတျတာကိုလညျး သူတို့ ကသတိထားပါတယျ။ ဥပမာတဈခုပေးရ ရငျ ကှနျပြူတာရဲ့ CPU ကိုလုပျတာ လကျ ရှိ အမွနျဆုံးကှနျပြူတာ CPU ပါ။ ဒါပေ မယျ့ ဒီထကျမွနျတဲ့ CPU ကိုထှငျဖို့ဆိုရငျ အသဈထုတျလိုကျတဲ့ ပိုမွနျတဲ့ CPU ကို သုံးရမှာပါ။ အဟောငျး CPU ကို သုံးလို့ မရပါဘူး။ ဒီတော့ အမရေိကနျကြောငျးသားတှကေို သငျကွားတာက လကျရှိလကျခံပွီးသား သီအိုရီတှသေုံးပွီး ဒီထကျ ကောငျးတဲ့သီအိုရီကို တီထှငျခိုငျးတာပါ။
တဈခါတရံ အဟောငျးကိုသုံးရငျးနဲ့ အဟောငျးရဲ့အားနညျးခကျြတှေ မှားယှငျး မှုတှကေို ပိုပွီးသိမွငျလာတော့ အဟောငျး ကိုပယျဖကျြပွီး အသဈတီထှငျလရှေိ့ပါ တယျ။ အမြားအားဖွငျ့ Finance (ငှရေေး ကွေးရေး)ဘာသာရပျတှမှောဆိုရငျ သီအိုရီတှကေ တဈမြိုးပွီးတဈမြိုး ပွောငျးနတောပါ။ ကြှနျတျောတို့ မွနျမာပွညျပညာရေးရဲ့အားနညျးခကျြက အဟောငျးကိုပဲ အသမှေတျခိုငျးထားတော့ အသဈတီထှငျဖို့ အခြိနျမရတော့တဲ့အပွငျ မှားယှငျးနတေဲ့ အဟောငျးအပျေါမှာ အရိုးစှဲသှားတတျပါတယျ။ တဈခါက စာရေးဆရာကွီးအောငျ သငျးပွောခဲ့သလို ''အဖထေကျ သားက တဈလ အမွဲကွီးနရေမယျ။ အဲဒီလိုမကွီးရငျ နောကျမြိုးဆကျဟာ ပိုပွီးပညာနညျး သှားမယျ''တဲ့။ သူပွောတာက အဖကေ ဆယျတနျးပဲအောငျရငျ သားကဘှဲ့ရသငျ့တာပေါ့။ ကြှနျတျောတို့မွနျမာပွညျရဲ့ပညာ ရေးကိုလညျး နောကျမြိုးဆကျကို အသိဉာဏျတှေ ပိုပွီးဖှငျ့ပေးနိုငျအောငျ လှတျ လပျစှာတှေးခှငျ့လုပျခှငျ့ပေးပွီး ပိုကယျြပွနျ့တဲ့ပညာတှကေို လလေ့ာနိုငျအောငျ လုပျပေးသငျ့တယျလို့ထငျပါတယျ။ ဒီလို လုပျရာမှာ အရေးအကွီးဆုံးအခကျြက ဆရာတှပေါ။
ကြှနျတျော အနန်တဂိုဏျးဝငျ ဘယျဆရာကိုမှ စျောကားခွငျးမဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ မွနျမာပွညျက ဆရာ၊ ဆရာမအခြို့ဟာ တခြို့ကြောငျးသားတှရေဲ့ ကတျသီးကတျ သတျမေးခှနျးတှကေို အခြိနျပေးပွီးမဖွခေငျြကွပါဘူး။ ဒီလိုဖွဈရခွငျးအကွောငျးကတော့ အဲဒီဆရာကိုယျတိုငျ အဖွမေသိလို့ သျောလညျးကောငျး၊ သိသျောလညျး ဖွရေမှာစိတျမရှညျလို့သျောလညျးကောငျး ဖွဈမယျထငျပါတယျ။ ဒီနိုငျငံမှာတော့ ဖွလှေနျးလို့ တဈခါတလေ စာသငျခြိနျတဈဝကျလောကျ ကုနျသှားတတျပါတယျ။ သူတို့လိုခငျြတာက ဆနျးသဈတဲ့တှေးချေါမှုပါ။ သမာရိုးကအြတှေးအချေါကို စိတျမဝငျစားပါဘူး။ ဒါကွောငျ့လညျး တီထှငျမှု တျောတျောမြားမြားကို နစေ့ဉျနဲ့အမြှလုပျနကွေတာဖွဈပါတယျ။ အကဉျြးခြုံး ပွောရရငျတော့ မွနျမာပွညျပညာရေးမှာ ဆရာဆရာမတှကေိုယျတိုငျ ခတျေမီ အောငျ စဉျဆကျမပွတျလလေ့ာနရေပါမယျ။ ကြောငျးသားတှကေို မေးခှငျ့မြားစှာ ပေးရမယျ။ သငျခနျးစာတှကေို အာငုံ ဆောငျနိုငျဖို့ထကျ သိနားလညျအောငျ ပိုကွိုးစားပွီး လလေ့ာရမယျ့ဧရိယာကို အ ကယျြကွီးဖှငျ့ပေးရမယျ။ ဥပမာ ကြောငျး သားတှအေတှကျ ဒီစာအုပျထဲကပဲ မေး ခှနျးတှမေေးမယျဆိုရငျ တခွားကောငျးနိုး ရာရာတှကေိုရှာဖတျဖို့ စိတျမဝငျစားတော့ ဘူးလေ။ ဒီတော့ သတျမှတျထားတဲ့ စာ အုပျထဲမှာမပါတဲ့မေးခှနျးတှကေို ၁၀-၂၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျ အမှတျပိုအဖွဈမေးရငျ ကြောငျးသားတှေ စာကွညျ့တိုကျကို အ ခြိနျမှနျသှားကွမှာပါ။
နောကျတဈခုက မဂြောခှဲခွငျးပါ။ မွနျမာပွညျမှာက တကယျ့အလုပျခှငျနဲ့ မ ပတျသကျတဲ့မဂြောတှေ မတရားမြားနေ ပါတယျ။ ဥပမာ ကလေးတဈယောကျဟာ ဆယျတနျးမှာအမှတျမကောငျးလို့ အ သကျမှေးဝမျးကွောငျးတက်ကသိုလျတဈခုခု ကို မဝငျနိုငျခဲ့ရငျ သူရဲ့ဘဝက Physics, Chemistry, Zoology တို့လိုဘာသာတှဲ တဈခုခုကို သငျခငျြခငျြ မသငျခငျြခငျြ ယူ ရပါတော့တယျ။ အဲဒါတှနေဲ့ သုံးလေးနှဈ လောကျအခြိနျကုနျပွီးရငျလညျး လကျ တှအေ့လုပျခှငျတှနေဲ့ ဘာမှမအပျစပျတဲ့ ဘှဲ့တှပေေးလိုကျတော့ အလုပျခှငျအ တှကျလညျး အကြိုးမပွု၊ ကြောငျးတကျပွီး ငှကေုနျရကြိုးလညျးမနပျဘဲ ဘှဲ့ရ၊ အဲဒီ လိုနဲ့ လယျရာပွနျစားရေးတှမြေားသှား တော့ ယနလေို့ ပှငျ့လငျးလာတဲ့အခြိနျမှာ Skilled worker တှရှေားသှားတယျလို့ ထငျပါတယျ။ တကယျတော့ အဲဒီမဂြော တှဆေိုတာ တကယျစိတျဝငျစားသူတှပေဲ ပေးတကျသငျပွီး ထူးခြှနျထကျမွကျပေ မယျ့လညျး တခွားအသကျမှေးဝမျး ကြောငျး အမှတျမမီသူတှအေတှကျ သူတို့ စိတျဝငျစားတဲ့ အသကျမှေးပညာရပျတှကေို လလေ့ာခှငျ့ပေးသငျ့ပါတယျ။
အမရေိကနျမှာတော့ အသကျမှေး ဝမျးကြောငျးဘာသာရပျတှေ လလေ့ာသူ တှကေ ၈၀ ရာခိုငျနှုနျးထကျ မနညျးပဲရှိပွီး မဂြောတှကေို တကယျစိတျဝငျစားတဲ့သူ က ၂၀ ရာခိုငျနှုနျးတောငျမရှိပါဘူး။ မိမိ စိတျကွိုကျမဂြောကို ကွိုကျတဲ့အခြိနျမှာ ကွိုကျသလိုပွောငျးနိုငျပါတယျ။
အမရေိကနျပညာရေးမှာ ကြောငျး သားတှကေို လိုခငျြတဲ့မဂြောကအစ သငျ ယူရမယျ့ဘာသာတှဲတှအေဆုံး ဒီမိုကရေ စီဆနျဆနျ လုပျပေးထားပါတယျ။ ပထမ ဆုံးပွောခငျြတာက သူတို့ရဲ့ ယူနဈသတျ မှတျခကျြအကွောငျးပါ။ ဒီ Unit ကို credit လို့ချေါကွပါတယျ။ ဥပမာ သင်ျခြာဘာသာတဈခုကို ၃ ယူနဈသတျမှတျတယျဆို ရငျ ဒီအတနျးအတှကျ တဈပတျကို စာ သငျခြိနျ ၃ နာရီပါ။ ၁ နာရီခှဲ နှဈခြိနျပေါ့။ အမြားအားဖွငျ့ တဈရကျကြျော တဈခါ တှပေ့ါ။ တနင်ျလာ၊ ဗုဒ်ဓဟူး သို့မဟုတျ အင်ျဂါ၊ ကွာသပတေးပါ။ တခြို့အတနျး တှဆေိုရငျ စနတေဈရကျထဲမှာပဲ တဈ နာရီခှဲပွီးရငျ ခဏနားပွီး ၃ နာရီတောကျ လြှောကျသငျပါတယျ။ တခြို့ဘာသာရပျ တှကေ သငျရမှာမြားတော့ တဈပတျ ၄ နာရီသငျရငျ ၄4credits ပဲ။ တခြို့သောဘာ သာရပျတှေ ဥပမာ အနုပညာနဲ့ဆိုငျတဲ့ဘာ သာတှဆေို2credits လောကျ သတျ မှတျကွတယျ။ ဒါပမေဲ့ အမြားအားဖွငျ့ တော့ တဈတနျးကို3credits သတျမှတျ ပါတယျ။ ဒီတော့ တက်ကသိုလျပွီးဖို့ဆိုရငျ အနညျးဆုံး အတနျး ၄၀ တကျရပါတယျ။
အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ credit အ ကွောငျးရှငျးပွပွီးတော့ သူတို့တှေ ဘှဲ့ရဖို့ ဘယျလိုသတျမှတျသလဲဆိုတာ ရှငျးပွပါရ စေ။ ကောလိပျဆိုရငျ ၆၀-၆၅ credits၊ တက်ကသိုလျပွီးဖို့ဆိုရငျ ၁၂၀-၁၃၀ credits သတျမှတျပါတယျ။ Master ပွီးဖို့ ဆိုရငျတော့ နောကျထပျ ၃၃-၄၀ credits ထပျတကျရပါတယျ။ မာစတာရဲ့အတနျး တှကေတော့ ပိုပွီး စာလုပျခြိနျမြားပါတယျ။ ဒါတှကေ ကြောငျးရဲ့ သတျမှတျခကျြတှေ ပါ။ ကြှနျတျောအရငျကပွောခဲ့သလို ကြောငျးသားတှကေ ကိုယျစာဖတျနိုငျသ လောကျ ၊ ငှကွေေးတတျနိုငျသလောကျ၊ အခြိနျပေးနိုငျသလောကျပျေါမူတညျပွီ3းcredits အတနျးတဈတနျးကနေ 16 credits (၆ တနျး)လောကျထိယူကွပါတယျ။ 12 credits ယူတဲ့ကြောငျးသားကို Full time (အခြိနျပွညျ့ကြောငျးသား) လို့ ချေါပွီး အဲဒီထကျနညျးရငျတော့ Part time (အခြိနျပိုငျး)လို့ သတျမှတျပါတယျ။ (မာစတာတနျးကတော့9credits ကို အခြိနျပွညျ့လို့သတျမှတျပါတယျ)။ ဒီသတျမှတျခကျြတှကေလညျး ပညာသငျဆုတို့ ထောကျပံ့ကွေးရဖို့အတှကျ အရေးကွီးပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ တခြို့ဆုတှကေ အခြိနျပွညျ့ကြောငျးသားဖွဈရမယျ ဆိုပွီးတော့ ခြုပျထားတတျကွလို့ပါ။
အမရေိကနျနိုငျငံက ပညာရေးစနဈမှာ အထကျကပွောခဲ့သလို credit အရေ အတှကျ ပွညျ့ရမှာဖွဈတယျဆိုပမေယျ့ သူ တို့သတျမှတျထားတဲ့ ဘာသာရပျအမြိုးအ စားတှထေဲက မိမိကွိုကျနှဈသကျတဲ့ဘာ သာတှကေိုလညျး ယူရပါတယျ။ မယူရငျ ဘှဲ့မရပါဘူး။ ဥပမာ Finance Business major ကြောငျးသားတဈယောကျ ဘှဲ့ရဖို့ လိုအပျခကျြတှဆေိုရငျ Science, Libe-ral arts credit တှကေို သတျမှတျထားတဲ့ အရအေတှကျ ယူကိုယူရပါတယျ။ မဂြော အတနျးတှပေဲ ပွီးနလေို့မရပါဘူး။ ဥပမာ Maths, Physics, Chemistry, Biology လေးတနျးထဲက ကွိုကျတဲ့သုံးတနျးကို ယူ ရမယျဆိုရငျ အဲဒါမပွီးမခငျြး ကြောငျးမပွီး ပါဘူး။ Liberal Arts အတနျးတှဆေိုရငျ လညျးဒီအတိုငျးပဲ။ Sociology, Psy-chology, Philosophy စတဲ့ အတနျး တှကေနေ သူတို့သတျမှတျထားသလောကျ ယူရပါတယျ။ နောကျတဈခုက Core Courses တှပေဲ။ Business Student တှအေားလုံးအတှကျ မယူမနရေအတနျး တှရှေိပါတယျ။ ဥပမာ Business Law, Literature, Economic, accounting, Marketing, Finance စတဲ့အတနျးတှေ က ရှေးခယျြစရာမရှိဘဲ ယူကိုယူရပါတယျ။ ကိုယျ့မဂြောမှာရှိတဲ့ အဓိကအတနျးတှေ ကို စာမေးပှဲနှဈကွိမျထကျ ကလြို့မရပါဘူး။ ကရြငျ တခွားမဂြောပွောငျးရပါတယျ။ ဥပမာ Accounting ကြောငျးသားဟာ Accounting Major ထဲက အတနျးကို ကရြငျ accounting ဆကျတကျခှငျ့မရှိ တော့ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ Marketing မဂြောပွောငျးတကျရငျ အရငျတကျထားတဲ့ ဘုံအတနျးတူတှကေို ပွနျတကျစရာမလိုပဲ Marketing အတနျးတှပေဲပွနျယူရတာပါ။ Accounting Major အတနျးတှတေော့ ဆုံးရှုံးသှားတာပေါ့။
အမရေိကနျပညာရေးရဲ့ အဓိကထူး ခွားခကျြက ပညာရေးကို အစိုးရက တိုကျ ရိုကျမကိုငျတှယျပါဘူး။ ပညာရေးဝနျကွီး ဌာနက ကြောငျးတှရေဲ့သငျကွားပုံ၊ သုံးတဲ့ Textbook စတဲ့ စညျးကမျးပိုငျးတှပေဲထိနျးပွီး ထောကျပံ့ကွေးဆိုရငျလညျး ကြောငျးတှကေို အခြိုးကခြှဲဝပေေးပါတယျ။ ကြောငျးသားတှကေိုလညျး ဝငျငှအေပျေါမူတညျပွီး ငှကွေေးထောကျပံ့ပေးတဲ့အပွငျ အတိုးနှုနျးနညျးနညျးနဲ့ တိုကျရိုကျ သို့မဟုတျ သှယျဝိုကျပွီး ငှခြေေးခှငျ့ပွုပါတယျ။ဘဏျ တှကေလညျး ကြောငျးသားတှကေို ခြေးရတာ အလုပျရရငျပွနျပေးမှာသခြောတော့ အတိုးနှုနျးသကျသကျသာသာနဲ့ ခြေးပါတယျ။ ကြောငျးပွီးလို့ ခွောကျလအကွာက နစေပွီး ဆယျနှဈအရဈကနြဲ့ ပွနျဆပျရပါတယျ။ မွနျမာပွညျပညာရေးဟာ အစိုးရရဲ့ တိုကျရိုကျပါဝငျမှု အရမျးမြားနတေယျလို့ ထငျပါတယျ။ ပုဂ်ဂလိကတက်ကသိုလျတှကေို အပွိုငျအဆိုငျလုပျပိုငျခှငျ့ပေးလိုကျရငျ ဂုဏျသိက်ခာရှိတဲ့ကြောငျးတှေ မြားစှာပျေါ ထှကျလာနိုငျပါတယျ။ အစိုးရက သှယျ ဝိုကျသောနညျးနဲ့ပဲ ထိနျးခြုပျစခေငျြပါ တယျ။
နော်ဝေနိုင်ငံဟာ လူဦးရေငါးသန်း လောက်ပဲရှိတဲ့ ဥရောပကနိုင်ငံငယ်လေး ဖြစ်ပြီး ဟိုးအရင်တုန်းကတော့ ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၅၀-၆၀ ပြည့်နှစ်ရောက်တော့ သူတို့ပိုင်နက်ထဲမှာ ရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်ပေါင်း များစွာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဆီမှာ သေချာရှိတဲ့ရေနံပမာဏကို တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုချပြပြီး နိုင်ငံတကာကနေ ငွေချေးပါတယ်။ ပြည်သူအားလုံးကို ကျောင်းလခမယူဘဲ မတက်မနေရ ကျောင်းတက်စေပါတယ်။ ဘွဲ့ရပညာတတ်တွေများလာတော့ နိုင်ငံ တကာက ကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီး သူတို့ဆီမှာ ပညာတတ်ဦးရေဘယ်လောက် ရှိကြောင်း၊ ခေတ်မီစီးပွားရေးလုပ်ငန်း တွေကိုလုပ်ပေးနိုင်ကြောင်း၊ ဝန်ဆောင်ခ လည်းသက်သာကြောင်း အာမခံတဲ့အ တွက် ကုမ္ပဏီကြီးတွေတော်တော်များ များ အလုပ်တွေရွှေ့လာပြီး အလုပ်အကိုင် တွေ အများကြီးရသွားပါတယ်။ ခုဆိုရင် အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ အလွန်နည်းတဲ့တိုင်း ပြည်တစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။ သာမန်အသိဉာဏ် ရှိသူတွေက မာစတာအဆင့်ထိ အနည်း ဆုံးရထားကြပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အ ငြိမ်းချမ်းဆုံးတိုင်းပြည်၊ လူတစ်ဦးချင်းဝင် ငွေ စတုတ္ထအများဆုံးတိုင်းပြည်၊ ပညာ တတ်ရာနှုန်း အမြင့်ဆုံးတိုင်းပြည် ဖြစ်နေ ပါပြီ။ ဆိုလိုချင်တာက ရှိတာထုတ်ပြီး ရောင်းစားလို့ တိုင်းပြည်ကြွယ်ဝမလာဘူး၊ ပညာရေးကို မြှင့်တင်မှသာ တိုင်းပြည် ကြွယ်ဝပြီး ငြိမ်းချမ်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ ကြောင့်လည်း မြန်မာပြည်ရဲ့ပညာရေးကို မြှင့်တင်ဖို့က အင်မတန်အရေးကြီးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
''ပညာဟူသည် မှားသည် မှန်သည် ကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ခြင်း''လို့ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုထားပေမယ့် ကျွန်တော်အခု အ တန်းပညာရေးနဲ့ လက်တွေ့သင်တန်း ဆင်းပညာရေးအကြောင်းပဲ ဆွေးနွေးပါ မယ်။ မြန်မာပြည်မှာတင်မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံ တိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုက ''အလုပ်ရှင်က အတွေ့အကြုံရှိသူကိုပဲ ခန့် ထားချင်တယ်။ ကျောင်းပြီးကာစကလေး တွေကလည်း အတွေ့အကြုံ မရှိသေးဘူး'' ဒီကိစ္စဟာ လွယ်မယောင်နဲ့ခက်တဲ့ကိစ္စပါ။ နှစ်ဖက်စလုံးလည်းမှန်ပါတယ်။ အလုပ်ရှင် အနေနဲ့ကြည့်ရင် အတွေ့အကြုံမရှိဘဲ စာတွေ့ပဲသိတဲ့ ကလေးတွေကို ဘယ်နား အသုံးချရမလဲမသိ။ နောက်ပြီး သူတို့လုပ် မယ့်အမှားတွေကြောင့် ပျက်စီးကုန်မှာ လည်းစိုးရိမ်ရ။ နောက်ဆုံး စကားအပြော အဆို လူမှုဆက်ဆံရေးကအစ မညက် ညောသေးတော့ သူတို့အတွက် အဲလိုက လေးမျိုးတွေကိုခန့်ရတာ အလွန်တာဝန် ကြီးပါတယ်။ ဒီလိုကိစ္စရပ်တွေကို ဖွံ့ဖြိုးပြီး တိုင်းပြည်တွေမှာ ဖြေရှင်းတဲ့ပုံစံကတော့
(က)အထက်တန်းအရွယ်မှာက တည်းက ကလေးတွေဟာ သူတို့ဝါသနာ ပါတဲ့ ဘာသာရပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ဘာသာ ရပ်တွေကို အနည်းဆုံး တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့အ တန်းထိ Extra credit ယူပြီး သူတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ (ဥပမာ ဆေးရုံတို့၊ ရှေ့နေရုံးတို့၊ စာ ရင်းအင်းရုံး) လုပ်ငန်းတွေမှာ အချိန်ပိုင်း လုပ်အားပေးကြတယ်။ ဘာမှသိပ်မလုပ်ရ ပါဘူး။ စာရွက်စာတမ်းတွေသိမ်း၊ ဟိုကူ ဒီကူပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရင်းနှီး သွားတယ်။ လူတွေနဲ့ ပေါင်းတတ်သင်း တတ်သွားတယ်။ အပြောအဆိုညက်သွား တယ်။
(ခ) အထက်တန်းပြီးတော့ တက္က သိုလ်ရောက်တယ်။ ပထမ နှစ်နှစ်မှာတော့ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာတွေကို အများကြီးမ သင်ရသေးဘဲ အခြေခံအတန်းတွေပဲ ယူကြရတယ်။ ဥပမာ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ မေဂျာယူမယ်ဆိုရင် စီးပွားရေးမေဂျာ အားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ အထွေထွေအတန်းတွေ Accounting, marketing, psych-ology, management ပဲ ယူရသေးတဲ့ အတွက် လက်တွေ့အလုပ်တွေမှာ မကူနိုင်သေးဘူး။ တတိယနှစ်ရောက်မှ မေဂျာအတန်းတွေယူပြီး internship လို့ခေါ်တဲ့ အလုပ်သင်အလုပ်တွေ ရှာကြရတယ်။ မလုပ်မနေရမဟုတ်ဘူးဆိုပေမယ့် ဒီလိုမှ မလုပ်ထားရင် ကျောင်းပြီးတဲ့အခါ အလုပ် ရဖို့ခက်ခဲသွားမှာစိုးတော့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်သောကျောင်းသားတွေက internship ကို လစာအနည်းငယ် သို့မဟုတ် လစာမဲ့လုပ်ပေးရတယ်။ ဒီလိုလုပ်ပေးတာ ကိုလည်း အလကားလုပ်ပေးရတယ်ဆိုပြီး လက်လွတ်စပယ်လုပ်လို့မရဘူး။ ကုမ္ပဏီ ရဲ့စည်းကမ်းတွေကို တစ်သဝေမတိမ်း လိုက်နာရတယ်။ အလုပ်ချိန်ကအစပေါ့။ လုပ်ငန်းမှာ အတွေ့အကြုံရှိသူတွေရဲ့ စကားကိုနားထောင်ရတယ်။ မှတ်သားရ တယ်။
(ဂ) နောက်ဆုံးတစ်မျိုးက ကျောင်း ပြီးကာစမှာ အတွေ့အကြုံနည်းသေးတော့ လစာနည်းနည်းနဲ့လုပ်ကြတယ်။ ဥပမာ လုပ်သက်သုံးနှစ်လောက်ရှိတဲ့ အင်ဂျင်နီ ယာရဲ့ လစာတစ်ဝက်လောက်ပဲယူပြီးလုပ် ကြရတယ်။ သုံးနှစ်လောက်နေပြီး အတွေ့ အကြုံရတဲ့အခါကျ လစာတိုးတောင်းလို့ မပေးတော့မှ တခြားအလုပ်သစ်ရှာကြရ တယ်။ လုပ်ငန်းမှာ အားကိုးအားထားပြုရ တဲ့သူမျိုးဆိုရင် အလုပ်ရှင်တွေကတော့ တက်နိုင်သလောက် လစာတိုးပေးကြပါ တယ်။
မြန်မာပြည်မှာ အလုပ်ရှင်တွေဘက် ကလည်း မျိုးဆက်သစ်တွေကို ဒီလိုမျိုး အခွင့်အရေးတွေဖွင့်ပေးဖို့ အားနည်းသလို ကျောင်းသား ကျောင်းသူလေးတွေကလည်း သူတစ်ပါးဆီမှာ ကိုယ်ထမင်းကိုယ်စားပြီး မလုပ်ပေးချင်ကြဘူး။ ကျွန်တော်ထင်တာ တော့ ဒီလိုပုံစံမျိုး မကြာခင်ပြောင်းလဲလာ လိမ့်မယ်ထင်တာပါပဲ။ အစိုးရကလည်း နည်းနည်းအားပေးတဲ့ဥပဒေတွေ ချမှတ် ပေးရင် အဆင်ပြေလာမှာပါ။ ဥပမာ အခွန် လျှော့ပေးတာမျိုးပေါ့။
မြန်မာပြည်ပညာရေးစနစ်ဟာ ဗဟို ဦးစီးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရေးဝန်ထမ်း ကအစ ကျောင်းသားတွေရဲ့မေးခွန်း၊ သင် ကြားရမည့်စာအုပ်၊ ဖြေရမည့်အဖြေပုံစံ အဆုံး ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ တင်းကျပ်ထားတဲ့ ဥပဒေအောက်မှာရှိပါတယ်။ တကယ်ဖြစ် သင့်တာက ဝန်ကြီးဌာနက ပညာရေးဝန် ထမ်းတွေရဲ့ အရည်အချင်းတွေ (ဥပမာ သင်ကြားခွင့်လိုင်စင်လိုမျိုးပဲ) စစ်ထုတ် ပေးသင့်ပြီး သင်ကြားမယ့်ဆရာ၊ ဆရာမ ကို သင့်တော်တဲ့ လစာပေးပြီးခန့်ထားနိုင်ဖို့ က ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှာ လုံးဝ အာဏာရှိသင့်ပါတယ်။ ခန့်ခွင့်ရှိသလို အ ရည်အချင်းမရှိရင်လည်း ထုတ်ခွင့်ရှိရမှာ ပါ။ နောက်ပြီး ကလေးတွေကိုသင်ကြား မယ့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း စာအုပ်တွေဆိုရင် လည်း ပုံသေမသတ်မှတ်ဘဲ ခပ်ဆင်ဆင် စာအုပ် နှစ်မျိုး၊ သုံးမျိုးလောက် ပညာရေး ဝန်ကြီးက အသိအမှတ်ပြုထားသင့်ပါ တယ်။ ဆရာကိုယ်တိုင်လက်ခံပြီး ကြိုက် နှစ်သက်တဲ့စာအုပ်ကိုသင်တဲ့အတွက် ပို ပြီးအကျိုးများစေပါတယ်။
ပညာရေးဝန်ထမ်း ဆရာဆရာမတွေ မှာ လွတ်လပ်တဲ့စတိုင်နဲ့ သင်ကြားမှုရှိစေ သင့်ပြီး ကလေးတွေကို သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ထဲကစာတွေတင်မကပဲ အပြင်စာတွေကို လည်း အထောက်အကူပြုစာပေတွေအ ဖြစ် သင်ကြားခွင့်ရှိရပါမယ်။ မေးခွန်းတွေ ဆိုရင်လည်း စာအုပ်ထဲက အလွတ်မှတ် နေတဲ့မေးခွန်းတွေထက် နားလည်မှုကို ပို ပြီးဦးစားပေးတဲ့မေးခွန်းတွေကို မေးသင့် ပါတယ်။ ဥပမာ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ကိုမှတ်မိ ပြီးသိတာထက် ပိုအရေးကြီးတဲ့ ]ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းကို ဘာကြောင့် လုပ်ကြံကြ သနည်း၊ ဗိုလ်ချုပ်သာမသေခဲ့သော် ဘာ တွေဖြစ်လာနိုင်သနည်း} စတဲ့ ကလေး တွေရဲ့အတွေးအခေါ်ကို မြှင့်တင်တဲ့မေး ခွန်းမျိုးတွေမေးသင့်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ် ဝင်ဖို့ စာမေးပွဲကိုမှ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်ပြီးဖြစ်စေ ကိုင်တွယ်သင့်ပါတယ်။ ကျောင်းသားမိဘ မြို့မိမြို့ဖတွေကတော့ ကိုယ့်မြို့ရွာရဲ့ ပညာရေးတိုးတက်ဖို့အတွက် အစိုးရရဲ့ မလောက်ငတဲ့ဘတ်ဂျက်ထက် မိမိတို့ပိုင် ဆိုင်မှုရာနှုန်းအလိုက် အခွန်ငွေတွေကို လည်း ချမ်းသာရင်ချမ်းသာသလို ဥပဒေ အရ အချိုးကျထည့်ဝင်ရပါမယ်။ နောက် ပြီး လွတ်လပ်တဲ့ပညာရေးစနစ်သစ်ကို ကောင်းစွာနားလည်ထားသင့်ပြီး ဆင်ခြေ တွေလျှော့သင့်ပါတယ်။ ဥပမာ ]ဆရာမက မသင်ထားတဲ့မေးခွန်းတွေကို စာမေးပွဲမှာ ဘာလို့မေးတာလဲ} စတာမျိုးတွေမေးပြီး ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကို သေသေချာ ချာနားမလည်ဘဲ ဝင်ပြီးမပါသင့်ပါဘူး။
ပညာရေးဆိုတာ လူ့အဖွဲ့အစည်း လူတန်းစားတစ်ခုအတွက် သီးသန့်ထား သော (privilege) မဟုတ်သင့်ပါ။ လေ့ လာသင်ယူချင်စိတ်ရှိသူအားလုံးအတွက် ရှိကိုရှိရမယ့်အခွင့်အရေး (right) တစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာက ''ပညာရေး ဆိုတာ ငွေကြေးတတ်နိုင်ခြင်း မတတ်နိုင် ခြင်းကိုမဆိုလိုပါ။ သို့ပေမယ့် လိုအပ်လျှင်၊ တတ်နိုင်လျှင်၊ စိတ်ဝင်စားသေးလျှင်၊ အကျိုးအကြောင်းညီညွတ်လျှင် လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး အသက်အရွယ်မရွေး ရရှိခံ စားနိုင်သော လူသားတိုင်း၏ အခွင့်အရေး တစ်ခု''လို့ယူဆပါတယ်။
တကယ်တော့ အရမ်းလည်တဲ့အစိုးရ တွေဆိုတာ ပညာတတ်တွေကိုသာ သူတို့ တိုင်းပြည်ကို လာရောက်အခြေချနေထိုင် သူတွေဖြစ်စေချင်ကြတာပါ။ ဒါမှပဲ ဝင်ငွေ များများရပြီး အခွန်များများရမှာကိုး။ လူတွေရဲ့ဘ၀ကို သေချာဆန်းစစ်ကြည့်ရင် နှစ် ၄၀ လောက်ပဲ နိုင်ငံအတွက် ဆောင် ရွက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ နှစ် ၄၀ ဟာ အစိုးရအပေါ်မှီခိုကြတာပါ။ ဒီတော့ သူတို့ နိုင်ငံအတွက် လုပ်အားကောင်းကောင်း ပေးနိုင်တဲ့ နှစ် ၄၀ အပေါ်မှာ ကန့်သက် ချက်တွေထားပြီး အခွင့်အရေးတွေပိတ် ပင်ထားတော့ရော တိုင်းပြည်အတွက် ပို ကောင်းစားသွားမှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် သူ တို့တစ်တွေကို တိုင်းပြည်ကနှင်ထုတ်လို့ရ မှာလား၊ နှင်ထုတ်ခွင့်ရှိရင်လည်း စောစော စီးစီးနှင်ထုတ်ပါ။ မဟုတ်ရင်လည်း လူ တစ်ယောက်ရဲ့ ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေး ပေး သင့်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတွေထဲမှာ မြန်မာ ပြည်မှာမွေး၊ မြန်မာပြည်မှာကြီးပြီး အ သက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာတွေ သင်ခွင့် မရှိပဲ ဈေး ရောင်းနေရသူတွေအများကြီးပါ။ နောက်ပြီး အင်ဂျင်နီယာပညာကို ဝါသနာ ပါပေမယ့်လည်း သူစာမေးပွဲအောင်တဲ့နှစ် က အင်ဂျင်နီယာကျောင်းမဖွင့်သေးလို့ တက်ခွင့်မရသူတွေ ဒုနဲ့ဒေးပါ။
ကျွန်တော် အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ကျောင်းတက်လာတဲ့ တစ်လျှောက်လုံးမှာ အသက် ၅၀ ကျော်တွေသာမက ပင်စင်ယူ ပြီးသူတွေတောင် များစွာတွေ့ခဲ့ရတာပါ။ ယုတ်စွအဆုံး ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဧည့် နိုင်ငံသားအဖြစ်နဲ့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဘာသာ ကို စိတ်ကြိုက်လေ့လာသင်ကြားခွင့် ရခဲ့ပါ တယ်။ တကယ်တော့ လူ့ဘ၀ဆိုတာတိုတို လေးပါ။ အလုပ်လုပ်နိုင်တာ နှစ် ၄၀ အ များဆုံးပါ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အကြံပေးရ ရင်တော့ “အစိုးရအနေနဲ့ အိတ်စိုက် ပညာရေးကို ဖျက်သိမ်းသင့်ပါပြီ” စေတ နာရှိသူ အလှူပေးချင်သူတွေများတဲ့ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ ဆင်းရဲချို့တဲ့သူတွေ ကိုထောက်ပံ့ဖို့ ဖောင်ဒေးရှင်းတွေများစွာ ရှိနေပါပြီ။ ဒီလိုစေတနာရှင်တွေကို စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲပြီး လူသားတိုင်းအတွက် ရသင့်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပညာ ရေးကို အစီအမံပြောင်းမြှင့်တင်သင့်တယ် လို့ယူဆမိပါတယ်။
မြန်မာပြည်ပညာရေးစနစ် ပြောင်း လဲဖို့ဆွေးနွေးကြတာ အများအပြားပါ။ ကျွန်တော်လည်း တချို့ကို အမေရိကန် ပညာရေးစနစ်နဲ့ယှဉ်ပြီး တင်ပြလိုပါတယ်။ အကျဉ်းချုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ ပြောင်း လဲရမှာက သင်ရိုးညွှန်းတမ်းမဟုတ်သလို၊ စာသင်ချိန်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ် ပြောင်းလဲရမှာက စာမေးပွဲမေးခွန်းနဲ့ အ မှတ်ပေးတဲ့ပုံစံပဲ။ တကယ်အရည်အချင်း ရှိတဲ့ဆရာတွေကိုတော့ ကောင်းမွန်တဲ့ ဘယ်ပညာရေးစနစ်မှာမဆို လိုအပ်တာ ကြောင့် အထူးမပြောလိုတော့ပါဘူး။ လက်ရှိမြန်မာပြည်ရဲ့ မေးခွန်းပုံစံနဲ့ တ ခြားနိုင်ငံတွေက မေးခွန်းပုံစံတွေ ကျွန် တော်တို့ ယှဉ်ကြည့်ရအောင်။
မြန်မာပြည်က လက်ရှိစာမေးပွဲမေး ခွန်းတွေက မှတ်ဉာဏ်ကိုအသားပေးတဲ့ မေးခွန်းပုံစံတွေပါ။ ဥပမာ သင်္ချာ၊ ရူပ၊ ဓာ တု၊ ဇီဝ စတဲ့စာမေးပွဲတွေဆိုရင်လည်း ဖော်မြူလာတွေနားလည်မှုကိုမေးတဲ့ အ ဆင့်လောက်ပဲများပါတယ်။ ဒီတော့ က လေးတွေဟာ မကြာခင်မေ့သွားမယ့်၊ လို အပ်ရင် အင်တာနက်ထဲမှာ အလွယ်တကူ ပြန်ရှာလို့ရတဲ့ဖော်မြူလာတွေကိုပဲ အချိန် ကုန်ခံပြီးကျက်နေကြရတယ်။ ဘယ်နေရာ မှာ ဘယ်ဖော်မြူလာကို ဘယ်လိုသုံးရမယ် ဆိုတဲ့ အသိကနည်းတော့ ပုစ္ဆာအဆင့်အ တန်းကို မြှင့်လို့မရဘူး။ ဆရာတွေအနေ နဲ့ကလည်း ကလေးတွေက ဒီဖော်မြူလာ တွေကို အသေမှတ်ထားရရှာတယ်ဆိုပြီး သနားနေတော့ မေးခွန်းရဲ့အဆင့်ကို မ မြှင့်တော့ဘူး။ မြှင့်ရင်လည်း အားလုံးကျ ကုန်မှာစိုးလို့ထင်တယ်။ အမေရိကန် ကျောင်းတွေကတော့ ပြောင်းပြန်ပါ။ ဖော် မြူလာများတဲ့ဘာသာရပ်အားလုံးမှာ ဖော် မြူလာတွေကို စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်မှာရေး ပြီး ကျောင်းသားအားလုံးကို ကော်ပီတစ် စောင်စီပေးထားလိုက်တယ်။ ကျောင်း သားတွေကို ဘယ်ဖော်မြူလာ ဘယ်မှာ သုံးသလဲဆိုတာ သေချာသိမသိ အဓိက မေးတာဆိုတော့ မေးခွန်းတွေကို ပိုခက်ခဲ အောင်မေးလို့ရတယ်။ တစ်ခါတရံ အမှတ် ၁၁၀၊ ၁၂၀ ဖိုး အထိ မေးခွန်းမှာမေးလေ့ရှိ တယ်။ ဒီတော့ အမှတ်ပိုလိုချင်တဲ့သူတွေ က ပိုပြီးကြိုးစားဖြေကြတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ အမှတ်ပေးတဲ့ စနစ်ပါ။ မြန်မာပြည်မှာက ခုထိ ဘုန်းကြီး ကျောင်းမှာ စာအံသလို ဤ၊သည်၊ မရွေ့ ဖြေမှ အမှတ်ပေးတတ်တာ အရိုးစွဲနေပါ တယ်။ အခုစနစ်က အဖြေမှန်ဖို့ကိုပဲ အ ဖြေမှန်စာရွက်နဲ့ အဆင့်ဆင့်တိုက်စစ်နေ တော့ တခြားနည်းနဲ့တွက်ချက်ဖြေဆိုတာ မျိုး၊ တခြားဗဟုသုတတွေနဲ့ပေါင်းပြီး ဖြေ ဆိုတာမျိုးကို အားမပေးဘူးဖြစ်နေပါ တယ်။
ပုစ္ဆာတွေမှာ အဖြေ ၄-၅ ခုထဲက ရွေးခိုင်းတဲ့ မှန်ရာရွေး စာမေးပွဲမေးခွန်းနဲ့ လိုအပ်မယ့် ဖော်မြူလာစာရွက်ရယ် အ ကြမ်းတွက်ချက်ဖို့စာရွက်ရယ် ချပေးထား လိုက်ရင် သင်ရိုးတစ်အုပ်လုံးမှာရှိတဲ့ သိ ကိုသိထားရမယ့် အချက်အလက်တွေကို မေးလို့ရပြီး ကျောင်းသားတိုင်းလည်း ပို လေ့လာဆည်းပူးဖြစ်မှာပါ။ ဖတ်စာဘာ သာရပ် ဥပမာ ဘောဂဗေဒလို ဘာသာရပ် တွေကိုလည်း စာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့သီအိုရီ တွေအပြင် အခြားဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းတွေ ကို အဖြေမှန်ရွေးနည်းနဲ့ စာမေးပွဲပုံစံ ပြောင်းလိုက်ရင် မေးစရာတွေ အများကြီး၊ သိရမှာတွေ နားလည်ရမှာတွေ အများကြီး ဖြစ်လာပြီး ကလေးတွေ ပိုမိုပြီးတွေးတော တတ်တဲ့အကျင့်ရသွားမှာပါ။ အခုစနစ်က ကျက်ထားတာနဲ့တိုးရင်ထောပြီး မကျက်ခဲ့ မိသူတွေကတော့ နောင်တတွေနဲ့ပါ။ မှန် ရာရွေးစာစစ်စနစ်ဟာ ကျောင်းသားတွေ ကို စာကိုပိုနားလည်စေတဲ့အပြင် အမှတ် ပေးစနစ်မှာလည်း ဘက်မလိုက်ဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဘယ်နည်းနဲ့ပဲ တွက်ထားပြီးအဖြေမှန်ရရ အဓိကက အ ဖြေမှန်ဖို့ပဲလေ။ နောက်ပြီး ပုစ္ဆာတွေကို သေသေချာချာနားလည်အောင် ဖတ်တတ် တဲ့အကျင့်၊ အရာအားလုံးကို စနစ်တကျ တွေးခေါ်ပြီး သုံးသပ်တတ်တဲ့အလေ့အ ကျင့်ရလာမှာပါ။
မွေးရပ်မြေရောက်တုန်းက ၁၀ တန်း ကလေး ၅၀၀ လောက်နဲ့ နှစ်နာရီခန့် အမေးအဖြေ ဆွေးနွေးပွဲလေးလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါ တယ်။ အဓိကဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့တာကတော့ အခြေခံ ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့သဘောသဘာ ၀၊ စီးပွားရေးဟူသည်၊ ပညာရေးရဲ့အဓိက ရည်ရွယ်ချက်၊ နိုင်ငံတကာအရေးနဲ့ လူမှု ရေးအကြောင်းတွေကို အမေးအဖြေဆွေး နွေးဟောပြောတာပါ။ ဒီပွဲမှာ ကျွန်တော် နားလည်လိုက်တာကတော့
(က)ဆရာတွေရဲ့ သင်ကြားတဲ့စတိုင် မှားနေတယ်ထင်တယ်။ ကျောင်းသားတွေ မှာ ကြောက်စိတ်များစွာကိန်းဝပ်နေတယ်။ တကယ်ဖြစ်ရမှာက ကျောင်းသားတွေနဲ့ ဆရာတွေဟာ မိတ်ဆွေတွေသဖွယ်ဖြစ်နေ ရမှာပါ။ ဆရာတွေကိုကြည့်ရတာ သင် ကြားပြသတဲ့နေရာမှာ မိန့်ခွန်းပြောသလို မျိုး တစ်လမ်းသွားစနစ်ကိုသာ အဓိကအ သုံးပြုပြီး မေးခွန်းမေးရင်လည်း တစ်တန်း လုံးကိုခြုံမေးလေ့ရှိပုံပဲ။ တကယ်ဖြစ်သင့် တာက စိတ်ကြိုက်တစ်ယောက်ကို ရွေး ပြီး မေးတဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးသင့်ပါတယ်။ ဒါမှပဲ ကလေးတွေဟာ ကိုယ့်ကိုမေးလာမှာ စိုးလို့ သင်ကြားမှုအပေါ် အာရုံစိုက်နေမှာ လေ။ တစ်တန်းလုံးမေး တစ်တန်းလုံးဖြေ ဆိုတော့ အာရုံစိုက်ဖို့မလိုဘူးပေါ့။
(ခ) ကလေးတွေစာမေးလို့ အဖြေ မှားရင်လည်း အရှက်ခွဲတဲ့ပုံစံမျိုးမပြောဘဲ ]အတိုင်းအတာတစ်ခုထိမှန်တယ်}ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ အားပေးစကားပြောသင့်ပါတယ်။
(ဂ) စာချည်းပဲသင်မနေဘဲနဲ့ ဘ၀ အတွက်အရေးကြီးတဲ့ ဗဟုသုတတွေပါ ညှပ်ပြီး သင်ကြားသင့်ပါတယ်။ ဒါမှ က လေးတွေ စာသင်ခန်းမှာပိုပျော်လာပြီး ကျူရှင်လိုအပ်မှု နည်းလာမှာပါ။
အဓိကဖြစ်သင့်တာက ပညာရေးစ နစ်အပြင် ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ဖွဲ့ စည်းပုံကိုပြင်သင့်တာပါ။ ပညာရေးဝန် ထမ်းတွေက ပညာရေးဥပဒေတွေနဲ့ စည်း ကြပ်ဖို့ကိုပဲ တာဝန်ယူသင့်ပါတယ်။ ဆရာ ဆရာမတွေဟာလည်း အစိုးရကခန့်ထား တဲ့ဝန်ထမ်းမဖြစ်သင့်ဘဲ ကျောင်းအုပ် ချုပ်ရေးကော်မတီက ခန့်ထားသူတွေပဲဖြစ် သင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ တကယ်တော်တဲ့ ထက်မြက်တဲ့ဆရာတွေကို မြို့နယ်ရဲ့ရန် ပုံငွေပေါ်မူတည်ပြီး ငှားရမ်းနိုင်မှာဖြစ်သ လို အရည်အချင်းနည်းသူတွေကိုလည်း ဖြုတ်ချင်ရင် အချိန်မရွေးဖြုတ်နိုင်မှာပါ။ အရွှေ့အပြောင်းကိစ္စအတွက်လည်း ခေါင်းခဲမနေဘဲ ပိုပြီးကြိုးစားချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာမှာ။ မြို့နယ်တွေမှာတော့ ပိုင်ဆိုင် မှု ချမ်းသာမှုအပေါ်မူတည်ပြီး အခွန်ငွေ ပုံစံမျိုး မဖြစ်မနေထည့်ဝင်သင့်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍကိုလည်း ဒီပုံစံမျိုးပြောင်း လဲနိုင်ရင် ဝန်ဆောင်မှုတွေတိုးတက်လာ မှာ မုချဧကန်ပါပဲ။ အစိုးရဝန်ထမ်းဘ၀ဆို ရင် တိုးတက်ဖို့လမ်းမမြင်ဘူး။ ဒါကတော့ ကျွန်တော့အမြင်ပါ။ ရရှိတဲ့လစာက မလုံ လောက်တဲ့အတွက် ကျုရှင်တွေသင်နေရ တဲ့အခါကျတော့ ကျောင်းသားမိဘတွေမှာ လည်း ကုန်ကျစရိတ်က မနည်းလှပါဘူး။ ကျောင်းရန်ပုံငွေစနစ်သာ အောင်မြင် အောင်လုပ်နိုင်ရင် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာ ပြီး ကလေးအားလုံးရဲ့ပညာရေး ပိုမိုတိုး တက်လာမယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။
အမေရိကန်ပေါ်လစီကရှင်းပါတယ်။ ပြည်သူတွေအများစုအတွက် သာမန်မ ဟုတ်ဘဲ ဝင်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်ရကြဖို့ပဲ ဖြစ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သာမန် အလုပ်ဆိုရင် အစိုးရအတွက် အခွန်ရတာ နည်းတယ်လေ။ ဒီတော့မကိုက်ဘူး။ ဥပ မာ တစ်နှစ် ဒေါ်လာနှစ်သောင်းရတဲ့သူငါး ယောက်နဲ့ တစ်နှစ်တစ်သိန်းရတဲ့သူတစ် ယောက် အစိုးရအတွက်အခွန်ရတာ လေး ဆလောက်ကွာတယ်။ တစ်နှစ် ၂ သောင်း ရသူဆီက အခွန်က ၂ ထောင်လောက်ပဲရ ပြီး တစ်သိန်းရတဲ့သူဆီက ၄ သောင်း လောက်ရပါတယ်။ ဒီတော့ သူတို့ရဲ့ပေါ်လ စီက လူအများကို တစ်သိန်းလောက်ရတဲ့ အလုပ်ရအောင် ကျောင်းတွေတက်ခိုင်း တယ်၊ ကြိုးစားခိုင်းတယ်။ ငပျင်းတွေ။ ဝင် ငွေနည်းသူတွေ နည်းသထက်နည်းအောင် လုပ်တယ်။ အခုဆိုရင် အတတ်ပညာတစ် ခုခုမတတ်တဲ့သူ့အတွက် အလုပ်တွေအ လွန်ရှားလာပါတယ်။ တချို့နေရာတွေဆို ရင် စက်တွေနဲ့အစားထိုးတာမျိုး၊ ဝယ်သူ က ကိုယ်ထူကိုယ်ထလုပ်ရတာမျိုးတွေ များသွားတယ်။ ဥပမာ ဈေးဝယ်ရရင် ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုစက်နဲ့ဖတ်ပြီး မိမိဘာသာ ငွေရှင်းရတာမျိုး၊ ဓာတ်ဆီဆိုင်တွေမှာ လူ တွေမထားတော့ပဲ မိမိဘာသာထည့်ရတာ မျိုးပါ။ မကြာခင် အွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုဖြစ် တဲ့ အမေဇုန်က လူလုံးဝမရှိတဲ့ စတိုးဆိုင် တွေ ဖွင့်ဖို့ကြံစည်နေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုလုပ်တာလဲဆိုတော့ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာဖို့ရယ်၊ သာမန်အောက်ခြေအ လုပ်တွေကို လုပ်ချင်တဲ့သူတွေနည်းလာ တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ပညာသိပ်တတ်စရာမလိုဘဲ ပင်ပင်ပန်း ပန်းလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေကို လုပ်အားခ ဈေးပေါပြီး အလုပ်ကြိုးစားတဲ့တရုတ်ပြည် ကို ရွှေ့လိုက်တာပေါ့။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ လည်း မီးခိုးထွက်တာသက်သာ၊ ကုန် ပစ္စည်းတွေလည်း ဈေးပေါပေါနဲ့ဝယ်သုံးရ တော့ တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်အစီအ စဉ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် တရုတ်ပြည်မှာ သွား ထုတ်တာကို စီမံခန့်ခွဲတဲ့အမေရိကန်တွေ ကျတော့ လစာအရမ်းကောင်းပါတယ်။ အခု အမေရိကန်အစိုးရသစ်က တရုတ် ပြည်ကအလုပ်တွေကို အမေရိကန်ပြည် ထဲပြန်လာဖို့ တိုက်တွန်းတယ်လေ။ ပြန် လာလဲ စီးပွားရေးသမားတွေက တရုတ် ပြည်မှာလို လူတွေနဲ့မလုပ်ခိုင်းတော့ဘဲ စက်ရုပ်တွေနဲ့လုပ်ဖို့ ကြံစည်နေကြတယ်။ ဒီတော့ စက်ရုပ်တွေကိုဒီဇိုင်းဆွဲသူတွေ၊ စက်ရုပ်တွေကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမယ့်သူ တွေကို လစာကောင်းကောင်းပေးပြီး အ လုပ်ခန့်ကြလိမ့်မယ်။ အမေရိကန်စိတ်ဝင် စားတာက လူတွေ လစာအများကြီးရကြဖို့ ပဲဖြစ်ပါ တယ်။ လစာကောင်းလေလေ ဝင်ငွေခွန်ပိုရလေလေ၊ တခြားနေရာတွေ မှာ ဖောဖောသီသီသုံးနိုင်လေလေ တ ခြားလုပ်ငန်းတွေလည်းတိုးတက်ပြီး အ ခွန်တွေပိုရလေလေပဲဆိုတော့ အစိုးရက ဥပဒေတွေနဲ့ထိန်းချုပ်လို့ လုပ်ချင်လာ အောင်ဆွဲဆောင်ရုံပဲဖြစ်ပြီး ကျန်တာက တော့ ပြည်သူတွေပဲ လုပ်ကြရတာဖြစ်ပါ တယ်။ အမေရိကန်ပညာရေးစနစ်မှာ အ ကြိုက်ဆုံးကတော့ အထက်တန်းပြီးသွား ရင် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဘာသာကို ကြိုးစားနိုင် သလောက် ကြိုးစားခွင့်ပေးထားခြင်းပါပဲ။ အသက်နဲ့လည်း မကန့်သတ်ထားဘူး။ အသက် ၅၀ ကျော် လည်း အသက် ၂၀ ကလေးတွေနဲ့အတူ ကောလိပ်တက်နေ ကြတာပဲ။ တချို့ဆို တစ်သက်လုံး ကွန် ပျူတာအလုပ်လုပ်လာပြီး အသက်ကြီးမှ သူနာပြုကျောင်း သွားတက်ချင်လည်း တက်ကြတာ။ မေဂျာဆိုရင်လည်း ကျောင်းတက်နေစဉ်မှာတောင် အမျိုးမျိုး ပြောင်းလို့ရသလို ကိုယ်ကျောင်းပြီးသွားတဲ့ မေဂျာကိုမကြိုက်ရင် ဒါမှမဟုတ် တခြားဝါ သနာပါတဲ့မေဂျာရှိရင် ထပ်တက်လို့ရတယ်။
မြန်မာပြည်မှာကတော့ အထက် တန်းအမှတ်နဲ့ပဲ လူ့ဘ၀ကို အဆင့်အတန်း ခွဲလိုက်တာ မမှန်ဘူးထင်ပါတယ်။ နောက် ပြီး ကိုယ်ရတဲ့မေဂျာကိုမကြိုက်ရင်လည်း တခြားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဘာသာ ကိုပြောင်းရတာ အလွန်ခက်ပါတယ်။ အ ဆိုးဆုံးကတော့ ကျောင်းသားအများစုကို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဘာသာရပ်တွေ သင်ပေးတာနည်းပြီး ဘာသာရပ်မေဂျာ တွေပဲများနေတာပါ။ ကျောင်းပြီးလို့ အ လုပ်ခွင်ဝင်ကြတော့ ဘွဲ့လက်မှတ်ကလေး သာပြနိုင်ပြီး ကျောင်းမှာသင်ကြားခဲ့တဲ့ ဘာသာရပ်နဲ့ လားလားမှမဆိုင်တဲ့ အလုပ် တွေလုပ်ကြရတဲ့အတွက် လုပ်ငန်းတိုးတက် မှု အားနည်းကုန်တာမဆန်းပါဘူး။ တ ကယ်တော့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဘာသာရပ်တွေကို ငယ်ရွယ်ချိန်မှာ သင် ပေးနိုင်ဖို့ အစိုးရကျောင်းတွေသာမက ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေ အများအပြားပေါ် ထွက်လာသင့်ပါတယ်။
နျောဝနေိုငျငံဟာ လူဦးရငေါးသနျး လောကျပဲရှိတဲ့ ဥရောပကနိုငျငံငယျလေး ဖွဈပွီး ဟိုးအရငျတုနျးကတော့ ဆငျးရဲတဲ့ နိုငျငံတဈခုဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ၁၉၅၀-၆၀ ပွညျ့နှဈရောကျတော့ သူတို့ပိုငျနကျထဲမှာ ရနေံနဲ့သဘာဝဓာတျငှသေို့ကျပေါငျး မြားစှာတှခေဲ့ပါတယျ။ သူတို့ဆီမှာ သခြောရှိတဲ့ရနေံပမာဏကို တဈကမ်ဘာလုံးကိုခပြွပွီး နိုငျငံတကာကနေ ငှခြေေးပါတယျ။ ပွညျသူအားလုံးကို ကြောငျးလခမယူဘဲ မတကျမနရေ ကြောငျးတကျစပေါတယျ။ ဘှဲ့ရပညာတတျတှမြေားလာတော့ နိုငျငံ တကာက ကုမ်ပဏီကွီးတှကေိုဖိတျချေါပွီး သူတို့ဆီမှာ ပညာတတျဦးရဘေယျလောကျ ရှိကွောငျး၊ ခတျေမီစီးပှားရေးလုပျငနျး တှကေိုလုပျပေးနိုငျကွောငျး၊ ဝနျဆောငျခ လညျးသကျသာကွောငျး အာမခံတဲ့အ တှကျ ကုမ်ပဏီကွီးတှတေျောတျောမြား မြား အလုပျတှရှေလေ့ာပွီး အလုပျအကိုငျ တှေ အမြားကွီးရသှားပါတယျ။ ခုဆိုရငျ အလုပျလကျမဲ့ဦးရေ အလှနျနညျးတဲ့တိုငျး ပွညျတဈခုဖွဈနပေါပွီ။ သာမနျအသိဉာဏျ ရှိသူတှကေ မာစတာအဆငျ့ထိ အနညျး ဆုံးရထားကွပါတယျ။ ကမ်ဘာပျေါမှာ အ ငွိမျးခမျြးဆုံးတိုငျးပွညျ၊ လူတဈဦးခငျြးဝငျ ငှေ စတုတ်ထအမြားဆုံးတိုငျးပွညျ၊ ပညာ တတျရာနှုနျး အမွငျ့ဆုံးတိုငျးပွညျ ဖွဈနေ ပါပွီ။ ဆိုလိုခငျြတာက ရှိတာထုတျပွီး ရောငျးစားလို့ တိုငျးပွညျကွှယျဝမလာဘူး၊ ပညာရေးကို မွှငျ့တငျမှသာ တိုငျးပွညျ ကွှယျဝပွီး ငွိမျးခမျြးလာမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါ ကွောငျ့လညျး မွနျမာပွညျရဲ့ပညာရေးကို မွှငျ့တငျဖို့က အငျမတနျအရေးကွီးနတော ဖွဈပါတယျ။
''ပညာဟူသညျ မှားသညျ မှနျသညျ ကို ဝဖေနျပိုငျးခွားနိုငျခွငျး''လို့ အဓိပ်ပာယျ ဖှငျ့ဆိုထားပမေယျ့ ကြှနျတျောအခု အ တနျးပညာရေးနဲ့ လကျတှသေ့ငျတနျး ဆငျးပညာရေးအကွောငျးပဲ ဆှေးနှေးပါ မယျ။ မွနျမာပွညျမှာတငျမဟုတျဘဲ နိုငျငံ တိုငျးမှာဖွဈနတေဲ့ပွဿနာတဈခုက ''အလုပျရှငျက အတှအေ့ကွုံရှိသူကိုပဲ ခနျ့ ထားခငျြတယျ။ ကြောငျးပွီးကာစကလေး တှကေလညျး အတှအေ့ကွုံ မရှိသေးဘူး'' ဒီကိစ်စဟာ လှယျမယောငျနဲ့ခကျတဲ့ကိစ်စပါ။ နှဈဖကျစလုံးလညျးမှနျပါတယျ။ အလုပျရှငျ အနနေဲ့ကွညျ့ရငျ အတှအေ့ကွုံမရှိဘဲ စာတှပေဲ့သိတဲ့ ကလေးတှကေို ဘယျနား အသုံးခရြမလဲမသိ။ နောကျပွီး သူတို့လုပျ မယျ့အမှားတှကွေောငျ့ ပကျြစီးကုနျမှာ လညျးစိုးရိမျရ။ နောကျဆုံး စကားအပွော အဆို လူမှုဆကျဆံရေးကအစ မညကျ ညောသေးတော့ သူတို့အတှကျ အဲလိုက လေးမြိုးတှကေိုခနျ့ရတာ အလှနျတာဝနျ ကွီးပါတယျ။ ဒီလိုကိစ်စရပျတှကေို ဖှံ့ဖွိုးပွီး တိုငျးပွညျတှမှော ဖွရှေငျးတဲ့ပုံစံကတော့
(က)အထကျတနျးအရှယျမှာက တညျးက ကလေးတှဟော သူတို့ဝါသနာ ပါတဲ့ ဘာသာရပျနဲ့သကျဆိုငျတဲ့ ဘာသာ ရပျတှကေို အနညျးဆုံး တဈဆငျ့မွငျ့တဲ့အ တနျးထိ Extra credit ယူပွီး သူတို့နဲ့ဆိုငျတဲ့ (ဥပမာ ဆေးရုံတို့၊ ရှနေ့ရေုံးတို့၊ စာ ရငျးအငျးရုံး) လုပျငနျးတှမှော အခြိနျပိုငျး လုပျအားပေးကွတယျ။ ဘာမှသိပျမလုပျရ ပါဘူး။ စာရှကျစာတမျးတှသေိမျး၊ ဟိုကူ ဒီကူပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ပတျဝနျးကငျြနဲ့ရငျးနှီး သှားတယျ။ လူတှနေဲ့ ပေါငျးတတျသငျး တတျသှားတယျ။ အပွောအဆိုညကျသှား တယျ။
(ခ) အထကျတနျးပွီးတော့ တက်က သိုလျရောကျတယျ။ ပထမ နှဈနှဈမှာတော့ ဘာသာရပျဆိုငျရာတှကေို အမြားကွီးမ သငျရသေးဘဲ အခွခေံအတနျးတှပေဲ ယူကွရတယျ။ ဥပမာ စီးပှားရေးဆိုငျရာ မဂြောယူမယျဆိုရငျ စီးပှားရေးမဂြော အားလုံးနဲ့ဆိုငျတဲ့ အထှထှေအေတနျးတှေ Accounting, marketing, psych-ology, management ပဲ ယူရသေးတဲ့ အတှကျ လကျတှအေ့လုပျတှမှော မကူနိုငျသေးဘူး။ တတိယနှဈရောကျမှ မဂြောအတနျးတှယေူပွီး internship လို့ချေါတဲ့ အလုပျသငျအလုပျတှေ ရှာကွရတယျ။ မလုပျမနရေမဟုတျဘူးဆိုပမေယျ့ ဒီလိုမှ မလုပျထားရငျ ကြောငျးပွီးတဲ့အခါ အလုပျ ရဖို့ခကျခဲသှားမှာစိုးတော့ ၉၀ ရာခိုငျနှုနျး ကြျောသောကြောငျးသားတှကေ internship ကို လစာအနညျးငယျ သို့မဟုတျ လစာမဲ့လုပျပေးရတယျ။ ဒီလိုလုပျပေးတာ ကိုလညျး အလကားလုပျပေးရတယျဆိုပွီး လကျလှတျစပယျလုပျလို့မရဘူး။ ကုမ်ပဏီ ရဲ့စညျးကမျးတှကေို တဈသဝမေတိမျး လိုကျနာရတယျ။ အလုပျခြိနျကအစပေါ့။ လုပျငနျးမှာ အတှအေ့ကွုံရှိသူတှရေဲ့ စကားကိုနားထောငျရတယျ။ မှတျသားရ တယျ။
(ဂ) နောကျဆုံးတဈမြိုးက ကြောငျး ပွီးကာစမှာ အတှအေ့ကွုံနညျးသေးတော့ လစာနညျးနညျးနဲ့လုပျကွတယျ။ ဥပမာ လုပျသကျသုံးနှဈလောကျရှိတဲ့ အငျဂငျြနီ ယာရဲ့ လစာတဈဝကျလောကျပဲယူပွီးလုပျ ကွရတယျ။ သုံးနှဈလောကျနပွေီး အတှေ့ အကွုံရတဲ့အခါကြ လစာတိုးတောငျးလို့ မပေးတော့မှ တခွားအလုပျသဈရှာကွရ တယျ။ လုပျငနျးမှာ အားကိုးအားထားပွုရ တဲ့သူမြိုးဆိုရငျ အလုပျရှငျတှကေတော့ တကျနိုငျသလောကျ လစာတိုးပေးကွပါ တယျ။
မွနျမာပွညျမှာ အလုပျရှငျတှဘေကျ ကလညျး မြိုးဆကျသဈတှကေို ဒီလိုမြိုး အခှငျ့အရေးတှဖှေငျ့ပေးဖို့ အားနညျးသလို ကြောငျးသား ကြောငျးသူလေးတှကေလညျး သူတဈပါးဆီမှာ ကိုယျထမငျးကိုယျစားပွီး မလုပျပေးခငျြကွဘူး။ ကြှနျတျောထငျတာ တော့ ဒီလိုပုံစံမြိုး မကွာခငျပွောငျးလဲလာ လိမျ့မယျထငျတာပါပဲ။ အစိုးရကလညျး နညျးနညျးအားပေးတဲ့ဥပဒတှေေ ခမြှတျ ပေးရငျ အဆငျပွလောမှာပါ။ ဥပမာ အခှနျ လြှော့ပေးတာမြိုးပေါ့။
မွနျမာပွညျပညာရေးစနဈဟာ ဗဟို ဦးစီးစနဈဖွဈပါတယျ။ ပညာရေးဝနျထမျး ကအစ ကြောငျးသားတှရေဲ့မေးခှနျး၊ သငျ ကွားရမညျ့စာအုပျ၊ ဖွရေမညျ့အဖွပေုံစံ အဆုံး ဝနျကွီးဌာနရဲ့ တငျးကပျြထားတဲ့ ဥပဒအေောကျမှာရှိပါတယျ။ တကယျဖွဈ သငျ့တာက ဝနျကွီးဌာနက ပညာရေးဝနျ ထမျးတှရေဲ့ အရညျအခငျြးတှေ (ဥပမာ သငျကွားခှငျ့လိုငျစငျလိုမြိုးပဲ) စဈထုတျ ပေးသငျ့ပွီး သငျကွားမယျ့ဆရာ၊ ဆရာမ ကို သငျ့တျောတဲ့ လစာပေးပွီးခနျ့ထားနိုငျဖို့ က ကြောငျးအုပျခြုပျရေးအဖှဲ့မှာ လုံးဝ အာဏာရှိသငျ့ပါတယျ။ ခနျ့ခှငျ့ရှိသလို အ ရညျအခငျြးမရှိရငျလညျး ထုတျခှငျ့ရှိရမှာ ပါ။ နောကျပွီး ကလေးတှကေိုသငျကွား မယျ့ သငျရိုးညှနျးတမျး စာအုပျတှဆေိုရငျ လညျး ပုံသမေသတျမှတျဘဲ ခပျဆငျဆငျ စာအုပျ နှဈမြိုး၊ သုံးမြိုးလောကျ ပညာရေး ဝနျကွီးက အသိအမှတျပွုထားသငျ့ပါ တယျ။ ဆရာကိုယျတိုငျလကျခံပွီး ကွိုကျ နှဈသကျတဲ့စာအုပျကိုသငျတဲ့အတှကျ ပို ပွီးအကြိုးမြားစပေါတယျ။
ပညာရေးဝနျထမျး ဆရာဆရာမတှေ မှာ လှတျလပျတဲ့စတိုငျနဲ့ သငျကွားမှုရှိစေ သငျ့ပွီး ကလေးတှကေို သငျရိုးညှနျးတမျး ထဲကစာတှတေငျမကပဲ အပွငျစာတှကေို လညျး အထောကျအကူပွုစာပတှေအေ ဖွဈ သငျကွားခှငျ့ရှိရပါမယျ။ မေးခှနျးတှေ ဆိုရငျလညျး စာအုပျထဲက အလှတျမှတျ နတေဲ့မေးခှနျးတှထေကျ နားလညျမှုကို ပို ပွီးဦးစားပေးတဲ့မေးခှနျးတှကေို မေးသငျ့ ပါတယျ။ ဥပမာ ဗိုလျခြုပျမှေးနကေို့မှတျမိ ပွီးသိတာထကျ ပိုအရေးကွီးတဲ့ ]ဗိုလျခြုပျ အောငျဆနျးကို ဘာကွောငျ့ လုပျကွံကွ သနညျး၊ ဗိုလျခြုပျသာမသခေဲ့သျော ဘာ တှဖွေဈလာနိုငျသနညျး} စတဲ့ ကလေး တှရေဲ့အတှေးအချေါကို မွှငျ့တငျတဲ့မေး ခှနျးမြိုးတှမေေးသငျ့ပါတယျ။ တက်ကသိုလျ ဝငျဖို့ စာမေးပှဲကိုမှ ပညာရေးဝနျကွီးဌာနက တိုကျရိုကျဖွဈစေ သှယျဝိုကျပွီးဖွဈစေ ကိုငျတှယျသငျ့ပါတယျ။ ကြောငျးသားမိဘ မွို့မိမွို့ဖတှကေတော့ ကိုယျ့မွို့ရှာရဲ့ ပညာရေးတိုးတကျဖို့အတှကျ အစိုးရရဲ့ မလောကျငတဲ့ဘတျဂကျြထကျ မိမိတို့ပိုငျ ဆိုငျမှုရာနှုနျးအလိုကျ အခှနျငှတှေကေို လညျး ခမျြးသာရငျခမျြးသာသလို ဥပဒေ အရ အခြိုးကထြညျ့ဝငျရပါမယျ။ နောကျ ပွီး လှတျလပျတဲ့ပညာရေးစနဈသဈကို ကောငျးစှာနားလညျထားသငျ့ပွီး ဆငျခွေ တှလြှေော့သငျ့ပါတယျ။ ဥပမာ ]ဆရာမက မသငျထားတဲ့မေးခှနျးတှကေို စာမေးပှဲမှာ ဘာလို့မေးတာလဲ} စတာမြိုးတှမေေးပွီး ကလေးတှရေဲ့ပညာရေးကို သသေခြော ခြာနားမလညျဘဲ ဝငျပွီးမပါသငျ့ပါဘူး။
ပညာရေးဆိုတာ လူ့အဖှဲ့အစညျး လူတနျးစားတဈခုအတှကျ သီးသနျ့ထား သော (privilege) မဟုတျသငျ့ပါ။ လေ့ လာသငျယူခငျြစိတျရှိသူအားလုံးအတှကျ ရှိကိုရှိရမယျ့အခှငျ့အရေး (right) တဈခုပါ။ ကြှနျတျောဆိုလိုခငျြတာက ''ပညာရေး ဆိုတာ ငှကွေေးတတျနိုငျခွငျး မတတျနိုငျ ခွငျးကိုမဆိုလိုပါ။ သို့ပမေယျ့ လိုအပျလြှငျ၊ တတျနိုငျလြှငျ၊ စိတျဝငျစားသေးလြှငျ၊ အကြိုးအကွောငျးညီညှတျလြှငျ လူမြိုးမရှေး ဘာသာမရှေး အသကျအရှယျမရှေး ရရှိခံ စားနိုငျသော လူသားတိုငျး၏ အခှငျ့အရေး တဈခု''လို့ယူဆပါတယျ။
တကယျတော့ အရမျးလညျတဲ့အစိုးရ တှဆေိုတာ ပညာတတျတှကေိုသာ သူတို့ တိုငျးပွညျကို လာရောကျအခွခေနြထေိုငျ သူတှဖွေဈစခေငျြကွတာပါ။ ဒါမှပဲ ဝငျငှေ မြားမြားရပွီး အခှနျမြားမြားရမှာကိုး။ လူတှရေဲ့ဘဝကို သခြောဆနျးစဈကွညျ့ရငျ နှဈ ၄၀ လောကျပဲ နိုငျငံအတှကျ ဆောငျ ရှကျပေးနိုငျမှာဖွဈပွီး ကနျြတဲ့ နှဈ ၄၀ ဟာ အစိုးရအပျေါမှီခိုကွတာပါ။ ဒီတော့ သူတို့ နိုငျငံအတှကျ လုပျအားကောငျးကောငျး ပေးနိုငျတဲ့ နှဈ ၄၀ အပျေါမှာ ကနျ့သကျ ခကျြတှထေားပွီး အခှငျ့အရေးတှပေိတျ ပငျထားတော့ရော တိုငျးပွညျအတှကျ ပို ကောငျးစားသှားမှာလား၊ ဒါမှမဟုတျ သူ တို့တဈတှကေို တိုငျးပွညျကနှငျထုတျလို့ရ မှာလား၊ နှငျထုတျခှငျ့ရှိရငျလညျး စောစော စီးစီးနှငျထုတျပါ။ မဟုတျရငျလညျး လူ တဈယောကျရဲ့ ရပိုငျခှငျ့အခှငျ့အရေး ပေး သငျ့ပါတယျ။ မိတျဆှတှေထေဲမှာ မွနျမာ ပွညျမှာမှေး၊ မွနျမာပွညျမှာကွီးပွီး အ သကျမှေးဝမျးကြောငျးပညာတှေ သငျခှငျ့ မရှိပဲ ဈေး ရောငျးနရေသူတှအေမြားကွီးပါ။ နောကျပွီး အငျဂငျြနီယာပညာကို ဝါသနာ ပါပမေယျ့လညျး သူစာမေးပှဲအောငျတဲ့နှဈ က အငျဂငျြနီယာကြောငျးမဖှငျ့သေးလို့ တကျခှငျ့မရသူတှေ ဒုနဲ့ဒေးပါ။
ကြှနျတျော အမရေိကနျနိုငျငံမှာ ကြောငျးတကျလာတဲ့ တဈလြှောကျလုံးမှာ အသကျ ၅၀ ကြျောတှသောမက ပငျစငျယူ ပွီးသူတှတေောငျ မြားစှာတှခေဲ့ရတာပါ။ ယုတျစှအဆုံး ကြှနျတျောကိုယျတိုငျ ဧညျ့ နိုငျငံသားအဖွဈနဲ့ ကိုယျကွိုကျတဲ့ဘာသာ ကို စိတျကွိုကျလလေ့ာသငျကွားခှငျ့ ရခဲ့ပါ တယျ။ တကယျတော့ လူ့ဘဝဆိုတာတိုတို လေးပါ။ အလုပျလုပျနိုငျတာ နှဈ ၄၀ အ မြားဆုံးပါ။ ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ အကွံပေးရ ရငျတော့ “အစိုးရအနနေဲ့ အိတျစိုကျ ပညာရေးကို ဖကျြသိမျးသငျ့ပါပွီ” စတေ နာရှိသူ အလှူပေးခငျြသူတှမြေားတဲ့ ကြှနျတျောတို့တိုငျးပွညျမှာ ဆငျးရဲခြို့တဲ့သူတှေ ကိုထောကျပံ့ဖို့ ဖောငျဒေးရှငျးတှမြေားစှာ ရှိနပေါပွီ။ ဒီလိုစတေနာရှငျတှကေို စနဈတကစြီမံခနျ့ခှဲပွီး လူသားတိုငျးအတှကျ ရသငျ့တဲ့အခှငျ့အရေးတဈခုဖွဈတဲ့ ပညာ ရေးကို အစီအမံပွောငျးမွှငျ့တငျသငျ့တယျ လို့ယူဆမိပါတယျ။
မွနျမာပွညျပညာရေးစနဈ ပွောငျး လဲဖို့ဆှေးနှေးကွတာ အမြားအပွားပါ။ ကြှနျတျောလညျး တခြို့ကို အမရေိကနျ ပညာရေးစနဈနဲ့ယှဉျပွီး တငျပွလိုပါတယျ။ အကဉျြးခြုံးလိုကျတဲ့အခါကတြော့ ပွောငျး လဲရမှာက သငျရိုးညှနျးတမျးမဟုတျသလို၊ စာသငျခြိနျလညျးမဟုတျပါဘူး။ တကယျ ပွောငျးလဲရမှာက စာမေးပှဲမေးခှနျးနဲ့ အ မှတျပေးတဲ့ပုံစံပဲ။ တကယျအရညျအခငျြး ရှိတဲ့ဆရာတှကေိုတော့ ကောငျးမှနျတဲ့ ဘယျပညာရေးစနဈမှာမဆို လိုအပျတာ ကွောငျ့ အထူးမပွောလိုတော့ပါဘူး။ လကျရှိမွနျမာပွညျရဲ့ မေးခှနျးပုံစံနဲ့ တ ခွားနိုငျငံတှကေ မေးခှနျးပုံစံတှေ ကြှနျ တျောတို့ ယှဉျကွညျ့ရအောငျ။
မွနျမာပွညျက လကျရှိစာမေးပှဲမေး ခှနျးတှကေ မှတျဉာဏျကိုအသားပေးတဲ့ မေးခှနျးပုံစံတှပေါ။ ဥပမာ သင်ျခြာ၊ ရူပ၊ ဓာ တု၊ ဇီဝ စတဲ့စာမေးပှဲတှဆေိုရငျလညျး ဖျောမွူလာတှနေားလညျမှုကိုမေးတဲ့ အ ဆငျ့လောကျပဲမြားပါတယျ။ ဒီတော့ က လေးတှဟော မကွာခငျမသှေ့ားမယျ့၊ လို အပျရငျ အငျတာနကျထဲမှာ အလှယျတကူ ပွနျရှာလို့ရတဲ့ဖျောမွူလာတှကေိုပဲ အခြိနျ ကုနျခံပွီးကကျြနကွေရတယျ။ ဘယျနရော မှာ ဘယျဖျောမွူလာကို ဘယျလိုသုံးရမယျ ဆိုတဲ့ အသိကနညျးတော့ ပုစ်ဆာအဆငျ့အ တနျးကို မွှငျ့လို့မရဘူး။ ဆရာတှအေနေ နဲ့ကလညျး ကလေးတှကေ ဒီဖျောမွူလာ တှကေို အသမှေတျထားရရှာတယျဆိုပွီး သနားနတေော့ မေးခှနျးရဲ့အဆငျ့ကို မ မွှငျ့တော့ဘူး။ မွှငျ့ရငျလညျး အားလုံးကြ ကုနျမှာစိုးလို့ထငျတယျ။ အမရေိကနျ ကြောငျးတှကေတော့ ပွောငျးပွနျပါ။ ဖျော မွူလာမြားတဲ့ဘာသာရပျအားလုံးမှာ ဖျော မွူလာတှကေို စာရှကျတဈရှကျပျေါမှာရေး ပွီး ကြောငျးသားအားလုံးကို ကျောပီတဈ စောငျစီပေးထားလိုကျတယျ။ ကြောငျး သားတှကေို ဘယျဖျောမွူလာ ဘယျမှာ သုံးသလဲဆိုတာ သခြောသိမသိ အဓိက မေးတာဆိုတော့ မေးခှနျးတှကေို ပိုခကျခဲ အောငျမေးလို့ရတယျ။ တဈခါတရံ အမှတျ ၁၁၀၊ ၁၂၀ ဖိုး အထိ မေးခှနျးမှာမေးလရှေိ့ တယျ။ ဒီတော့ အမှတျပိုလိုခငျြတဲ့သူတှေ က ပိုပွီးကွိုးစားဖွကွေတယျ။
နောကျတဈခုကတော့ အမှတျပေးတဲ့ စနဈပါ။ မွနျမာပွညျမှာက ခုထိ ဘုနျးကွီး ကြောငျးမှာ စာအံသလို ဤ၊သညျ၊ မရှေ့ ဖွမှေ အမှတျပေးတတျတာ အရိုးစှဲနပေါ တယျ။ အခုစနဈက အဖွမှေနျဖို့ကိုပဲ အ ဖွမှေနျစာရှကျနဲ့ အဆငျ့ဆငျ့တိုကျစဈနေ တော့ တခွားနညျးနဲ့တှကျခကျြဖွဆေိုတာ မြိုး၊ တခွားဗဟုသုတတှနေဲ့ပေါငျးပွီး ဖွေ ဆိုတာမြိုးကို အားမပေးဘူးဖွဈနပေါ တယျ။
ပုစ်ဆာတှမှော အဖွေ ၄-၅ ခုထဲက ရှေးခိုငျးတဲ့ မှနျရာရှေး စာမေးပှဲမေးခှနျးနဲ့ လိုအပျမယျ့ ဖျောမွူလာစာရှကျရယျ အ ကွမျးတှကျခကျြဖို့စာရှကျရယျ ခပြေးထား လိုကျရငျ သငျရိုးတဈအုပျလုံးမှာရှိတဲ့ သိ ကိုသိထားရမယျ့ အခကျြအလကျတှကေို မေးလို့ရပွီး ကြောငျးသားတိုငျးလညျး ပို လလေ့ာဆညျးပူးဖွဈမှာပါ။ ဖတျစာဘာ သာရပျ ဥပမာ ဘောဂဗဒေလို ဘာသာရပျ တှကေိုလညျး စာအုပျထဲမှာရှိတဲ့သီအိုရီ တှအေပွငျ အခွားဉာဏျစမျးမေးခှနျးတှေ ကို အဖွမှေနျရှေးနညျးနဲ့ စာမေးပှဲပုံစံ ပွောငျးလိုကျရငျ မေးစရာတှေ အမြားကွီး၊ သိရမှာတှေ နားလညျရမှာတှေ အမြားကွီး ဖွဈလာပွီး ကလေးတှေ ပိုမိုပွီးတှေးတော တတျတဲ့အကငျြ့ရသှားမှာပါ။ အခုစနဈက ကကျြထားတာနဲ့တိုးရငျထောပွီး မကကျြခဲ့ မိသူတှကေတော့ နောငျတတှနေဲ့ပါ။ မှနျ ရာရှေးစာစဈစနဈဟာ ကြောငျးသားတှေ ကို စာကိုပိုနားလညျစတေဲ့အပွငျ အမှတျ ပေးစနဈမှာလညျး ဘကျမလိုကျဖွဈအောငျ ကာကှယျပေးပါတယျ။ ဘယျနညျးနဲ့ပဲ တှကျထားပွီးအဖွမှေနျရရ အဓိကက အ ဖွမှေနျဖို့ပဲလေ။ နောကျပွီး ပုစ်ဆာတှကေို သသေခြောခြာနားလညျအောငျ ဖတျတတျ တဲ့အကငျြ့၊ အရာအားလုံးကို စနဈတကြ တှေးချေါပွီး သုံးသပျတတျတဲ့အလအေ့ ကငျြ့ရလာမှာပါ။
မှေးရပျမွရေောကျတုနျးက ၁၀ တနျး ကလေး ၅၀၀ လောကျနဲ့ နှဈနာရီခနျ့ အမေးအဖွေ ဆှေးနှေးပှဲလေးလုပျဖွဈခဲ့ပါ တယျ။ အဓိကဆှေးနှေးဖွဈခဲ့တာကတော့ အခွခေံ ဒီမိုကရစေီစနဈရဲ့သဘောသဘာ ၀၊ စီးပှားရေးဟူသညျ၊ ပညာရေးရဲ့အဓိက ရညျရှယျခကျြ၊ နိုငျငံတကာအရေးနဲ့ လူမှု ရေးအကွောငျးတှကေို အမေးအဖွဆှေေး နှေးဟောပွောတာပါ။ ဒီပှဲမှာ ကြှနျတျော နားလညျလိုကျတာကတော့
(က)ဆရာတှရေဲ့ သငျကွားတဲ့စတိုငျ မှားနတေယျထငျတယျ။ ကြောငျးသားတှေ မှာ ကွောကျစိတျမြားစှာကိနျးဝပျနတေယျ။ တကယျဖွဈရမှာက ကြောငျးသားတှနေဲ့ ဆရာတှဟော မိတျဆှတှေသေဖှယျဖွဈနေ ရမှာပါ။ ဆရာတှကေိုကွညျ့ရတာ သငျ ကွားပွသတဲ့နရောမှာ မိနျ့ခှနျးပွောသလို မြိုး တဈလမျးသှားစနဈကိုသာ အဓိကအ သုံးပွုပွီး မေးခှနျးမေးရငျလညျး တဈတနျး လုံးကိုခွုံမေးလရှေိ့ပုံပဲ။ တကယျဖွဈသငျ့ တာက စိတျကွိုကျတဈယောကျကို ရှေး ပွီး မေးတဲ့စနဈကိုကငျြ့သုံးသငျ့ပါတယျ။ ဒါမှပဲ ကလေးတှဟော ကိုယျ့ကိုမေးလာမှာ စိုးလို့ သငျကွားမှုအပျေါ အာရုံစိုကျနမှော လေ။ တဈတနျးလုံးမေး တဈတနျးလုံးဖွေ ဆိုတော့ အာရုံစိုကျဖို့မလိုဘူးပေါ့။
(ခ) ကလေးတှစောမေးလို့ အဖွေ မှားရငျလညျး အရှကျခှဲတဲ့ပုံစံမြိုးမပွောဘဲ ]အတိုငျးအတာတဈခုထိမှနျတယျ}ဆိုတဲ့ ပုံစံမြိုးနဲ့ အားပေးစကားပွောသငျ့ပါတယျ။
(ဂ) စာခညျြးပဲသငျမနဘေဲနဲ့ ဘ၀ အတှကျအရေးကွီးတဲ့ ဗဟုသုတတှပေါ ညှပျပွီး သငျကွားသငျ့ပါတယျ။ ဒါမှ က လေးတှေ စာသငျခနျးမှာပိုပြျောလာပွီး ကြူရှငျလိုအပျမှု နညျးလာမှာပါ။
အဓိကဖွဈသငျ့တာက ပညာရေးစ နဈအပွငျ ပညာရေးဝနျထမျးတှရေဲ့ ဖှဲ့ စညျးပုံကိုပွငျသငျ့တာပါ။ ပညာရေးဝနျ ထမျးတှကေ ပညာရေးဥပဒတှေနေဲ့ စညျး ကွပျဖို့ကိုပဲ တာဝနျယူသငျ့ပါတယျ။ ဆရာ ဆရာမတှဟောလညျး အစိုးရကခနျ့ထား တဲ့ဝနျထမျးမဖွဈသငျ့ဘဲ ကြောငျးအုပျ ခြုပျရေးကျောမတီက ခနျ့ထားသူတှပေဲဖွဈ သငျ့ပါတယျ။ ဒါမှသာ တကယျတျောတဲ့ ထကျမွကျတဲ့ဆရာတှကေို မွို့နယျရဲ့ရနျ ပုံငှပေျေါမူတညျပွီး ငှားရမျးနိုငျမှာဖွဈသ လို အရညျအခငျြးနညျးသူတှကေိုလညျး ဖွုတျခငျြရငျ အခြိနျမရှေးဖွုတျနိုငျမှာပါ။ အရှအေ့ပွောငျးကိစ်စအတှကျလညျး ခေါငျးခဲမနဘေဲ ပိုပွီးကွိုးစားခငျြစိတျတှေ ဖွဈလာမှာ။ မွို့နယျတှမှောတော့ ပိုငျဆိုငျ မှု ခမျြးသာမှုအပျေါမူတညျပွီး အခှနျငှေ ပုံစံမြိုး မဖွဈမနထေညျ့ဝငျသငျ့ပါတယျ။ ကနျြးမာရေးကဏ်ဍကိုလညျး ဒီပုံစံမြိုးပွောငျး လဲနိုငျရငျ ဝနျဆောငျမှုတှတေိုးတကျလာ မှာ မုခြဧကနျပါပဲ။ အစိုးရဝနျထမျးဘဝဆို ရငျ တိုးတကျဖို့လမျးမမွငျဘူး။ ဒါကတော့ ကြှနျတော့အမွငျပါ။ ရရှိတဲ့လစာက မလုံ လောကျတဲ့အတှကျ ကြုရှငျတှသေငျနရေ တဲ့အခါကတြော့ ကြောငျးသားမိဘတှမှော လညျး ကုနျကစြရိတျက မနညျးလှပါဘူး။ ကြောငျးရနျပုံငှစေနဈသာ အောငျမွငျ အောငျလုပျနိုငျရငျ ကုနျကစြရိတျသကျသာ ပွီး ကလေးအားလုံးရဲ့ပညာရေး ပိုမိုတိုး တကျလာမယျလို့ ထငျမွငျမိပါတယျ။
အမရေိကနျပျေါလစီကရှငျးပါတယျ။ ပွညျသူတှအေမြားစုအတှကျ သာမနျမ ဟုတျဘဲ ဝငျငှကေောငျးတဲ့အလုပျရကွဖို့ပဲ ဖွဈတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ သာမနျ အလုပျဆိုရငျ အစိုးရအတှကျ အခှနျရတာ နညျးတယျလေ။ ဒီတော့မကိုကျဘူး။ ဥပ မာ တဈနှဈ ဒျေါလာနှဈသောငျးရတဲ့သူငါး ယောကျနဲ့ တဈနှဈတဈသိနျးရတဲ့သူတဈ ယောကျ အစိုးရအတှကျအခှနျရတာ လေး ဆလောကျကှာတယျ။ တဈနှဈ ၂ သောငျး ရသူဆီက အခှနျက ၂ ထောငျလောကျပဲရ ပွီး တဈသိနျးရတဲ့သူဆီက ၄ သောငျး လောကျရပါတယျ။ ဒီတော့ သူတို့ရဲ့ပျေါလ စီက လူအမြားကို တဈသိနျးလောကျရတဲ့ အလုပျရအောငျ ကြောငျးတှတေကျခိုငျး တယျ၊ ကွိုးစားခိုငျးတယျ။ ငပငျြးတှေ။ ဝငျ ငှနေညျးသူတှေ နညျးသထကျနညျးအောငျ လုပျတယျ။ အခုဆိုရငျ အတတျပညာတဈ ခုခုမတတျတဲ့သူ့အတှကျ အလုပျတှအေ လှနျရှားလာပါတယျ။ တခြို့နရောတှဆေို ရငျ စကျတှနေဲ့အစားထိုးတာမြိုး၊ ဝယျသူ က ကိုယျထူကိုယျထလုပျရတာမြိုးတှေ မြားသှားတယျ။ ဥပမာ ဈေးဝယျရရငျ ကိုယျ့ပစ်စညျးကိုစကျနဲ့ဖတျပွီး မိမိဘာသာ ငှရှေငျးရတာမြိုး၊ ဓာတျဆီဆိုငျတှမှော လူ တှမေထားတော့ပဲ မိမိဘာသာထညျ့ရတာ မြိုးပါ။ မကွာခငျ အှနျလိုငျးစတိုးတဈခုဖွဈ တဲ့ အမဇေုနျက လူလုံးဝမရှိတဲ့ စတိုးဆိုငျ တှေ ဖှငျ့ဖို့ကွံစညျနတေယျ။ ဘာဖွဈလို့ ဒီလိုလုပျတာလဲဆိုတော့ ကုနျကစြရိတျ သကျသာဖို့ရယျ၊ သာမနျအောကျခွအေ လုပျတှကေို လုပျခငျြတဲ့သူတှနေညျးလာ တာကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့လညျး ပညာသိပျတတျစရာမလိုဘဲ ပငျပငျပနျး ပနျးလုပျရတဲ့အလုပျတှကေို လုပျအားခ ဈေးပေါပွီး အလုပျကွိုးစားတဲ့တရုတျပွညျ ကို ရှလေို့ကျတာပေါ့။ ကိုယျ့တိုငျးပွညျမှာ လညျး မီးခိုးထှကျတာသကျသာ၊ ကုနျ ပစ်စညျးတှလေညျး ဈေးပေါပေါနဲ့ဝယျသုံးရ တော့ တဈခကျြခုတျ နှဈခကျြပွတျအစီအ စဉျပေါ့။ ဒါပမေယျ့ တရုတျပွညျမှာ သှား ထုတျတာကို စီမံခနျ့ခှဲတဲ့အမရေိကနျတှေ ကတြော့ လစာအရမျးကောငျးပါတယျ။ အခု အမရေိကနျအစိုးရသဈက တရုတျ ပွညျကအလုပျတှကေို အမရေိကနျပွညျ ထဲပွနျလာဖို့ တိုကျတှနျးတယျလေ။ ပွနျ လာလဲ စီးပှားရေးသမားတှကေ တရုတျ ပွညျမှာလို လူတှနေဲ့မလုပျခိုငျးတော့ဘဲ စကျရုပျတှနေဲ့လုပျဖို့ ကွံစညျနကွေတယျ။ ဒီတော့ စကျရုပျတှကေိုဒီဇိုငျးဆှဲသူတှေ၊ စကျရုပျတှကေို ပွုပွငျထိနျးသိမျးမယျ့သူ တှကေို လစာကောငျးကောငျးပေးပွီး အ လုပျခနျ့ကွလိမျ့မယျ။ အမရေိကနျစိတျဝငျ စားတာက လူတှေ လစာအမြားကွီးရကွဖို့ ပဲဖွဈပါ တယျ။ လစာကောငျးလလေေ ဝငျငှခှေနျပိုရလလေေ၊ တခွားနရောတှေ မှာ ဖောဖောသီသီသုံးနိုငျလလေေ တ ခွားလုပျငနျးတှလေညျးတိုးတကျပွီး အ ခှနျတှပေိုရလလေပေဲဆိုတော့ အစိုးရက ဥပဒတှေနေဲ့ထိနျးခြုပျလို့ လုပျခငျြလာ အောငျဆှဲဆောငျရုံပဲဖွဈပွီး ကနျြတာက တော့ ပွညျသူတှပေဲ လုပျကွရတာဖွဈပါ တယျ။ အမရေိကနျပညာရေးစနဈမှာ အ ကွိုကျဆုံးကတော့ အထကျတနျးပွီးသှား ရငျ ကိုယျကွိုကျတဲ့ဘာသာကို ကွိုးစားနိုငျ သလောကျ ကွိုးစားခှငျ့ပေးထားခွငျးပါပဲ။ အသကျနဲ့လညျး မကနျ့သတျထားဘူး။ အသကျ ၅၀ ကြျော လညျး အသကျ ၂၀ ကလေးတှနေဲ့အတူ ကောလိပျတကျနေ ကွတာပဲ။ တခြို့ဆို တဈသကျလုံး ကှနျ ပြူတာအလုပျလုပျလာပွီး အသကျကွီးမှ သူနာပွုကြောငျး သှားတကျခငျြလညျး တကျကွတာ။ မဂြောဆိုရငျလညျး ကြောငျးတကျနစေဉျမှာတောငျ အမြိုးမြိုး ပွောငျးလို့ရသလို ကိုယျကြောငျးပွီးသှားတဲ့ မဂြောကိုမကွိုကျရငျ ဒါမှမဟုတျ တခွားဝါ သနာပါတဲ့မဂြောရှိရငျ ထပျတကျလို့ရတယျ။
မွနျမာပွညျမှာကတော့ အထကျ တနျးအမှတျနဲ့ပဲ လူ့ဘဝကို အဆငျ့အတနျး ခှဲလိုကျတာ မမှနျဘူးထငျပါတယျ။ နောကျ ပွီး ကိုယျရတဲ့မဂြောကိုမကွိုကျရငျလညျး တခွားအသကျမှေးဝမျးကြောငျး ဘာသာ ကိုပွောငျးရတာ အလှနျခကျပါတယျ။ အ ဆိုးဆုံးကတော့ ကြောငျးသားအမြားစုကို အသကျမှေးဝမျးကြောငျး ဘာသာရပျတှေ သငျပေးတာနညျးပွီး ဘာသာရပျမဂြော တှပေဲမြားနတောပါ။ ကြောငျးပွီးလို့ အ လုပျခှငျဝငျကွတော့ ဘှဲ့လကျမှတျကလေး သာပွနိုငျပွီး ကြောငျးမှာသငျကွားခဲ့တဲ့ ဘာသာရပျနဲ့ လားလားမှမဆိုငျတဲ့ အလုပျ တှလေုပျကွရတဲ့အတှကျ လုပျငနျးတိုးတကျ မှု အားနညျးကုနျတာမဆနျးပါဘူး။ တ ကယျတော့ အသကျမှေးဝမျးကြောငျး ဘာသာရပျတှကေို ငယျရှယျခြိနျမှာ သငျ ပေးနိုငျဖို့ အစိုးရကြောငျးတှသောမက ပုဂ်ဂလိကကြောငျးတှေ အမြားအပွားပျေါ ထှကျလာသငျ့ပါတယျ။
ယခင်အပတ်မှ အဆက် ...
မြန်မာပြည်မှာ ''ကုသိုလ်လည်းရ အ ကျိုးအမြတ်လည်းများ''တဲ့ အာမခံလုပ် ငန်းတွေ သိပ်ခေတ်မစားသေးတာဟာ ပြည်သူတွေကလည်း စိတ်ဝင်စားမှုနည်း နေတာကြောင့်အပြင် အာမခံလုပ်ငန်းမျိုး စုံလည်း အပြိုင်အဆိုင်မပေါ်ပေါက်သေး တာကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဥပဒေပြုလွှတ်တော်အနေနဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ လိုက်နာရမယ့်ဥပဒေတွေ ချမပေးသေးတာကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါ တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ''အာမခံလုပ်ငန်း'' လို့ပြောလိုက်ရင် လူအများက မီးအာမခံ၊ သဘာဝဘေးဒဏ်အာမခံတွေပဲ စိတ်ထဲ မှာ ပြေးမြင်လေ့ရှိကြတယ်။ တကယ်တော့ ''တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု''ကို အဓိကကျား ကန်ပေးတာ အာမခံလုပ်ငန်းပါ။ ဒီနေရာ မှာ ဥပမာနဲ့ အနည်းငယ်ရှင်းပြပါရစေ။ မြန်မာပြည်မှာ ကားတွေမောင်းတယ်။ တိုက်တယ်။ မောင်းသူပြေးတယ်။ အတိုက် ခံရသူနဲ့မိသားစုမှာ ဘ၀ပျက်ကြတယ်။ အစိုးရကလည်း ဘာမှမဆိုင်တော့ အ လျော်မပေးဘဲ ဥပဒေရေးရာကိုပဲဆောင် ရွက်ပြီး မောင်းသူကိုထောင်ထဲပို့တယ်။ တကယ်တိုးတက်တဲ့ တိုင်းပြည်တွေမှာကျ တော့ အာမခံမရှိဘဲ ကားမောင်းလို့မရဘူး။ ကားကားချင်းပဲတိုက်တိုက် လူတွေထိခိုက် နာကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် တိုက်သူ၊ အတိုက်ခံ ရသူ (ကားအချင်းချင်းဆိုရင်) အာမခံ ကုမ္ပဏီတွေက ရဲရဲ့မှတ်တမ်းပေါ်မူတည် ပြီး အလျော်ပေးရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မောင်း သူက မူးပြီးမောင်းတာတို့၊ တားမြစ်ထားတဲ့ အချိန် မမောင်းသင့်တဲ့အချိန် မောင်းတာ တို့ဆိုရင်တော့ တရားရုံးရောက်ပါတယ်။ ဒီတော့ နစ်နာသူဟာ အတိုင်းအတာတစ်ခု ထိနစ်နာပေမယ့် အလျော်ရလို့ မိသားစု ရော ဘ၀မပျက်တော့ဘူး။
ကျွန်တော်တစ်ခါကပြောခဲ့သလို အ မေရိကန်နိုင်ငံမှာက ဥပဒေတွေနဲ့ ''ချုပ် နည်း''မျိုးစုံရှိပါတယ်။ ဥပမာ ကျန်းမာရေးလည်း အာမခံ၊ ဆရာဝန်မှာလည်းအာမခံ၊ အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းမှာလည်း အာမ ခံ၊ အိမ်ပြင် ရေပိုက်ပြင် မီးကြိုးလဲလည်း အာမခံ စသည်ဖြင့် မကျွမ်းကျင်ဘဲလုပ်ရင် ပေါ့ဆပြီးလုပ်ရင် ပျက်စီးနစ်နာနိုင်တဲ့အ ရာအားလုံးမှာ အာမခံကို ဥပဒေနဲ့ မဝယ်မ နေရဝယ်ကြရပါတယ်။ အာမခံရှိတယ်ဆို ပြီး ပေါက်ကရလုပ်ရင်လည်း သူ့ရဲ့နောက် နှစ်အာမခံကြေး မတရားမြင့်သွားမှာစိုးလို့၊ လိုင်စင်ပြုတ်သွားမှာစိုးလို့ ပိုပြီးတောင် ဂရုစိုက်ကြရတယ်။ ဥပဒေအရ အိမ်တိုင်း လမ်းပေါ်ကကားတိုင်း အာမခံ ရှိကိုရှိရပါ တယ်။ ရေထဲက အပျော်စီး လှေကအစ ဆိုင်ကယ်အဆုံးဝယ်ရတယ်။ အာမခံအ ကြောင်းဟာ အရမ်းကျယ်ပြောတော့ ကျွန် တော်အများကြီးပြောရင် နားရှုပ်သွားမှာ လည်းစိုးပါတယ်။ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က တော့ အဆင့်တိုင်းအဆင့်တိုင်းမှာ တာဝန် ခံမှု တာဝန်ယူမှုအပြင် တစ်ခုခုဖြစ်တိုင်း လက်ညိုးထိုးခြင်းလျော့နည်းပြီး တကယ် နစ်နာသူတွေကို အကျိုးခံစားနိုင်အောင် တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချုပ်ထားတာက အာမခံ စနစ်ပါ။
ကျွန်တော်လည်း မြန်မာပြည်မှာမွေး ပြီး မြန်မာပြည်မှာပဲကြီးတော့ တော်ရုံဆို အာမခံမဝယ်ချင်ပါဘူး။ သပ်သပ်အပိုကုန် ငွေလို့ထင်တာလည်းပါတာပေါ့။ တစ်ခါ ကျတော့ အာမခံရဲ့အကျိုးတစ်ခုကိုတော့ ခံစားရပါတယ်။ ကျွန်တော့အိမ်မှာ ဝယ်က တည်းက ပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ တစ် အိမ်လုံးက စွန့်ပစ်အညစ်အကြေးထွက် တဲ့ မိလ္လာပိုက်ဟာ မြေအောက် ၁၂ ပေ အနက်မှာရှိပြီး ဘေးအိမ်က သစ်ပင်ကြီး တွေ အမြစ်ထိုးတဲ့အခါကျတော့ ဒီပိုက်က ပျက်စီးသွားပါတယ်။ အိမ်ဝယ်ပြီး သုံးနှစ်ကျော်လောက်တုန်းက ပြည်နယ်ဥပဒေ တစ်ခုထွက်ပါတယ်။ အိမ်ကနေ လမ်း အောက်ကိုဆက်ထားတဲ့ ပိုက်တွေပျက် ရင် ပြင်ရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်များလွန်းလို့ အာမခံဝယ်လို့ရပါပြီတဲ့။ မဝယ်လည်း ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ ကျွန်တော်က တော့ တစ်လ ၁၃ ဒေါ်လာနဲ့ ချက်ချင်းဝယ် လိုက်ပါတယ်။ အဲလိုနဲ့ ဝယ်ပြီးသုံးလအ ကြာကျတော့ ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲ ပိုက် ကပိတ်ရော။ ဖုန်းဆက်လိုက်တော့ တစ် နာရီအတွင်း ပညာရှင်တွေလာကြည့်ပါ တယ်။ နောက်တစ်ရက်ကျတော့ ဘက်ဟိုး ကားကြီးတွေနဲ့ပါရောက်ချလာပြီး တူးလိုက် ပြင်လိုက်ကြတာ ညနေလည်းရောက်ရော ကွန်ကရစ်ပါ ပြန်ဖို့ပြီးသားဖြစ်သွားပါ တယ်။ ဒါနဲ့ အာမခံမရှိရင် ဘယ်လောက် ကုန်မှာလဲလို့မေးကြည့်တော့ အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၁၅ယ၀၀၀ ကုန်မယ်တဲ့။ ကျွန်တော် ကတော့ ဒေါ်လာ ၄၀ တောင် မကုန်သေး ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် အရေးအကြောင်းဆို ရင် အာမခံရှိထားတာလည်း အင်မတန် ကောင်းပါတယ်။
တကယ်တော့ အာမခံလုပ်ငန်းဟာ “အာမခံကုမ္ပဏီရဲ့ဖောက်သည်တွေ ကျန်း မာပါစေ၊ အောင်မြင်ပါစေ၊ သွားလမ်းသာ လို့ လာလမ်းလည်းဖြောင့်ပါစေ၊ ခလုတ်မ ထိ ဆူးမငြိကြပါစေနဲ့''လို့ တစ်ချိန်လုံး ဆု တောင်းနေရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လို့ ကျွန်တော် အထက်ကပြောခဲ့သလို ''ကုသိုလ်လည်းရ ဝမ်းလည်းဝ'' တဲ့လုပ်ငန်းပါ။ မြန်မာပြည် မှာလည်း မကြာခင်ကာလမှာ လွှတ်တော် က ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပြီး၊ ခိုင်မာမှန်ကန်တဲ့ အာမခံလုပ်ငန်းတွေလည်း အပြိုင်အဆိုင် ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။
အမေရိကန်ဘဏ်စနစ် ဘယ်လို သွားသလဲ အကြမ်းဖျင်းလေ့လာကြည့်ရင် သူတို့မှာ အသေးစိတ်ဥပဒေတွေရှိပါ တယ်။ နောက်ပြီး ဗဟိုဘဏ်က ဘဏ် အားလုံးကို စက္ကန့်မလပ်စောင့်ကြည့်တယ်။ ဥပဒေတွေဆိုရင် အပ်ငွေရဲ့ ၉၀ ရာခိုင် နှုန်းထက်ပိုပြီး ပြန်ချေးလို့မရဘူး။ နောက် ပြီး ဗဟိုဘဏ်မှာ စုစုပေါင်းရှိငွေရဲ့ ရာခိုင် နှုန်းတစ်ခုကို အာမခံမဝယ်မနေရ ဝယ် ထားရပါတယ်။ ဒါမှ ဘဏ်တစ်ခုခုဖြစ်ရင် အစိုးရက ဝင်ကယ်ပေးတာပါ။ (အသေး စိတ်ဥပဒေတွေတော့ မပြောလိုတော့ပါ ဘူး။) ဒီတော့ ဘဏ်တွေကလည်း သူတို့ ဆီလာအပ်ထားတဲ့ငွေတွေကို အကျိုးအ ရှိဆုံးဖြစ်အောင် ကြံဆောင်ကြပါတယ်။ ဥပမာ အိမ်ဝယ်တဲ့ loan (mortgage) ဆိုရင်လည်း ဥပဒေနဲ့အညီ ဝန်ဆောင်မှု တွေယူပြီးရင် ဒီ loan ကို ဈေးကွက်ထဲမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဝယ်လို့ရအောင် ပြန် ရောင်းတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်က ဒီဘဏ်က ငွေချေးပြီးအိမ်ဝယ်ပေမယ့် တကယ်ပိုင်ဆိုင်နေသူက တစ်ခြားဘဏ်ဖြစ်ချင်ဖြစ် နေတာပါ။ အိမ်ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုတော့မှ ဒီအိမ်ရဲ့ အမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်သူကို ကုမ္ပဏီတစ်ခုက အခကြေးငွေယူပြီးလိုက် ရှာပေးတယ်။ ချေးငွေကျန်တာကိုတော့ ဘဏ်ကိုပြန်ပေးရတာပေါ့။ ဘဏ်ကတစ်ဆင့် ဒီ loan ကို ပိုင်ဆိုင်နေသူကိုပြန်ပေးပြီး စာအုပ်ပိတ်စာရင်းရှင်းလိုက်တာပါ။ ဆိုလို ချင်တာက ဘဏ်တွေထဲမှာရှိတဲ့ငွေတွေ ဟာ အရှိန်နှုန်းမြန်မြန်နဲ့ နေ့စဉ်လည်ပတ် နေကြရတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် သူတို့အ ကျိုးအမြတ်နည်းသွားပါတယ်။ တကယ် ဆိုရင် စုထားတဲ့ငွေတွေကို ကြိုက်တဲ့ ဘဏ်ကသာထုတ်၊ ဘဏ်တွေမှာငွေ ပြတ်သွားမှာပါပဲ။ ဘဏ်တွေရဲ့ အဓိက ဝင်ငွေက စုငွေတွေအတွက် အတိုးနည်း နည်းပဲပေးပြီး ငွေလိုတဲ့သူတွေကို ပိုမိုတဲ့ အတိုးနှုန်းတစ်ခုနဲ့ ပြန်ချေးတာ၊ အိမ်ဝယ် ကားဝယ်တွေ၊ ရုတ်တရက်ငွေလိုမှုတွေကို အတိုးအပြင် ဝန်ဆောင်ခယူပြီး ဆောင် ရွက်ပေးတာ၊ လုပ်ငန်းရှင်တွေ လုပ်ငန်း လည်ပတ်ရလွယ်ကူအောင် ဝန်ဆောင်မှု တွေပေးတာ၊ credit card နဲ့ငွေယူလို့ရတဲ့စနစ်လိုမျိုးတွေကို ဝန်ဆောင်ခယူပြီး လုပ်ပေးတာတွေအပြင် တခြားအကျိုးအ မြတ်ရှိမယ့် လုပ်ငန်းတွေလုပ်ရင်းကနေ ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။
အထက်မှာပြောသလို ဘဏ်တွေရဲ့ အလုပ်ဟာ ကိုယ့်ငွေတွေကိုမီးခံသေတ္တာနဲ့ သိမ်းပေးထားမယ့် လုပ်ငန်းတွေမဟုတ်ပါ ဘူး။ ဒီတော့ ကိုယ့်အပ်ထားတဲ့ ငွေကိုပြန် ထုတ်ကြရင် သူ့မှာလက်ဗလာပဲကျန်ပြီးတော့ ဒေဝါလီခံရသလိုမျိုး ဘယ်ဘဏ်မဆိုဖြစ် နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ပြန်ရင်းနှီးထားတာတွေ က ပြန်ရောင်းရတာလွယ်မယ့် (liquid asset) ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်သလို (non-liquid asset) တွေမှာ ပြန်ရင်းထားတာလည်းဖြစ် နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အရေးကြီးတာက ဗဟို ဘဏ်ကနေ စနစ်တကျကြေညာပေး တဲ့အပြင် လိုအပ်ရင်ဝင်ကူညီမယ်ဆိုတဲ့ အာ မခံပေးတာမျိုးတွေ လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရေရှည်အတွက်ဆိုရင်တော့ ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်တွေက အစိုးရကို အာမခံကြေးပေး သွင်းထားသင့်ပါတယ်။ နောက်ပြီးဗဟို ဘဏ်အနေနဲ့ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေရဲ့ အချိန် နဲ့အမျှပြောင်းလဲနေတာကို စောင့်ကြည့် ထိန်းကျောင်းနိုင်တဲ့စနစ် ရှိဖို့လိုအပ်ပါ တယ်။
ကြားဖူးတဲ့စကားလေးတစ်ခုပါ။ ''လက်သမားဆရာသေတော့ သူမိန်းမက အေး အေးဆေးဆေး ပြုံးပြုံးရယ်ရယ်ပဲ။ ပန်းရန် ဆရာသေတော့ သူမိန်းမကအရမ်းငို တယ်'' တဲ့။ ဖြစ်စဉ်ကတော့ လက်သမား ဆရာတစ်ယောက်မှာ ပစ္စည်းကိရိယာတွေ များတယ်လေ။ သူသေတော့ သူမိန်းမမှာ ရောင်းစားစရာတွေ များစွာကျန်ခဲ့တော့ အေးဆေးပဲ။ ပန်းရန်ဆရာကတော့ ဒယ်အိုးရယ် သန်လျက်ရယ်၊ ချိန်သီးရယ်လောက်ပဲကျန်တော့ မိန်းမကငိုတာပေါ့။ ဒီလိုပဲ သာမန်အမေရိကန်တစ်ယောက်သေရင် သူ့ မိန်းမက ငိုရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အများအားဖြင့် သေချိန်မှာကျန်ခဲ့တာက အကြွေးတွေကြောင့်မို့ပါ။ ရှိသမျှကို သိပ်စုဆောင်းထားလေ့မရှိဘဲ အသက်ကြီးလာရင် အစိုးရကပေးတဲ့ ပင်စင်လေးနဲ့ပဲနေ ကြတာပါ။ မြန်မာတစ်ယောက်သေပြီဆိုရင်တော့ ကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေက ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လေးငိုပြီးတာနဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့ရွှေ ငွေဥစ္စာတွေကိုပဲ မျက်စောင်းထိုးကြတာလေ။
မြန်မာပြည်မှာ ဘာလို့ ဒီလိုဖြစ်နေရသလဲဆိုတော့ မြန်မာတွေက ရွှေငွေဥစ္စာ စုဆောင်းဝတ်ဆင်တာ ဝါသနာပါလွန်းတယ်။ အရင်ခေတ်အခြေအနေအရ ပေါ့ ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သိမ်းဆည်းနိုင်တာလည်းပါ တာပေါ့။ မြန်မာနဲ့အပြိုင်ကတော့ အိန္ဒိယပါ။ ဘယ်လိုတွေတောင်စုလဲဆိုရင် ရွှေငွေတွေချည်း စွတ်မစုကြဖို့ အစိုးရကိုယ်တိုင် တိုက်တွန်းယူရတဲ့အဆင့်ထိ ဖြစ်လာတယ်။ ရွှေစုထားကြတဲ့လူတွေအနေနဲ့ ရွှေတွေထုတ်ရောင်းပြီး ငွေအထုတ်အသွင်းလုပ်ကြဖို့။ စီးပွားရေးမှာ လည်ပတ်လွယ်တဲ့ငွေအဖြစ်ပြောင်းပြီး ဘဏ်တွေမှာငွေစုကြဖို့ ဆော်ဩယူရတယ်။ အဲဒီလို ဆော်ဩမှပဲ ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်လာပြီး စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းတွေကို ငွေပြန်ချေးနိုင်ကြတော့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးလာတယ်။ ရွှေတွေမှာ ငွေအမြုပ်ခံတာ၊ မတန်တဆဈေးနဲ့ အိမ် ခြံတွေဝယ်ပြီး နေထိုင်ကြတာတွေဟာ အိမ်ငှားနေတာထက် ဈေးပိုကြီးတယ်ဆို တာ လူအများက သဘောပေါက်လာကြ တော့ ၂၁ ရာစုမှာ လူတွေဟာ ရွှေငွေအတု တွေပဲဝတ်လာပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုကို တခြားနေ ရာမှာ မြှုပ်နှံကြတယ်။ အမေရိကန်မှာဆို ရင် အိမ်တွေကိုလည်း အပိုင်ငွေအကြေ ချေပြီးနေတာထက် ဘဏ်ကနေ ၈၀ ရာ ခိုင်နှုန်းလောက်ချေးပြီး နှစ် ၃၀ လောက် ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်ဆပ်ကြတာမျိုးက ပုံ မှန်ဖြစ်လာတယ်။ မြန်မာပြည်က ပိုင်ဆိုင် မှုအတော်များများကတော့ ငွေအိပ်နေ တယ်။ ပြောရရင် အဲဒီလိုမလည်ပတ်တော့ လည်း ငွေကျပ်နေကြတာပေါ့ဗျာ။
မြန်မာပြည်မှာ ငွေကြေးရောင်းဝယ်တဲ့ဈေးကွက်ကို အမြန်အကောင်အထည် ဖော်ရမယ့်အစား လူအများလိုက်မမီသေး တဲ့ စတော့ဈေးကွက်ကို အရင်စလုပ်တာ အောင်မြင်မှုကို နှေးကွေးစေတယ်လို့ထင် ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာက စတော့ဈေး ကွက်ဆိုတာကြီးကို နားလည်းလည်၊ ကစား နိုင်တဲ့ ငွေလည်းရှိတဲ့လူက အင်မတန် နည်းပါးလှပါတယ်။ လူအများနားလည် တာက ငွေတိုးတွက်ခြင်း၊ ရောင်းခြင်း ဝယ် ခြင်းပါ။ ဒါကတော့ တွက်ရခန့်မှန်းရလွယ် ပြီး အရှုံးလည်းမရှိသလောက်ပဲဆိုတော့ လူအများစိတ်ဝင်စားနိုင်ပါတယ်။ တိုင်း ပြည်ကငွေတွေလည်း လည်ပတ်မှုပိုမြန် လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ငွေကြေးဆိုတဲ့အရာက လူသားတိုင်းရဲ့ အဓိကဥစ္စာဓနဖြစ်သလို သည်းခြေ ကြိုက်အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်သုံးစွဲဖို့လိုအပ်တဲ့ပမာဏကလွဲလို့ ငွေ ပမာဏအများအပြားကို ငွေသားအဖြစ်နဲ့ လက်ဝယ်ကိုင်ဆောင်ထားတယ်ဆိုတာ ဟာ စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့သူအပြင် သာမန်ငွေကြေးချမ်းသာသူတွေအတွက်လည်း နစ်နာလှပါတယ်။ ဒါတင်မက တိုင်းပြည် တိုးတက်ရေးအတွက် ငွေကြေးလည်ပတ်မှု၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းကိုလည်း နှေး ကွေးစေပါတယ်။ ငွေကြေးပမာဏများများဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က ပျော်ပွဲ စားခရီးတွေမှာဆော့ဖူးတဲ့ ပါဆယ်ဂိမ်းလို လက်ဝယ်ပိုက်မိသူက ခံရစမြဲပဲ။ ဒီတော့ ငွေကို ကိုယ့်လက်ထဲမှာ ကြာကြာမထားဘဲ အကျိုးရှိရာမှာ ပြန်လည်လည်ပတ်စေခြင်း အားဖြင့် လုပ်ငန်းမျိုးစုံ တိုးတက်လာမှာ ဖြစ်ပြီး ငွေတိုးနှုန်းကိုလည်း လျှော့ချနိုင်မှာ ပါ။ လက်ရှိမြန်မာပြည်လုပ်ငန်းကြီးသမား တွေအသာထားလို့ ထိုးဖောက်တီထွင်မယ့် လုပ်ငန်းသေးလေးတွေအတွက် ဒီငွေတိုး နှုန်းဟာ အဓိကအတားအဆီးသဖွယ် ဖြစ်နေပါတယ်။ ငွေတိုးနှုန်းကိုတွက်တဲ့နေ ရာမှာ ယနေ့ငွေတန်ဖိုးနဲ့ အနာဂတ်ငွေ တန်ဖိုးကို နှိုင်းယှဉ်ပြီးတွက်ချက်လေ့ရှိပါတယ်။ အနာဂတ်ငွေကိုတွက်ရာမှာ ငွေ ကြေးဖောင်းပွမှုကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်း စားရပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဒီငွေကို တခြားမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုရင် ရမယ့် အကျိုးအမြတ်ကိုလည်း ငွေရှင်ကထည့် တွက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ခုက ဘယ် သူ့ကိုချေးမှာလဲ၊ ဘာလုပ်ငန်းလဲ၊ ဘယ် လောက်စွန့်စားရမှာလဲဆိုတာကို ထည့် တွက်ကြရပါတယ်။ ပထမအချက်ဖြစ်တဲ့ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဆိုတာကတော့ ဖြစ်ရ ခြင်းအကြောင်း အများကြီးရှိပါတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုအခြေ အနေ၊ နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ကုန် ဈေးနှုန်း၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး၊ ဗဟိုဘဏ် ရဲ့အတိုးနှုန်းစတဲ့ အချက်အလက်တွေအ ပေါ်မူတည်တာဖြစ်ပြီး မည်သူတစ်ဦးတစ် ယောက်ကမှ ခြယ်လှယ်လို့မရပါဘူး။ ဒါ ပေမဲ့ အခြေခံပျမ်းမျှတွက်နည်းတော့ ရှိပါ တယ်။ နောက်တစ်ခု ဒုတိယအချက်ဖြစ်တဲ့ ဒီငွေပမာဏကို မချေးဘဲ တခြားမှာရင်းနှီး ရင်ရမယ့် အကျိုးအမြတ်ဆိုတာကလည်း မိမိအသေချာဆုံးရမယ့် အကျိုးအမြတ်ကို ထည့်ပေါင်းတာပါ။ နောက်ဆုံးအချက်ဖြစ် တဲ့ ဘယ်လောက်စွန့်စားရမလဲဆိုတဲ့အ ချက်ကတော့ မြန်မာပြည်ငွေတိုးကြီးမြင့်ရ ခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုလို့မြင် ပါတယ်။
ကျွန်တော် အကျယ်ရှင်းပြပါရစေ။ ကမ္ဘာငွေကြေးဈေးကွက်မှာ ဝင်ကစားသူ တိုင်း Risk Management (စွန့်စားရမှု ကိုတွက်ချက်ခြင်း)ကိုလေ့လာရပြီး ဒီအ ပိုင်းကျွမ်းကျင်သူကို လစာအများကြီးပေး ခန့်ထားတာ ဒါမှမဟုတ် အဆိုပါတွက်ချက် မှုကို အဓိကလုပ်ကိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီကို အခ ကြေးငွေပေးပြီး မိမိရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်တဲ့ ကုမ္ပဏီစတော့ရှယ်ယာတွေကို စာရင်းပြရ ပါတယ်။ အများပိုင်ကုမ္ပဏီဆိုရင် ပို တောင်ဆိုးပါတယ်။ မိမိရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့နေရာတွေဟာ ဘယ်ပမာဏထက်မ ကျော်ရဘူး (Risk Index) ဆိုပြီး သတ် မှတ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ မိမိရင်းနှီး ထားတာတွေက မသေချာတဲ့လုပ်ငန်းတွေ များနေရင် သေချာတဲ့အစိုးရငွေချေးစာ ရွက်တွေဝယ်ပြီး စွန့်စားရမှုကိုလျှော့ချရ ပါတယ်။ ဒါကတော့ ကမ္ဘာ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဈေးကွက်ပေါ့။ မြန်မာပြည်မှာက အခုလို ဈေးကွက်မရှိတော့ မိမိချေးထားတဲ့ငွေ ကြေးတွေအပေါ် စွန့်စားမှုကိုလျှော့ချရတာ အင်မတန်ခက်ပါတယ်။ ဥပမာ ဆောက် လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပဲ ဘဏ်တစ်ခုက ငွေကြေးအမြောက်အမြားချေးမိတယ်ဆိုပါစို့။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး ထိခိုက်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင် ဘဏ်လည်း ပြဿနာတက်ပြီလေ။
တကယ်တော့ စွန့်စားရမှုကိုလျှော့ချ နိုင်ဖို့ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ပြောပြောနေတဲ့ National Database လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှပဲ တကယ်ယုံကြည်ရမယ့်သူကို အ တတ်နိုင်ဆုံးငွေပမာဏများများချေး၊ များ များချေးတော့ ငွေပိုလည်ပတ်၊ ငွေပိုလည် ပတ်တော့ ငွေတိုးကိုလျှော့ချပေးနိုင်မှာပါ။ တကယ်တော့ ငွေကြေးလျင်မြန်စွာစီးဆင်း နိုင်ခြင်းဟာ တိုင်းပြည် ဘက်စုံ၊ ထောင့်စုံ ကတိုးတက်ဖို့အတွက် အသက်သွေးကြော သဖွယ် အရေးကြီးပါတယ်။ ငွေတွေကို အိမ်ခန်းထဲမှာ၊ ဘဏ်တွေထဲမှာ မှိုတက် အောင်ထားခြင်းဟာ မိမိစီးပွားရေးထိခိုက် နိုင်သလို တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကိုပါ ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ဘဏ်တွေရဲ့ နည်း ပညာအားနည်းမှုကြောင့် ငွေတိုးကြီးမြင့်ရ ခြင်းလို့ထင်ပါတယ်။ ငွေကြေးစီးဆင်းမှု ပိုမိုမြန်ဆန်ဖို့ကို ဘဏ်တွေကလုပ်ပေး သင့်ပါပြီ။ အွန်လိုင်းစနစ်ကို စနစ်တကျ လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်ပေး နိုင်ရင် ငွေစီးဆင်းမှုမြန်ဆန်လာမှာဖြစ်ပါ တယ်။ မကြာတော့တဲ့အချိန်မှာတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ တွင်တွင် ကျယ်ကျယ်သုံးနေတဲ့ ဘဏ်ကတ်စနစ်၊ အွန်လိုင်းငွေ ပြောင်းငွေလွှဲစနစ်တွေ ထိ ထိရောက်ရောက်သုံးလာလိမ့်မယ်လို့ ယူ ဆပါတယ်။ (ဘဏ်ကတ်စနစ်ကို စတင် တီထွင်ခဲ့တာ ၁၉၄၆ ကဖြစ်ပြီး ငွေအကြွေး ဝယ်ကတ်ကို စတင်အသုံးပြုခဲ့တာ ၁၉၅၈ ကပါ)
လူအတော်များများဟာ မြန်မာပြည် ကို အရပ်သားအစိုးရ အုပ်ချုပ်တဲ့ခေတ်မှာ နိုင်ငံတကာက ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ အလုံး အရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်လို့ထင်ခဲ့ကြ ပြီး အိမ်ခြံမြေဈေးတွေကိုတောင် ကြိုတင် ပြီး ဈေးကစားခဲ့ကြတယ်။ တကယ်တော့ ထင်သလောက်မဖြစ်လာပါဘူး။ နောက် တစ်ခုက နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုတာ သူတို့ဆီက ငွေထုပ်ပိုက်လာပြီး မြန်မာ ပြည်သူတွေကို လာလှူပေးတာမဟုတ်ဘူး လေ။ အနီးစပ်ဆုံးဥပမာပေးရရင် မသာ အိမ်တွေကိုလှည့်ပြီး ဖဲလိုက်ရိုက် ကြွေထိုး ကစားနေတဲ့ လောင်းကစားသမားတွေနဲ့ပဲ တူပါတယ်။ သူတို့အတွက်ကတော့ ဘယ် မှာမသာအိမ်ရှိသလဲ၊ ဘယ်သူတွေကစား နေသလဲ၊ ကြေးက ဘယ်လောက်မြင့်မှာလဲ၊ ကစားလို့ကောင်းတဲ့ မိုးလုံလေလုံအိမ်ရော ဟုတ်ရဲ့လား စသည်ဖြင့်တွက်ချက်ပြီး လာ ကစားကြတာပါ။ မသာအိမ်ရှင်ကတော့ ညဘက်အစောင့်ကလေးရ၊ အလှူငွေလေး ဘာလေးရတော့ ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် အ ကျိုးရှိတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ ဒါတွေရဲ့အ နောက်က အကြောင်းတစ်ခုကို စဉ်းစား ကြည့်ရင်တော့ မိတ်ဆွေတို့ ရင်လေးမိပြီး မသာအိမ်မှန်သမျှကို လှည့်ပတ်ကစားနေ တဲ့ ဖဲသမားကြီးတွေကို လက်ယပ်ခေါ်ချင်မှ ခေါ်မှာပါ။ အဲဒီအချက်က မရိုက်တတ်ရိုက် တတ်နဲ့ ဝင်ကစားမယ့် မသာအိမ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ ဆွေမျိုးတွေ၊ အိမ်နီးချင်းတွေ၊ မိတ်ဆွေ တွေ ပရောဖက်ရှင်နယ်တွေနဲ့ကစားရင် ရှုံးသွားဖို့များမယ့်အချက်ပါပဲ။ ဒီလိုဥပမာနဲ့ ပဲ နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို လေ့ လာကြည့်ရအောင်ပါ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒီမိုကရေစီစနစ် အရင်း ရှင်စီးပွားရေးစနစ် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၅၀ အတွင်းမှာ တရှိန်ထိုးတိုးတက်အောင်မြင် လာပြီး ကွန်မြူနစ်စနစ်ကျဆုံးလာချိန်မှာ နိုင်ငံတကာကို စီးပွားရေးလက်နက်နဲ့လွှမ်း မိုးဖို့ ကော်ပိုရေးရှင်းတွေများစွာပေါ်ပေါက် လာပါတယ်။ အများဆုံးကတော့ အမေရိ ကန်နိုင်ငံကိုဗဟိုပြုပြီးတော့ပါ။ ဒီနေရာမှာ ဘာဖြစ်လို့ တချို့ကော်ပိုရေးရှင်းတွေက သူတို့နိုင်ငံမှာလည်းရှိ အမေရိကန်မှာ လည်း ဗဟိုလာပြုသလဲဆိုတော့ အမေရိ ကန်ရဲ့စစ်အင်အားနဲ့ နိုင်ငံတကာအပေါ် ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်မှုကို အခွင့်အရေးအရယူဖို့ ပါ။ ဥပမာ တိုယိုတာ၊ ဆမ်ဆောင်း စတာ တွေက ကိုရီးယား ဂျပန် ပိုင်တာဖြစ်ပေမယ့် အမေရိကန်မှာ လုပ်ငန်းခွဲကြီးကြီးတွေလာ ဖွင့်ပြီး အမေရိကန်အကြိုက် တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုအပြည့် လာလုပ်ပေးတာဟာ အမေရိကန်ရဲ့ ကြီးမားတဲ့ဈေးကွက်ကိုရ ယူဖို့ရယ်၊ အမေရိကန်နဲ့ မိတ်ဆွေရင်းချာ ဖြစ်ဖို့ရယ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုမဆို လောင်းကစားကို တရားဝင်ပေး လုပ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ အမေရိကန်က တော့ သူတို့တိုင်းပြည်ကို မသာအိမ်လိုမ လုပ်ထားပဲ စနစ်တကျ လောင်းကစားရုံပုံစံ မျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ထားတော့ တော်ရုံက စားသမားတွေလည်း သူနဲ့တွေ့ရင် ရှုံးကြ တာပဲလေ။ သူတို့မှာ သူတို့အတွက်သာ မယ့် ဥပဒေတွေ၊ ကစားပုံကစားနည်းတွေ အပြည့်ရှိတာကိုး။
မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကို ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင် ခိုင်မာတဲ့ ဥပဒေတွေ ရှိမနေသေးပါဘူး။ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက ဥပဒေကြမ်းတွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ပိုက်စိတ်တိုက်ဥပဒေတွေကို ပြောတာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဥပဒေပြုလွှတ်တော် အမတ်အတော်များများဟာ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေတွေနဲ့ အနည်းနဲ့အများတော့ အလှမ်းဝေးနေပါသေးတယ်။ ဒီတော့ သိသူတချို့က အဆိုတင်သွင်းတယ်ထားဦး၊ အများစုက လိုက်မမီဘဲ အဆိုတော်တော် များများ အောင်မြင်မှုနည်းပြီး ကောင်းမွန် တဲ့ဥပဒေတွေ ထွက်လာဖို့မလွယ်သေးပါ ဘူး။ နောက်တစ်ခုက ပြည်တွင်းလုပ်ငန်း ရှင်အများစုကလည်း နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အောင် စီးပွားရေးလုပ်တတ်တာ နည်း လွန်းပါတယ်။ ဥပမာ IKEA လို ပရိဘော ဂဆိုင်ကြီးတွေ မြန်မာပြည်ဝင်လာရင် မြန် မာပြည်က တစ်နိုင်တစ်ပိုင်လုပ်နေတဲ့ ပရိ ဘောဂဆိုင်တွေ အသက်ရှင်ဖို့မလွယ်ပါ ဘူး။ Walmart လို ပစ္စည်းစုံကို ဈေးပေါ ပေါနဲ့ရောင်းချပေးမယ့် ဆိုင်ကြီးတွေပေါ် လာရင် ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကျလာမှာဖြစ်ပေ မယ့် ရပ်ကွက်ထဲကကုန်စုံဆိုင်တွေ ပြုတ် သွားမှာကတော့ အသေအချာပါ။ အိမ်သုံး ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းဆိုင်ဖြစ်တဲ့ Home Depot လို လုပ်ငန်းမျိုးတွေရောက်လာရင် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း ဆိုင်တွေ တိမ်ကောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အချုပ်ဆိုရရင်တော့ ပရမ်းပတာအ ခြေအနေနဲ့ မသာအိမ်ဖဲဝိုင်းလိုဖြစ်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဥပဒေတွေနဲ့ အသေအချာကာကွယ်ထားဖို့ အလွန်လို အပ်သလို ပိုက်ဆံရှိတဲ့ မိမိဆွေမျိုးမိတ် ဆွေနဲ့တူတဲ့ ပြည်တွင်းစီးပွားရေးသမား တွေကိုလည်း စီးပွားရေးအမှန်တကယ် လုပ်တတ်အောင် ပြင်ဆင်ပေးထားဖို့လိုပါ တယ်။ အရင်ခေတ်က လယ်သိမ်းယာ သိမ်းအရှုပ်တော်ပုံခေတ်ပြီးစမှာ လယ်သ မားအတော်များများလည်း လယ်ပျောက် ယာပျောက်ဖြစ်နေချိန်၊ အစိုးရကလည်း ပြန်ပေးဖို့ ဖိအားပေးတာ သိပ်မအောင်မြင် သေးတဲ့အချိန်မျိုးနဲ့တူတဲ့ အခုလိုအချိန် မှာ ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာလေးတစ်ခုကို တင်ပြပါရစေ။ အသိမ်းခံလယ်ယာပိုင်ရှင် တွေကို ရှယ်ယာအနေနဲ့ပေးပြီး စိုက်ပျိုး ရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စက်မှုနဲ့ကုန်ချောထုတ် ရေးတွေမှာ ပါဝင်ခွင့်ပေးရင် ဆင်းရဲသား လူတန်းစားလည်း အလုပ်တွေရပြီးပျော်၊ လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်း သူတို့ကိုသစ္စာစောင့် သိတဲ့လုပ်အားတွေ ရလို့ပျော်၊ ငွေကြေးရှိ အမြော်အမြင်ရှိတဲ့ ခရိုနီသူဌေးတွေဦး ဆောင်တော့ နည်းပညာနဲ့ အဆက်အ သွယ်လည်းမပူရ၊ အခြေခံကုန်ဈေးနှုန်း လည်းအလွန်ကျပြီး ပြည်တွင်းတင်သာမ က ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နိုင်တဲ့ ကုန် ပစ္စည်းတွေများစွာပေါ်ထွန်းပြီး မြန်မာပြည် ဟာ အရှေ့တောင်အာရှမှာ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ များ အလုအယက်လာရောက်ချင်တဲ့ တိုင်း ပြည်တစ်ပြည်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိတာလေးပါပဲ။
ယခငျအပတျမှ အဆကျ ...
မွနျမာပွညျမှာ ''ကုသိုလျလညျးရ အ ကြိုးအမွတျလညျးမြား''တဲ့ အာမခံလုပျ ငနျးတှေ သိပျခတျေမစားသေးတာဟာ ပွညျသူတှကေလညျး စိတျဝငျစားမှုနညျး နတောကွောငျ့အပွငျ အာမခံလုပျငနျးမြိုး စုံလညျး အပွိုငျအဆိုငျမပျေါပေါကျသေး တာကွောငျ့လို့ထငျပါတယျ။ နောကျပွီး ဥပဒပွေုလှတျတျောအနနေဲ့ စီးပှားရေး လုပျငနျးတှမှော လိုကျနာရမယျ့ဥပဒတှေေ ခမြပေးသေးတာကွောငျ့လညျး ဖွဈပါ တယျ။ မွနျမာပွညျမှာ ''အာမခံလုပျငနျး'' လို့ပွောလိုကျရငျ လူအမြားက မီးအာမခံ၊ သဘာဝဘေးဒဏျအာမခံတှပေဲ စိတျထဲ မှာ ပွေးမွငျလရှေိ့ကွတယျ။ တကယျတော့ ''တာဝနျယူမှု တာဝနျခံမှု''ကို အဓိကကြား ကနျပေးတာ အာမခံလုပျငနျးပါ။ ဒီနရော မှာ ဥပမာနဲ့ အနညျးငယျရှငျးပွပါရစေ။ မွနျမာပွညျမှာ ကားတှမေောငျးတယျ။ တိုကျတယျ။ မောငျးသူပွေးတယျ။ အတိုကျ ခံရသူနဲ့မိသားစုမှာ ဘဝပကျြကွတယျ။ အစိုးရကလညျး ဘာမှမဆိုငျတော့ အ လြျောမပေးဘဲ ဥပဒရေေးရာကိုပဲဆောငျ ရှကျပွီး မောငျးသူကိုထောငျထဲပို့တယျ။ တကယျတိုးတကျတဲ့ တိုငျးပွညျတှမှောကြ တော့ အာမခံမရှိဘဲ ကားမောငျးလို့မရဘူး။ ကားကားခငျြးပဲတိုကျတိုကျ လူတှထေိခိုကျ နာကငျြတာပဲဖွဈဖွဈ တိုကျသူ၊ အတိုကျခံ ရသူ (ကားအခငျြးခငျြးဆိုရငျ) အာမခံ ကုမ်ပဏီတှကေ ရဲရဲ့မှတျတမျးပျေါမူတညျ ပွီး အလြျောပေးရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ မောငျး သူက မူးပွီးမောငျးတာတို့၊ တားမွဈထားတဲ့ အခြိနျ မမောငျးသငျ့တဲ့အခြိနျ မောငျးတာ တို့ဆိုရငျတော့ တရားရုံးရောကျပါတယျ။ ဒီတော့ နဈနာသူဟာ အတိုငျးအတာတဈခု ထိနဈနာပမေယျ့ အလြျောရလို့ မိသားစု ရော ဘဝမပကျြတော့ဘူး။
ကြှနျတျောတဈခါကပွောခဲ့သလို အ မရေိကနျနိုငျငံမှာက ဥပဒတှေနေဲ့ ''ခြုပျ နညျး''မြိုးစုံရှိပါတယျ။ ဥပမာ ကနျြးမာရေးလညျး အာမခံ၊ ဆရာဝနျမှာလညျးအာမခံ၊ အရောငျးအဝယျလုပျငနျးမှာလညျး အာမ ခံ၊ အိမျပွငျ ရပေိုကျပွငျ မီးကွိုးလဲလညျး အာမခံ စသညျဖွငျ့ မကြှမျးကငျြဘဲလုပျရငျ ပေါ့ဆပွီးလုပျရငျ ပကျြစီးနဈနာနိုငျတဲ့အ ရာအားလုံးမှာ အာမခံကို ဥပဒနေဲ့ မဝယျမ နရေဝယျကွရပါတယျ။ အာမခံရှိတယျဆို ပွီး ပေါကျကရလုပျရငျလညျး သူ့ရဲ့နောကျ နှဈအာမခံကွေး မတရားမွငျ့သှားမှာစိုးလို့၊ လိုငျစငျပွုတျသှားမှာစိုးလို့ ပိုပွီးတောငျ ဂရုစိုကျကွရတယျ။ ဥပဒအေရ အိမျတိုငျး လမျးပျေါကကားတိုငျး အာမခံ ရှိကိုရှိရပါ တယျ။ ရထေဲက အပြျောစီး လှကေအစ ဆိုငျကယျအဆုံးဝယျရတယျ။ အာမခံအ ကွောငျးဟာ အရမျးကယျြပွောတော့ ကြှနျ တျောအမြားကွီးပွောရငျ နားရှုပျသှားမှာ လညျးစိုးပါတယျ။ အဓိက ရညျရှယျခကျြက တော့ အဆငျ့တိုငျးအဆငျ့တိုငျးမှာ တာဝနျ ခံမှု တာဝနျယူမှုအပွငျ တဈခုခုဖွဈတိုငျး လကျညိုးထိုးခွငျးလြော့နညျးပွီး တကယျ နဈနာသူတှကေို အကြိုးခံစားနိုငျအောငျ တဈခုနဲ့တဈခုခြုပျထားတာက အာမခံ စနဈပါ။
ကြှနျတျောလညျး မွနျမာပွညျမှာမှေး ပွီး မွနျမာပွညျမှာပဲကွီးတော့ တျောရုံဆို အာမခံမဝယျခငျြပါဘူး။ သပျသပျအပိုကုနျ ငှလေို့ထငျတာလညျးပါတာပေါ့။ တဈခါ ကတြော့ အာမခံရဲ့အကြိုးတဈခုကိုတော့ ခံစားရပါတယျ။ ကြှနျတော့အိမျမှာ ဝယျက တညျးက ပွဿနာတဈခုရှိခဲ့တယျ။ တဈ အိမျလုံးက စှနျ့ပဈအညဈအကွေးထှကျ တဲ့ မိလ်လာပိုကျဟာ မွအေောကျ ၁၂ ပေ အနကျမှာရှိပွီး ဘေးအိမျက သဈပငျကွီး တှေ အမွဈထိုးတဲ့အခါကတြော့ ဒီပိုကျက ပကျြစီးသှားပါတယျ။ အိမျဝယျပွီး သုံးနှဈကြျောလောကျတုနျးက ပွညျနယျဥပဒေ တဈခုထှကျပါတယျ။ အိမျကနေ လမျး အောကျကိုဆကျထားတဲ့ ပိုကျတှပေကျြ ရငျ ပွငျရတဲ့ကုနျကစြရိတျမြားလှနျးလို့ အာမခံဝယျလို့ရပါပွီတဲ့။ မဝယျလညျး ရတယျဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ ကြှနျတျောက တော့ တဈလ ၁၃ ဒျေါလာနဲ့ ခကျြခငျြးဝယျ လိုကျပါတယျ။ အဲလိုနဲ့ ဝယျပွီးသုံးလအ ကွာကတြော့ ရှမှေ့ာပွောခဲ့သလိုပဲ ပိုကျ ကပိတျရော။ ဖုနျးဆကျလိုကျတော့ တဈ နာရီအတှငျး ပညာရှငျတှလောကွညျ့ပါ တယျ။ နောကျတဈရကျကတြော့ ဘကျဟိုး ကားကွီးတှနေဲ့ပါရောကျခလြာပွီး တူးလိုကျ ပွငျလိုကျကွတာ ညနလေညျးရောကျရော ကှနျကရဈပါ ပွနျဖို့ပွီးသားဖွဈသှားပါ တယျ။ ဒါနဲ့ အာမခံမရှိရငျ ဘယျလောကျ ကုနျမှာလဲလို့မေးကွညျ့တော့ အနညျးဆုံး ဒျေါလာ ၁၅ယ၀၀၀ ကုနျမယျတဲ့။ ကြှနျတျော ကတော့ ဒျေါလာ ၄၀ တောငျ မကုနျသေး ပါဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ အရေးအကွောငျးဆို ရငျ အာမခံရှိထားတာလညျး အငျမတနျ ကောငျးပါတယျ။
တကယျတော့ အာမခံလုပျငနျးဟာ “အာမခံကုမ်ပဏီရဲ့ဖောကျသညျတှေ ကနျြး မာပါစေ၊ အောငျမွငျပါစေ၊ သှားလမျးသာ လို့ လာလမျးလညျးဖွောငျ့ပါစေ၊ ခလုတျမ ထိ ဆူးမငွိကွပါစနေဲ့''လို့ တဈခြိနျလုံး ဆု တောငျးနရေတဲ့လုပျငနျးဖွဈလို့ ကြှနျတျော အထကျကပွောခဲ့သလို ''ကုသိုလျလညျးရ ဝမျးလညျးဝ'' တဲ့လုပျငနျးပါ။ မွနျမာပွညျ မှာလညျး မကွာခငျကာလမှာ လှတျတျော က ဥပဒတှေပွေဋ်ဌာနျးပွီး၊ ခိုငျမာမှနျကနျတဲ့ အာမခံလုပျငနျးတှလေညျး အပွိုငျအဆိုငျ ပျေါပေါကျလာလိမျ့မယျလို့မြှျောလငျ့မိပါတယျ။
အမရေိကနျဘဏျစနဈ ဘယျလို သှားသလဲ အကွမျးဖငျြးလလေ့ာကွညျ့ရငျ သူတို့မှာ အသေးစိတျဥပဒတှေရှေိပါ တယျ။ နောကျပွီး ဗဟိုဘဏျက ဘဏျ အားလုံးကို စက်ကနျ့မလပျစောငျ့ကွညျ့တယျ။ ဥပဒတှေဆေိုရငျ အပျငှရေဲ့ ၉၀ ရာခိုငျ နှုနျးထကျပိုပွီး ပွနျခြေးလို့မရဘူး။ နောကျ ပွီး ဗဟိုဘဏျမှာ စုစုပေါငျးရှိငှရေဲ့ ရာခိုငျ နှုနျးတဈခုကို အာမခံမဝယျမနရေ ဝယျ ထားရပါတယျ။ ဒါမှ ဘဏျတဈခုခုဖွဈရငျ အစိုးရက ဝငျကယျပေးတာပါ။ (အသေး စိတျဥပဒတှေတေော့ မပွောလိုတော့ပါ ဘူး။) ဒီတော့ ဘဏျတှကေလညျး သူတို့ ဆီလာအပျထားတဲ့ငှတှေကေို အကြိုးအ ရှိဆုံးဖွဈအောငျ ကွံဆောငျကွပါတယျ။ ဥပမာ အိမျဝယျတဲ့ loan (mortgage) ဆိုရငျလညျး ဥပဒနေဲ့အညီ ဝနျဆောငျမှု တှယေူပွီးရငျ ဒီ loan ကို ဈေးကှကျထဲမှာ ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူတှဝေယျလို့ရအောငျ ပွနျ ရောငျးတယျ။ ဒီတော့ ကိုယျက ဒီဘဏျက ငှခြေေးပွီးအိမျဝယျပမေယျ့ တကယျပိုငျဆိုငျနသေူက တဈခွားဘဏျဖွဈခငျြဖွဈ နတောပါ။ အိမျပွနျရောငျးမယျဆိုတော့မှ ဒီအိမျရဲ့ အမှနျတကယျပိုငျဆိုငျသူကို ကုမ်ပဏီတဈခုက အခကွေးငှယေူပွီးလိုကျ ရှာပေးတယျ။ ခြေးငှကေနျြတာကိုတော့ ဘဏျကိုပွနျပေးရတာပေါ့။ ဘဏျကတဈဆငျ့ ဒီ loan ကို ပိုငျဆိုငျနသေူကိုပွနျပေးပွီး စာအုပျပိတျစာရငျးရှငျးလိုကျတာပါ။ ဆိုလို ခငျြတာက ဘဏျတှထေဲမှာရှိတဲ့ငှတှေေ ဟာ အရှိနျနှုနျးမွနျမွနျနဲ့ နစေ့ဉျလညျပတျ နကွေရတယျ။ ဒီလိုမှမဟုတျရငျ သူတို့အ ကြိုးအမွတျနညျးသှားပါတယျ။ တကယျ ဆိုရငျ စုထားတဲ့ငှတှေကေို ကွိုကျတဲ့ ဘဏျကသာထုတျ၊ ဘဏျတှမှောငှေ ပွတျသှားမှာပါပဲ။ ဘဏျတှရေဲ့ အဓိက ဝငျငှကေ စုငှတှေအေတှကျ အတိုးနညျး နညျးပဲပေးပွီး ငှလေိုတဲ့သူတှကေို ပိုမိုတဲ့ အတိုးနှုနျးတဈခုနဲ့ ပွနျခြေးတာ၊ အိမျဝယျ ကားဝယျတှေ၊ ရုတျတရကျငှလေိုမှုတှကေို အတိုးအပွငျ ဝနျဆောငျခယူပွီး ဆောငျ ရှကျပေးတာ၊ လုပျငနျးရှငျတှေ လုပျငနျး လညျပတျရလှယျကူအောငျ ဝနျဆောငျမှု တှပေေးတာ၊ credit card နဲ့ငှယေူလို့ရတဲ့စနဈလိုမြိုးတှကေို ဝနျဆောငျခယူပွီး လုပျပေးတာတှအေပွငျ တခွားအကြိုးအ မွတျရှိမယျ့ လုပျငနျးတှလေုပျရငျးကနေ ရရှိတာဖွဈပါတယျ။
အထကျမှာပွောသလို ဘဏျတှရေဲ့ အလုပျဟာ ကိုယျ့ငှတှေကေိုမီးခံသတ်ေတာနဲ့ သိမျးပေးထားမယျ့ လုပျငနျးတှမေဟုတျပါ ဘူး။ ဒီတော့ ကိုယျ့အပျထားတဲ့ ငှကေိုပွနျ ထုတျကွရငျ သူ့မှာလကျဗလာပဲကနျြပွီးတော့ ဒဝေါလီခံရသလိုမြိုး ဘယျဘဏျမဆိုဖွဈ နိုငျပါတယျ။ သူတို့ပွနျရငျးနှီးထားတာတှေ က ပွနျရောငျးရတာလှယျမယျ့ (liquid asset) ဖွဈခငျြဖွဈနိုငျသလို (non-liquid asset) တှမှော ပွနျရငျးထားတာလညျးဖွဈ နိုငျပါတယျ။ ဒီနရောမှာ အရေးကွီးတာက ဗဟို ဘဏျကနေ စနဈတကကြွညောပေး တဲ့အပွငျ လိုအပျရငျဝငျကူညီမယျဆိုတဲ့ အာ မခံပေးတာမြိုးတှေ လုပျရမှာဖွဈပါတယျ။ ရရှေညျအတှကျဆိုရငျတော့ ပုဂ်ဂလိက ဘဏျတှကေ အစိုးရကို အာမခံကွေးပေး သှငျးထားသငျ့ပါတယျ။ နောကျပွီးဗဟို ဘဏျအနနေဲ့ ပုဂ်ဂလိကဘဏျတှရေဲ့ အခြိနျ နဲ့အမြှပွောငျးလဲနတောကို စောငျ့ကွညျ့ ထိနျးကြောငျးနိုငျတဲ့စနဈ ရှိဖို့လိုအပျပါ တယျ။
ကွားဖူးတဲ့စကားလေးတဈခုပါ။ ''လကျသမားဆရာသတေော့ သူမိနျးမက အေး အေးဆေးဆေး ပွုံးပွုံးရယျရယျပဲ။ ပနျးရနျ ဆရာသတေော့ သူမိနျးမကအရမျးငို တယျ'' တဲ့။ ဖွဈစဉျကတော့ လကျသမား ဆရာတဈယောကျမှာ ပစ်စညျးကိရိယာတှေ မြားတယျလေ။ သူသတေော့ သူမိနျးမမှာ ရောငျးစားစရာတှေ မြားစှာကနျြခဲ့တော့ အေးဆေးပဲ။ ပနျးရနျဆရာကတော့ ဒယျအိုးရယျ သနျလကျြရယျ၊ ခြိနျသီးရယျလောကျပဲကနျြတော့ မိနျးမကငိုတာပေါ့။ ဒီလိုပဲ သာမနျအမရေိကနျတဈယောကျသရေငျ သူ့ မိနျးမက ငိုရတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ အမြားအားဖွငျ့ သခြေိနျမှာကနျြခဲ့တာက အကွှေးတှကွေောငျ့မို့ပါ။ ရှိသမြှကို သိပျစုဆောငျးထားလမေ့ရှိဘဲ အသကျကွီးလာရငျ အစိုးရကပေးတဲ့ ပငျစငျလေးနဲ့ပဲနေ ကွတာပါ။ မွနျမာတဈယောကျသပွေီဆိုရငျတော့ ကနျြခဲ့တဲ့သူတှကေ ဟနျဆောငျပနျဆောငျလေးငိုပွီးတာနဲ့ ကနျြခဲ့တဲ့ရှေ ငှဥေစ်စာတှကေိုပဲ မကျြစောငျးထိုးကွတာလေ။
မွနျမာပွညျမှာ ဘာလို့ ဒီလိုဖွဈနရေသလဲဆိုတော့ မွနျမာတှကေ ရှငှေဥေစ်စာ စုဆောငျးဝတျဆငျတာ ဝါသနာပါလှနျးတယျ။ အရငျခတျေအခွအေနအေရ ပေါ့ ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သိမျးဆညျးနိုငျတာလညျးပါ တာပေါ့။ မွနျမာနဲ့အပွိုငျကတော့ အိန်ဒိယပါ။ ဘယျလိုတှတေောငျစုလဲဆိုရငျ ရှငှေတှေခေညျြး စှတျမစုကွဖို့ အစိုးရကိုယျတိုငျ တိုကျတှနျးယူရတဲ့အဆငျ့ထိ ဖွဈလာတယျ။ ရှစေုထားကွတဲ့လူတှအေနနေဲ့ ရှတှေထေုတျရောငျးပွီး ငှအေထုတျအသှငျးလုပျကွဖို့။ စီးပှားရေးမှာ လညျပတျလှယျတဲ့ငှအေဖွဈပွောငျးပွီး ဘဏျတှမှောငှစေုကွဖို့ ဆျောဩယူရတယျ။ အဲဒီလို ဆျောဩမှပဲ ဘဏျလုပျငနျးတှတေိုးတကျလာပွီး စီးပှား ရေးလုပျငနျးတှကေို ငှပွေနျခြေးနိုငျကွတော့ စီးပှားရေးဖှံ့ဖွိုးလာတယျ။ ရှတှေမှော ငှအေမွုပျခံတာ၊ မတနျတဆဈေးနဲ့ အိမျ ခွံတှဝေယျပွီး နထေိုငျကွတာတှဟော အိမျငှားနတောထကျ ဈေးပိုကွီးတယျဆို တာ လူအမြားက သဘောပေါကျလာကွ တော့ ၂၁ ရာစုမှာ လူတှဟော ရှငှေအေတု တှပေဲဝတျလာပွီး ပိုငျဆိုငျမှုကို တခွားနေ ရာမှာ မွှုပျနှံကွတယျ။ အမရေိကနျမှာဆို ရငျ အိမျတှကေိုလညျး အပိုငျငှအေကွေ ခပြွေီးနတောထကျ ဘဏျကနေ ၈၀ ရာ ခိုငျနှုနျးလောကျခြေးပွီး နှဈ ၃၀ လောကျ ဖွညျးဖွညျးခငျြး ပွနျဆပျကွတာမြိုးက ပုံ မှနျဖွဈလာတယျ။ မွနျမာပွညျက ပိုငျဆိုငျ မှုအတျောမြားမြားကတော့ ငှအေိပျနေ တယျ။ ပွောရရငျ အဲဒီလိုမလညျပတျတော့ လညျး ငှကေပျြနကွေတာပေါ့ဗြာ။
မွနျမာပွညျမှာ ငှကွေေးရောငျးဝယျတဲ့ဈေးကှကျကို အမွနျအကောငျအထညျ ဖျောရမယျ့အစား လူအမြားလိုကျမမီသေး တဲ့ စတော့ဈေးကှကျကို အရငျစလုပျတာ အောငျမွငျမှုကို နှေးကှေးစတေယျလို့ထငျ ပါတယျ။ မွနျမာပွညျမှာက စတော့ဈေး ကှကျဆိုတာကွီးကို နားလညျးလညျ၊ ကစား နိုငျတဲ့ ငှလေညျးရှိတဲ့လူက အငျမတနျ နညျးပါးလှပါတယျ။ လူအမြားနားလညျ တာက ငှတေိုးတှကျခွငျး၊ ရောငျးခွငျး ဝယျ ခွငျးပါ။ ဒါကတော့ တှကျရခနျ့မှနျးရလှယျ ပွီး အရှုံးလညျးမရှိသလောကျပဲဆိုတော့ လူအမြားစိတျဝငျစားနိုငျပါတယျ။ တိုငျး ပွညျကငှတှေလေညျး လညျပတျမှုပိုမွနျ လာမှာဖွဈပါတယျ။
ငှကွေေးဆိုတဲ့အရာက လူသားတိုငျးရဲ့ အဓိကဥစ်စာဓနဖွဈသလို သညျးခွေ ကွိုကျအရာတဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။ သာမနျသုံးစှဲဖို့လိုအပျတဲ့ပမာဏကလှဲလို့ ငှေ ပမာဏအမြားအပွားကို ငှသေားအဖွဈနဲ့ လကျဝယျကိုငျဆောငျထားတယျဆိုတာ ဟာ စီးပှားရေးလုပျနတေဲ့သူအပွငျ သာမနျငှကွေေးခမျြးသာသူတှအေတှကျလညျး နဈနာလှပါတယျ။ ဒါတငျမက တိုငျးပွညျ တိုးတကျရေးအတှကျ ငှကွေေးလညျပတျမှု၊ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုနှုနျးကိုလညျး နှေး ကှေးစပေါတယျ။ ငှကွေေးပမာဏမြားမြားဆိုတာ ကြှနျတျောတို့ငယျငယျက ပြျောပှဲ စားခရီးတှမှောဆော့ဖူးတဲ့ ပါဆယျဂိမျးလို လကျဝယျပိုကျမိသူက ခံရစမွဲပဲ။ ဒီတော့ ငှကေို ကိုယျ့လကျထဲမှာ ကွာကွာမထားဘဲ အကြိုးရှိရာမှာ ပွနျလညျလညျပတျစခွေငျး အားဖွငျ့ လုပျငနျးမြိုးစုံ တိုးတကျလာမှာ ဖွဈပွီး ငှတေိုးနှုနျးကိုလညျး လြှော့ခနြိုငျမှာ ပါ။ လကျရှိမွနျမာပွညျလုပျငနျးကွီးသမား တှအေသာထားလို့ ထိုးဖောကျတီထှငျမယျ့ လုပျငနျးသေးလေးတှအေတှကျ ဒီငှတေိုး နှုနျးဟာ အဓိကအတားအဆီးသဖှယျ ဖွဈနပေါတယျ။ ငှတေိုးနှုနျးကိုတှကျတဲ့နေ ရာမှာ ယနငှေ့တေနျဖိုးနဲ့ အနာဂတျငှေ တနျဖိုးကို နှိုငျးယှဉျပွီးတှကျခကျြလရှေိ့ပါတယျ။ အနာဂတျငှကေိုတှကျရာမှာ ငှေ ကွေးဖောငျးပှမှုကိုလညျး ထညျ့သှငျးစဉျး စားရပါတယျ။ နောကျတဈခုက ဒီငှကေို တခွားမှာ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမယျဆိုရငျ ရမယျ့ အကြိုးအမွတျကိုလညျး ငှရှေငျကထညျ့ တှကျပါတယျ။ နောကျဆုံးတဈခုက ဘယျ သူ့ကိုခြေးမှာလဲ၊ ဘာလုပျငနျးလဲ၊ ဘယျ လောကျစှနျ့စားရမှာလဲဆိုတာကို ထညျ့ တှကျကွရပါတယျ။ ပထမအခကျြဖွဈတဲ့ ငှကွေေးဖောငျးပှမှုဆိုတာကတော့ ဖွဈရ ခွငျးအကွောငျး အမြားကွီးရှိပါတယျ။ တိုငျးပွညျရဲ့ နိုငျငံရေးတညျငွိမျမှုအခွေ အနေ၊ နိုငျငံတကာရငျးနှီးမွှုပျနှံမှု၊ ကုနျ ဈေးနှုနျး၊ ကမ်ဘာ့စီးပှားရေး၊ ဗဟိုဘဏျ ရဲ့အတိုးနှုနျးစတဲ့ အခကျြအလကျတှအေ ပျေါမူတညျတာဖွဈပွီး မညျသူတဈဦးတဈ ယောကျကမှ ခွယျလှယျလို့မရပါဘူး။ ဒါ ပမေဲ့ အခွခေံပမျြးမြှတှကျနညျးတော့ ရှိပါ တယျ။ နောကျတဈခု ဒုတိယအခကျြဖွဈတဲ့ ဒီငှပေမာဏကို မခြေးဘဲ တခွားမှာရငျးနှီး ရငျရမယျ့ အကြိုးအမွတျဆိုတာကလညျး မိမိအသခြောဆုံးရမယျ့ အကြိုးအမွတျကို ထညျ့ပေါငျးတာပါ။ နောကျဆုံးအခကျြဖွဈ တဲ့ ဘယျလောကျစှနျ့စားရမလဲဆိုတဲ့အ ခကျြကတော့ မွနျမာပွညျငှတေိုးကွီးမွငျ့ရ ခွငျးရဲ့ အဓိကအကွောငျးရငျးတဈခုလို့မွငျ ပါတယျ။
ကြှနျတျော အကယျြရှငျးပွပါရစေ။ ကမ်ဘာငှကွေေးဈေးကှကျမှာ ဝငျကစားသူ တိုငျး Risk Management (စှနျ့စားရမှု ကိုတှကျခကျြခွငျး)ကိုလလေ့ာရပွီး ဒီအ ပိုငျးကြှမျးကငျြသူကို လစာအမြားကွီးပေး ခနျ့ထားတာ ဒါမှမဟုတျ အဆိုပါတှကျခကျြ မှုကို အဓိကလုပျကိုငျတဲ့ကုမ်ပဏီကို အခ ကွေးငှပေေးပွီး မိမိရငျးနှီးမွှုပျနှံခငျြတဲ့ ကုမ်ပဏီစတော့ရှယျယာတှကေို စာရငျးပွရ ပါတယျ။ အမြားပိုငျကုမ်ပဏီဆိုရငျ ပို တောငျဆိုးပါတယျ။ မိမိရငျးနှီးမွှုပျနှံထားတဲ့နရောတှဟော ဘယျပမာဏထကျမ ကြျောရဘူး (Risk Index) ဆိုပွီး သတျ မှတျထားလရှေိ့ပါတယျ။ ဥပမာ မိမိရငျးနှီး ထားတာတှကေ မသခြောတဲ့လုပျငနျးတှေ မြားနရေငျ သခြောတဲ့အစိုးရငှခြေေးစာ ရှကျတှဝေယျပွီး စှနျ့စားရမှုကိုလြှော့ခရြ ပါတယျ။ ဒါကတော့ ကမ်ဘာ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှု ဈေးကှကျပေါ့။ မွနျမာပွညျမှာက အခုလို ဈေးကှကျမရှိတော့ မိမိခြေးထားတဲ့ငှေ ကွေးတှအေပျေါ စှနျ့စားမှုကိုလြှော့ခရြတာ အငျမတနျခကျပါတယျ။ ဥပမာ ဆောကျ လုပျရေးလုပျငနျးတှကေိုပဲ ဘဏျတဈခုက ငှကွေေးအမွောကျအမွားခြေးမိတယျဆိုပါစို့။ ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးတဈခုလုံး ထိခိုကျနတေဲ့အခြိနျဆိုရငျ ဘဏျလညျး ပွဿနာတကျပွီလေ။
တကယျတော့ စှနျ့စားရမှုကိုလြှော့ခြ နိုငျဖို့ဆိုတာ ကြှနျတျောတို့ပွောပွောနတေဲ့ National Database လိုအပျပါတယျ။ ဒါမှပဲ တကယျယုံကွညျရမယျ့သူကို အ တတျနိုငျဆုံးငှပေမာဏမြားမြားခြေး၊ မြား မြားခြေးတော့ ငှပေိုလညျပတျ၊ ငှပေိုလညျ ပတျတော့ ငှတေိုးကိုလြှော့ခပြေးနိုငျမှာပါ။ တကယျတော့ ငှကွေေးလငျြမွနျစှာစီးဆငျး နိုငျခွငျးဟာ တိုငျးပွညျ ဘကျစုံ၊ ထောငျ့စုံ ကတိုးတကျဖို့အတှကျ အသကျသှေးကွော သဖှယျ အရေးကွီးပါတယျ။ ငှတှေကေို အိမျခနျးထဲမှာ၊ ဘဏျတှထေဲမှာ မှိုတကျ အောငျထားခွငျးဟာ မိမိစီးပှားရေးထိခိုကျ နိုငျသလို တိုငျးပွညျရဲ့စီးပှားရေးကိုပါ ထိခိုကျလာနိုငျပါတယျ။
နောကျတဈခုက ဘဏျတှရေဲ့ နညျး ပညာအားနညျးမှုကွောငျ့ ငှတေိုးကွီးမွငျ့ရ ခွငျးလို့ထငျပါတယျ။ ငှကွေေးစီးဆငျးမှု ပိုမိုမွနျဆနျဖို့ကို ဘဏျတှကေလုပျပေး သငျ့ပါပွီ။ အှနျလိုငျးစနဈကို စနဈတကြ လုံလုံခွုံခွုံနဲ့ အကောငျအထညျဖျောပေး နိုငျရငျ ငှစေီးဆငျးမှုမွနျဆနျလာမှာဖွဈပါ တယျ။ မကွာတော့တဲ့အခြိနျမှာတော့ ကမ်ဘာပျေါမှာ နှဈပေါငျးမြားစှာ တှငျတှငျ ကယျြကယျြသုံးနတေဲ့ ဘဏျကတျစနဈ၊ အှနျလိုငျးငှေ ပွောငျးငှလှေဲစနဈတှေ ထိ ထိရောကျရောကျသုံးလာလိမျ့မယျလို့ ယူ ဆပါတယျ။ (ဘဏျကတျစနဈကို စတငျ တီထှငျခဲ့တာ ၁၉၄၆ ကဖွဈပွီး ငှအေကွှေး ဝယျကတျကို စတငျအသုံးပွုခဲ့တာ ၁၉၅၈ ကပါ)
လူအတျောမြားမြားဟာ မွနျမာပွညျ ကို အရပျသားအစိုးရ အုပျခြုပျတဲ့ခတျေမှာ နိုငျငံတကာက ရငျနှီးမွှုပျနှံမှုတှေ အလုံး အရငျးနဲ့ဝငျရောကျလာမယျလို့ထငျခဲ့ကွ ပွီး အိမျခွံမွဈေေးတှကေိုတောငျ ကွိုတငျ ပွီး ဈေးကစားခဲ့ကွတယျ။ တကယျတော့ ထငျသလောကျမဖွဈလာပါဘူး။ နောကျ တဈခုက နိုငျငံခွားရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုဆိုတာ သူတို့ဆီက ငှထေုပျပိုကျလာပွီး မွနျမာ ပွညျသူတှကေို လာလှူပေးတာမဟုတျဘူး လေ။ အနီးစပျဆုံးဥပမာပေးရရငျ မသာ အိမျတှကေိုလှညျ့ပွီး ဖဲလိုကျရိုကျ ကွှထေိုး ကစားနတေဲ့ လောငျးကစားသမားတှနေဲ့ပဲ တူပါတယျ။ သူတို့အတှကျကတော့ ဘယျ မှာမသာအိမျရှိသလဲ၊ ဘယျသူတှကေစား နသေလဲ၊ ကွေးက ဘယျလောကျမွငျ့မှာလဲ၊ ကစားလို့ကောငျးတဲ့ မိုးလုံလလေုံအိမျရော ဟုတျရဲ့လား စသညျဖွငျ့တှကျခကျြပွီး လာ ကစားကွတာပါ။ မသာအိမျရှငျကတော့ ညဘကျအစောငျ့ကလေးရ၊ အလှူငှလေေး ဘာလေးရတော့ ရုတျတရကျကွညျ့ရငျ အ ကြိုးရှိတယျလို့ထငျရပါတယျ။ ဒါတှရေဲ့အ နောကျက အကွောငျးတဈခုကို စဉျးစား ကွညျ့ရငျတော့ မိတျဆှတေို့ ရငျလေးမိပွီး မသာအိမျမှနျသမြှကို လှညျ့ပတျကစားနေ တဲ့ ဖဲသမားကွီးတှကေို လကျယပျချေါခငျြမှ ချေါမှာပါ။ အဲဒီအခကျြက မရိုကျတတျရိုကျ တတျနဲ့ ဝငျကစားမယျ့ မသာအိမျပိုငျရှငျရဲ့ ဆှမြေိုးတှေ၊ အိမျနီးခငျြးတှေ၊ မိတျဆှေ တှေ ပရောဖကျရှငျနယျတှနေဲ့ကစားရငျ ရှုံးသှားဖို့မြားမယျ့အခကျြပါပဲ။ ဒီလိုဥပမာနဲ့ ပဲ နိုငျငံတကာရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုတှကေို လေ့ လာကွညျ့ရအောငျပါ။
ကမ်ဘာပျေါမှာ ဒီမိုကရစေီစနဈ အရငျး ရှငျစီးပှားရေးစနဈ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျး ၅၀ အတှငျးမှာ တရှိနျထိုးတိုးတကျအောငျမွငျ လာပွီး ကှနျမွူနဈစနဈကဆြုံးလာခြိနျမှာ နိုငျငံတကာကို စီးပှားရေးလကျနကျနဲ့လှမျး မိုးဖို့ ကျောပိုရေးရှငျးတှမြေားစှာပျေါပေါကျ လာပါတယျ။ အမြားဆုံးကတော့ အမရေိ ကနျနိုငျငံကိုဗဟိုပွုပွီးတော့ပါ။ ဒီနရောမှာ ဘာဖွဈလို့ တခြို့ကျောပိုရေးရှငျးတှကေ သူတို့နိုငျငံမှာလညျးရှိ အမရေိကနျမှာ လညျး ဗဟိုလာပွုသလဲဆိုတော့ အမရေိ ကနျရဲ့စဈအငျအားနဲ့ နိုငျငံတကာအပျေါ ကိုလှမျးမိုးနိုငျမှုကို အခှငျ့အရေးအရယူဖို့ ပါ။ ဥပမာ တိုယိုတာ၊ ဆမျဆောငျး စတာ တှကေ ကိုရီးယား ဂပြနျ ပိုငျတာဖွဈပမေယျ့ အမရေိကနျမှာ လုပျငနျးခှဲကွီးကွီးတှလော ဖှငျ့ပွီး အမရေိကနျအကွိုကျ တာဝနျယူမှု တာဝနျခံမှုအပွညျ့ လာလုပျပေးတာဟာ အမရေိကနျရဲ့ ကွီးမားတဲ့ဈေးကှကျကိုရ ယူဖို့ရယျ၊ အမရေိကနျနဲ့ မိတျဆှရေငျးခြာ ဖွဈဖို့ရယျပါ။ ဒါပမေဲ့ ဘယျလိုရငျးနှီးမွှုပျနှံ မှုမဆို လောငျးကစားကို တရားဝငျပေး လုပျတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ အမရေိကနျက တော့ သူတို့တိုငျးပွညျကို မသာအိမျလိုမ လုပျထားပဲ စနဈတကြ လောငျးကစားရုံပုံစံ မြိုးဖွဈအောငျလုပျထားတော့ တျောရုံက စားသမားတှလေညျး သူနဲ့တှရေ့ငျ ရှုံးကွ တာပဲလေ။ သူတို့မှာ သူတို့အတှကျသာ မယျ့ ဥပဒတှေေ၊ ကစားပုံကစားနညျးတှေ အပွညျ့ရှိတာကိုး။
မွနျမာပွညျရဲ့လကျရှိအခွအေနကေို ပွနျသုံးသပျကွညျ့ရငျ ခိုငျမာတဲ့ ဥပဒတှေေ ရှိမနသေေးပါဘူး။ ကြှနျတျောဆိုလိုတာက ဥပဒကွေမျးတှကေိုပွောတာမဟုတျပါဘူး။ ပိုကျစိတျတိုကျဥပဒတှေကေို ပွောတာပါ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ဥပဒပွေုလှတျတျော အမတျအတျောမြားမြားဟာ နိုငျငံတကာ ဥပဒတှေနေဲ့ အနညျးနဲ့အမြားတော့ အလှမျးဝေးနပေါသေးတယျ။ ဒီတော့ သိသူတခြို့က အဆိုတငျသှငျးတယျထားဦး၊ အမြားစုက လိုကျမမီဘဲ အဆိုတျောတျော မြားမြား အောငျမွငျမှုနညျးပွီး ကောငျးမှနျ တဲ့ဥပဒတှေေ ထှကျလာဖို့မလှယျသေးပါ ဘူး။ နောကျတဈခုက ပွညျတှငျးလုပျငနျး ရှငျအမြားစုကလညျး နိုငျငံတကာအဆငျ့မီ အောငျ စီးပှားရေးလုပျတတျတာ နညျး လှနျးပါတယျ။ ဥပမာ IKEA လို ပရိဘော ဂဆိုငျကွီးတှေ မွနျမာပွညျဝငျလာရငျ မွနျ မာပွညျက တဈနိုငျတဈပိုငျလုပျနတေဲ့ ပရိ ဘောဂဆိုငျတှေ အသကျရှငျဖို့မလှယျပါ ဘူး။ Walmart လို ပစ်စညျးစုံကို ဈေးပေါ ပေါနဲ့ရောငျးခပြေးမယျ့ ဆိုငျကွီးတှပေျေါ လာရငျ ကုနျဈေးနှုနျးတှကေလြာမှာဖွဈပေ မယျ့ ရပျကှကျထဲကကုနျစုံဆိုငျတှေ ပွုတျ သှားမှာကတော့ အသအေခြာပါ။ အိမျသုံး ဆောကျလုပျရေးပစ်စညျးဆိုငျဖွဈတဲ့ Home Depot လို လုပျငနျးမြိုးတှရေောကျလာရငျ တဈနိုငျတဈပိုငျ ဆောကျလုပျရေးပစ်စညျး ဆိုငျတှေ တိမျကောသှားမှာဖွဈပါတယျ။
အခြုပျဆိုရရငျတော့ ပရမျးပတာအ ခွအေနနေဲ့ မသာအိမျဖဲဝိုငျးလိုဖွဈနတေဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှကေို ဥပဒတှေနေဲ့ အသအေခြာကာကှယျထားဖို့ အလှနျလို အပျသလို ပိုကျဆံရှိတဲ့ မိမိဆှမြေိုးမိတျ ဆှနေဲ့တူတဲ့ ပွညျတှငျးစီးပှားရေးသမား တှကေိုလညျး စီးပှားရေးအမှနျတကယျ လုပျတတျအောငျ ပွငျဆငျပေးထားဖို့လိုပါ တယျ။ အရငျခတျေက လယျသိမျးယာ သိမျးအရှုပျတျောပုံခတျေပွီးစမှာ လယျသ မားအတျောမြားမြားလညျး လယျပြောကျ ယာပြောကျဖွဈနခြေိနျ၊ အစိုးရကလညျး ပွနျပေးဖို့ ဖိအားပေးတာ သိပျမအောငျမွငျ သေးတဲ့အခြိနျမြိုးနဲ့တူတဲ့ အခုလိုအခြိနျ မှာ ကြှနျတျောစဉျးစားမိတာလေးတဈခုကို တငျပွပါရစေ။ အသိမျးခံလယျယာပိုငျရှငျ တှကေို ရှယျယာအနနေဲ့ပေးပွီး စိုကျပြိုး ရေး၊ မှေးမွူရေး၊ စကျမှုနဲ့ကုနျခြောထုတျ ရေးတှမှော ပါဝငျခှငျ့ပေးရငျ ဆငျးရဲသား လူတနျးစားလညျး အလုပျတှရေပွီးပြျော၊ လုပျငနျးရှငျတှလေညျး သူတို့ကိုသစ်စာစောငျ့ သိတဲ့လုပျအားတှေ ရလို့ပြျော၊ ငှကွေေးရှိ အမွျောအမွငျရှိတဲ့ ခရိုနီသူဌေးတှဦေး ဆောငျတော့ နညျးပညာနဲ့ အဆကျအ သှယျလညျးမပူရ၊ အခွခေံကုနျဈေးနှုနျး လညျးအလှနျကပြွီး ပွညျတှငျးတငျသာမ က ပွညျပနိုငျငံတှကေိုတငျပို့နိုငျတဲ့ ကုနျ ပစ်စညျးတှမြေားစှာပျေါထှနျးပွီး မွနျမာပွညျ ဟာ အရှတေ့ောငျအာရှမှာ နိုငျငံခွားကုမ်ပဏီ မြား အလုအယကျလာရောကျခငျြတဲ့ တိုငျး ပွညျတဈပွညျဖွဈလာလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့မိတာလေးပါပဲ။